Weydii - Jawaabo Ka hel - Ka hel caawimaad khabiiro ku saabsan murqaha, dareemayaasha iyo jirrooyinka xubnaha
Weydii - Hel Jawaab!
Ma haysaa wax aad ka yaabiso arrimaha muruqyada? Markaa raadi aagga aad su'aalaha ka qabtid oo isticmaal goobta faallooyinka - ama isticmaal mid ka mid ah xulashooyinka lagu taliyay ee hoose. Sidoo kale waad nala soo xiriiri kartaa si toos ah boggayaga Facebook.
- Waxaan talo ka bixinnaa lafopractors, jimicsiga jirka iyo takhasusleyaal
Dhakhaatiirtayada isku xiran ee loo yaqaan 'chiropractors', jimicsiga jimicsiga iyo khabiirada takhasuska leh waxay bixiyaan talo bixin, talo bixin, jimicsi, iyo ficilo gaar ah oo loogu talagalay si toos ah dhibaatadaada. La wadaag tan qof u baahan caawimaad dheeri ah ama dhiirigelin xagga dagaalka nolol maalmeedka aan xanuun lahayn.
- Mararka qaarkood ka bixida xanuunka daba dheeraada waxay dareemi kartaa inaad ku qasbayso buur. Nagala soo xiriir halkan qaybta faallooyinka ama farriin ku soo dir boggayaga Facebook horeba maanta. Markaas ayaan kaa caawin karnaa su'aalahaaga si wadajir ahna waxaan u kori karnaa buurta xanuunka.
NEW: - Hadda waxaad weydiin kartaa su'aalo si toos ah Ku-xirnaanta chiropractor!
Alexander wuxuu haystaa shahaadada mastarka ee loo yaqaan 'chiropractic' wuxuuna u shaqeynayay sidii loo yaqaan 'chiropractor' tan iyo 2011 - wuxuu ka shaqeeyaa Kiropraktorhuset Elverum. Wuxuu leeyahay karti ballaadhan oo la xiriirta dhibaatooyinka ka dhex jira xanuunnada muruqyada - wuxuuna leeyahay diiradda sare ee caddaynta bukaanka sidoo kale wuxuu helayaa talobixinta / layliyada / hagidda tababarka / la qabsiga ergonomic ee u oggolaanaya inay ku gaaraan horumar muddo dheer ah ee dhibaatooyinkooda, iyo sidan ka ilaali xanuunka inuu soo noqnoqdo. Wuxuu ku nool yahay hal ku dhigga ah 'jimicsiga ayaa ah daawada ugu fiican' wuxuuna isku dayaa inuu dhiirrigeliyo dhaqdhaqaaq badan oo nolol maalmeedka ah iyada oo loo marayo waxqabadyo maalmeedka sida socodka iyo barafka waddanka, laakiin sidoo kale wuxuu ogyahay inay noqon karto geeddi-socod ballaaran oo looga baxo godka xanuunka markii aad halkaas ku dhammaato. . Sidaa darteed, la-talinta, laylisyada iyo tallaabooyinku sidoo kale waa kuwo ku habboon qofka. Guji sawirka eller iyada inuu weyddiisto su’aal.
Waxaan nahay mid adeeg lacag la'aan ah halkaas oo Ola iyo Kari Nordmann ay jawaabo uga heli karaan su'aalahooda ku saabsan dhibaatooyinka caafimaad ee muruqyada. Waxaan leenahay xirfadlayaal caafimaad oo gacansaar leh oo wax noo qora. Qorayaashani waxay tan u sameynayaan oo kaliya inay awoodaan inay caawiyaan kuwa sida ugu badan ugu baahan - iyagoon wax lacag ah ku dalacin. Waxa kaliya ee aan weydiisaneynaa waa taas waxaad jeceshahay boggayaga Facebook, casuun asxaabtaada inaad sameyso isla (isticmaal batoonka 'saaxiibbada ku marti qaado' boggayaga Facebook) iyo wadaag posts aad jeceshahay warbaahinta bulshada. Sidan ayaan ku qaban karnaa Caawi dadka ugu badan ee suuragalka ah, iyo gaar ahaan kuwa aadka ugu baahan - kuwa aan daruuri karin inay bixiyaan dhowr boqol oo karoon wadahadal gaaban oo lala yeelanayo xirfadlayaasha caafimaadka.
Waxaan si naxariis leh kaaga codsaneynaa inaad isticmaasho meelaha faallooyinka ee qaybaha la xiriira, maadaama tani ay xaqiijin doonto inaad hesho jawaabo dhakhso leh oo dhammaystiran. Su'aalaha halkan ku yaal boggan laguma kala hormarin doono isla laynka su'aalaha ee ku saabsan bogga ku habboon.
Waa tan sida:
Dhab ahaantii waannu u mahadnaqaynaa haddii aad u dhaqaaqaysid cudurkaas (tusaale. bukay crystal) / mawduuc aad rabto inaad caawimaad ka hesho mid kamid ah qeybta raadinta ee midigta sare ama qeybta sare. Kadib u adeegso sanduuqa faallooyinka ee xagga hoose ee bogga si la mid ah sida aad halkan ugu sameyso boggan.
Qaar ka mid ah boggaga mawduucyada sida caadiga ah loo booqdo ayaa inta badan la weydiiyaa:
- Cagaha xanuun
- Cudurka Crystal / BPPV
- Dhaawaca Meniscus / jilibka jilibka
Ola R. wuxuu leeyahay,
Waxaan la dhibtoonayay xanuunka gumaarka ku dhawaad ​​2 sano. Wax badan isku dayday, laakiin waligaa natiijooyin ma helin.
Markii ugu horeysay ee aan dareemo xanuunka waxay ahayd Maajo 2013. Waxaan haystay 7-8 tababar kubbadda cagta todobaadkii waxaanan aaday khadka isboortiga ee dugsiga sare. Waxaan lahaa jimicsi 4/5 maalmood todobaadkii halkaas oo 2 ka mid ah maalmaha ay ahaayeen kubbadda cagta oo leh ciyaaraha ugu sarreeya. Tababarka kubbadda cagta ayaa ahaa doog macmal ah, fasallada jimicsigana waxay ahaayeen kuwo dabaq adag ah, sidaas darteed culays badan ayaa jiray.
Intii lagu jiray bishii Maajo 2013, waxaan si lama filaan ah iigu xanuunay gumaarka bidix intii lagu jiray jimicsi. Waxaan ka tanaasulay maalinta oo aan mar kale isku dayay jimicsiga xiga, xanuunku weli wuu jiray. Waxaan u tagay dhakhtarka jimicsiga jirka waxaanan sameeyay xoogaa jimicsi ah si aan u xoojiyo gumaarka. Layliga ayaa la sameeyay 3 toddobaad. Wax natiijo ah kama helin jimicsiga
Waxaan bedelay naadiyada waxaana helay dhakhtar cusub oo jimicsiga jirka ah, wuxuu i siiyay jimicsi isku mid ah waxaanan sameeyay ilaa 4 usbuuc horumar la'aan. Dabadeed waxa uu ii diray dhakhtarka lafopractor. In yar ayuu tijaabiyay jilicsanaanteyda iyo in wax waliba ay toosan yihiin iyo in kale.
Waxaan helay xoogaa jimicsi ah oo iskala bax ah si aan u noqdo mid jilicsan oo u dhaqaaqo. Waxaan dareemay inay xoogaa caawisay, laakiin malaha waxay ahayd sababtoo ah waxaan ka jilcay jimicsiga.
Waxaa la ii diray MRI. Waxa ii soo baxday in gumaarkaygu aad u fiican yihiin.
Waxa uu xanuun ka dareemay gumaarka bidix iyo midig, laakiin inta badan waxa uu ku jiray bidixda.
Dabadeed waxaan noqday daaweeyaha cuntada/misigta. Waxa la ii sheegay in dhabar xanuun iyo miskaha yara qalloocan yahay, taas oo sababtay in gumaarkaygu cidhiidhi galo. Waxaan sameeyay jimicsiyo ka dhigi kara miskaha mid toosan. Layliga waa in la sameeyaa 3 bilood. Isla markii aan u tagay daaweeyaha gacanta, waxaan sidoo kale aaday jimicsiga jirka. Tan waxaan u sharxay physio-ga dhabarka ku leh qalooca. Waxaan sameeyay jimicsi si aan u xoojiyo muruqyada ku wareegsan miskaha.
Ka dib 2-3 bilood oo aan qaatay jimicsiga iyo tababarka adag, waxaa igu yaraatay xanuunka dhabarka waxaanan noqday mid toosan / aad u deggan miskaha. Laakiin weli ma hubo in tani ay tahay dhibaatadu.
Acupuncture ma noqon karaa xal?
Waxaan aad ugu mahadcelin lahaa jawaab-celinta ku saabsan waxa aad u malaynayso in xanuunka sababa uu noqon karo iyo sida ay suurtogal u tahay inuu baxo.
Hi Ola, si aan u soo koobo xoogaa oo la imow su'aalo daba-gal ah.
- Xanuunkaagu wuxuu ku bilaabmay hawl-karnimo jidheed oo daran bishii Maajo 2013. Tani waxay ina siinaysaa sabab aanu u rumaysnahay inuu yahay muruqa. Mid ka mid ah murqaha ugu caansan ee saameeya inta lagu jiro kubbadda cagta waa iliopsoas (sinta flexor).
- Dhaqdhaqaaqadee ayaa xanuun badan? Markaa waxaynu ka fikirnaa dhabarka iyo sinta labadaba.
- MRI dhabarkaaga hoose miyaa sidoo kale la qaaday mise gumaarka / sinta oo keliya? Diska-baxa waxay tixraaci kartaa xanuunka gumaarka haddii ay saamayso neerfaha 'saxda'.
Jawaabo kale oo dhammaystiran ayaa iman doona marka aan ka saarno dhowr cudur oo kale oo leh su'aalahan oo kale.
curcurka wuxuu leeyahay,
Waxaan tagay shabakado badan, oo u badan kuwa xirfadlayaasha ah sida
dhakhaatiirta jimicsiga jirka iyo lafopractors.
Waa maxay wax yar oo la yaab leh ayaa ah in ku dhawaad ​​qof kastaa uu kugula taliyo jimicsiyadan halka mid
curcurka gadaal buu u leexiyaa, (kordhin?)
Waxaan si macquul ah u hubaa inuu yahay layligan sida had iyo jeer
waxay igu keentaa xanuunkan gacanta bidix.
Waxaan rabaa jawaab celin, fikrado tan.
Iyo hal shay oo kale, dhammaan boggaga internetka ee jimicsiga jirka iyo lafopractors waa in lagu daro
Muhiimadda ay leedahay in aan aad loo kala bixin haddii aad leedahay kala-goysyada moobilka.
Tani waa wax aan ogahay in dhakhaatiirta jimicsiga jirka iyo lafopractors ay dhif ah sameeyaan
sheegayo. waa wax aan nafteyda ku akhriyay.
Aniga naftayda ayaan daawayn u tagaa, toddobaadle.
Waan ka xunahay jawaabta daahsoon.
Jimicsiyada lagu taliyay waa in lagu waafajiyaa ogaanshahaaga gaarka ah. Ma laga yaabaa in layliga fidinta ee aad hiigsanayso ay yihiin 'layliyada fidinta eccentric'? Waxaa loogu talagalay epicondylitis lateral / suxulka teniska, waxayna hayaan caddayn wanaagsan.
Waxaad sheegtaa in aad xanuun ka qabto gacantaada bidix - waa maxay xanuunka? Ma yihiin kuwo joogto ah, mise way ku kala duwan yihiin culeyska - oo miyaad qabtaa xanuunka habeenkii? Sidoo kale ma ku xanuunaysaa xusulkaaga?
Sawirro ma laga qaaday gacantaada? Ma lagaa baadhay carpal tunnel syndrome?
Halkan ka aqri faahfaahin dheeraad ah:
Anigoo sugaya inaan mar kale ku maqlo warkaaga. Waxaan rajeyneynaa inaan ku caawin karno.
Hi iyo mahadsanid jawaabta!
Saddex qoraal oo dhaadheer ayaan halkan kaga jawaabay hadda
maanta, laakiin website-kani wuxuu cusbooneysiiyaa markaan
soo dhawaada dhamaadka, ka dibna boostada waa la waayayaa iyo
Waa inaan mar kale bilaabo. Hadda aad baan uga cadhooday oo ma aanan samayn
Orcs ayaa mar kale bilaabanaya.
Hi mar labaad, curcur
Waan ka xunahay seegay maamulahayaga webka. Waxay ahayd nooc cusub oo toos ah oo ku saabsan waxa ku jira bogga todobadii daqiqiba. Qaladka hadda waa la saxay.Waa inuu ahaa mid aad uga cadhooday inuu qoray qoraal dhammaystiran oo keliya si loo arko inuu meesha ka baxayo. Waxaan rajeyneynaa inaan war kaa maqalno isla marka aad fursad u hesho.
Monica BJ wuxuu leeyahay,
Halkan ka akhri bogga ku saabsan Plantar Facitt.
Isagoo ka yaaban layliga rogan ee la sheegay, ha fahmin sida loo sameeyo. Dhawr sano oo dhibaato ah ka dib waxaan quus ka taaganahay inaan sameeyo wax fir fircoon si aan isugu dayo inaan ka roonaado…
Waad ku mahadsan tahay su'aashaada ku saabsan jimicsiyada fasciitis plantar (akhri: https://www.vondt.net/ovelser-og-uttoyning-av-plantar-fascia-haelsmerter/)
Rogista cagtu waxay ka dhigan tahay in cagaha cagaha loo soo jiido midba midka kale (gudaha) meel dhexdhexaad ah. Bilawga, waxaad si fudud u samayn kartaa tan adigoon iska caabin dheeri ah lahayn - ka dibna si aad u dhaqaajiso isticmaalka muruqa saxda ah kaas oo kaa caawin kara nafiska cirifka cagta oo ku beero fascia. Markaad ciribta cagahaaga gudaha u soo jiido midba midka kale, waa inaad dareentaa inaad murqaha ku mashquulsan tahay bannaanka kubka (peroneus).
Ma samayn kartaa?
Qaar ka mid ah su'aalo yar oo dabagal ah:
1) Miyaa lagu xaqiijiyay haddii aad qabtid fasciitis plantar leh ama aan lahayn ciribta cidhibta? Haddii ay jiraan cirbadaha ciribta, waxay muujin kartaa in dhibaatadu ay sii jirtay muddo iyo in laga yaabo inay aad u adag tahay in laga gudbo.
2) Ma isku dayday taageero cidhib ah oo si gaar ah loo habeeyay si aad u nafiso dabada cagta iyo daabka cagta (haddii kale, waxaan ku talinaynaa tan: https://www.vondt.net/behandling-plantar-fascitt-plantar-fascitt-haelstotte/)?
3) Tallaabooyinka daawaynta ee aad hore isku dayday? Ma isku dayday daawaynta hirarka cadaadiska?
4) Sidee buu dhibku ku bilowday? Isticmaalka xad dhaafka ah ee dusha adag ee aan lahayn kabo wanaagsan oo la taageeray, malaha?
Salaan mar labaad
Layliga: yacni, ku fadhiista kursi, tusaale ahaan, iyadoo lugahaagu dabacsan yihiin, sidoo kale suulashaada waaweyn / cagahaaga ayaa midba midka kale u foorarsadaa?
Miyaan laga helin ciribta ciribta, mana dareemayso inay taasi tahay.
2. Ma isku dayin taageerada ciribta. Waxa uu lahaa kabo cirrid ah oo uu habeeyay dhakhtarka jimicsiga. Taageerada ciribta miyaanay ahayn iib Norway?
3. Soles kaliya.
4. Culayska xad dhaafka ah iyo korodhka degdega ah ee culayska, oo ay weheliso cayilka.
Haa, fudud oo fudud. 🙂
Ciribta ciribta waxaa lagu ogaan karaa RTG, MRI ama ultrasound ogaanshaha.
2. Inta badan la iibiyo waa nooca jel ee aad geliso ciribta kabaha. Kumaanu arag taageero buuxda oo tan la mid ah halkan dukaamada, maya. Laakiin waxaa laga yaabaa inay si fiican u jirto.
Hagaag, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad xoogaa diirada saarto jimicsiga iyo tababarka hadda - xasuusnoow inay jiraan toddobaadyo aad u adag ayaa kaa horreeya (gaar ahaan afarta hore), maadaama aad dhab ahaantii jebiso murqaha (sidaa darteed taageerada yar) hortaada ka hel waxa loogu yeero 'magaca-baxa sare' ee muruqyada ku habboon.
Akhri wax ku saabsan daaweynta mowjadda cadaadiska ee fasciitis plantar halkan:
Waa inuu noqdaa kan ugu waxtarka badan marka loo eego cilmi-baarista. Lagu daray tababar gaar ah.
4. Faham. Ku ordaya asphalt?
Markaa waa inaan tijaabiyaa jimicsigaas?
Waxa laga yaabaa in ay hubiso in ciribta ciribta ah ee suurtogalka ah in muddo ah haddii aanay soo rayn.
Isku day jel suuf ah oo ciribta hoosteeda ah, si naxariis darro ah ayaa loo dhaawacay. Hadda waxaan haystaa kabo taageera oo ka hooseeya qaansada cagta, oo waxay dareemeysaa wanaag. Kabaha leh cidhib yar oo dhaadheer ayaa sidoo kale si fiican u shaqeeya, shaqada iyo sida.
Kumaan ordin asphalt, laakiin waxay u badan tahay inaan aad u xiisay markii aan bilaabay 🙁
Rajo in jimicsiga, iskala-bixinta, nasinta iyo miisaan dhimista ay hadda ku caawin doonaan.
Waxaan kuu rajeynayaa nasiib wacan! 🙂 Noo sheeg haddii aad hayso su'aalo kale - oo haddii kale xor u noqo inaad u sheegto asxaabta iyo qoyska inay su'aalo ku weydiin karaan halkan ama bogga Facebook.
Ole wuxuu leeyahay,
Hi waxa i dhibay dhabarka iyo qoobka bidix. Hadda waxay hoos ugu dhaadhacday gumaarka, halkaas waxaa i haya xanuun aad u weyn markaan socdo, hadda waxaan qaataa daawo adag, waxba ima caawinayso.. waxaan sugayaa inaan tago MRI, waxaan la yaabanahay sababta daawadu u shaqeyn weydo .
Waad ku mahadsan tahay Ole.
Dareen xoriyada aad in yar si buuxda nooga sheegto dhibaatooyinkaaga iyo xanuunkaaga - ka dib waxaan ku siin karnaa jawaab yar oo faahfaahsan waxaana laga yaabaa inay ku caawiyaan wax yar inta aad jidka ku jirto.
- Goorma iyo sidee buu xanuunka dhabarku ku bilaabmay?
- Daawo noocee ah ayaad qaadataa? Ma muruqa nasinaya? Xanuun ka-yaraynta? Xanuun baabiiyaha neerfaha? Maxaa lagu magacaabaa? Waxaa laga yaabaa in laguu qoray nooca xanuunka baabi'iyaha qaldan ee la xiriira dhibaatadaada?
- Sideed ku sifayn lahayd xanuunka? Sida mindida xanuunka korontada? Kabuubyo? Miyaad la kulantay daciifnimo muruqa lugtaada bidix?
- Xanuunka gumaarka iyo sinta ma ka sii daraa markaad hore u foorarsato? Dhab ahaantii waxay u ekaan kartaa inaad leedahay calaamadaha sciatica (akhri: https://www.vondt.net/hvor-har-du-vondt/vondt-i-korsryggen/isjias/)
Waxaan sugayaa inaan adiga kaa maqlo.
RR wuxuu leeyahay,
Hi! Qabo su'aalo ku saabsan cirib xanuunka. Ka dib markii aan uurka dhammeeyey, waxaa igu dhacay xanuun labada cirib ah. Laga soo bilaabo xanuunka miskaha iyo dhaqdhaqaaq yar oo ku socda wheel wheels, qaar ka mid ah asphalt iyo quruurux. Waxaan dareemay inaan xanuun ka dareemayo bannaanka cagahayga, laakiin aan dhaawacmin. Si lama filaan ah maalin maalmaha ka mid ah ayaan wanaag ka dareemay labada cirib hoostooda. Waxaan u tagay dhakhtarka oo sheegay in uu jiro barar ku saabsan suufka xaydha ee cidhibta sababtoo ah miisaanka oo kordhay iyo in aan noqday qof firfircoon. Waan akhriyay wax ku saabsan fasciitis plantar, laakiin dhakhtarku wuxuu u maleeyay inaysan ahayn marka xanuunku hooseeyo iyo dhinacyada ciribta. Helay Orudi si uu u saliidiyo. Waxaan ka helay naprapat soles Waxa kale oo uu u maleeyay in aanay ahayn fasciitis plantar maadaama xanuunku aanu ka fogayn cagaha hortiisa. Halkee ayay tahay in xanuunku noqdo sababtoo ah bararka qanjidhada sebaceous ee cidhibta? 2 usbuuc ka hor waxaa i xanuunay ciribta oo aan cidhib iyo nasteexo midna i caawin. Hoos ayaan u dhigaa oo waxaan kor u qaadaa suulashayda maalin kasta. Waxay la socotaa kabaha kabaha gudaha iyo dibaddaba. Ilaa intee ayay tani ahaan kartaa? Waxa uu heshiis kula galay daawaynta mawjadaha cadaadiska ugu dambayntiina naprapat. Saadaasha inay wanaagsan tahay?
Xanuunkaagu wuxuu sii jirayaa 2 toddobaad, markaa waxaad weli ku jirtaa marxaladda daran ee dhibaatada. Labada fasciitis plantar iyo bararka ciribta ciribta labaduba waxay qaadan karaan toddobaadyo, bilo ama mararka qaarkood ilaa hal sano oo buuxa ka hor bogsashada. Dhammaan waxay kuxirantahay sida arrimuhu u muuqdaan gudaha cagtaada. Tani waxay ina keenaysaa su'aashayada koowaad:
- RTG ama MRI ma lagaa qaaday cagahaaga? RTG waxaad marar badan ku arki doontaa ciribta ciribta haddii ay tahay fasciitis plantar. MRI-ga, waxaad ku arki kartaa dhumuc weyn oo ah fascia plantar haddii uu jiro fascia plantar.
- Waxay u egtahay in aad qaadayso tillaabooyinka saxda ah adiga oo kor u qaadaya suulashaada iyo dhogorta maalin kasta. Sidoo kale ma fidisaa fascia plantar?
- AKHRI WAX DHEERAAD AH: https://www.vondt.net/ovelser-og-uttoyning-av-plantar-fascia-haelsmerter/
Haddii kale waxaad sheegaysaa inaad ku heshiisay daawaynta mawjada cadaadiska ee naprapat. Tani waxay u egtahay wax aan macno lahayn haddii aad na weydiiso, sababtoo ah daawaynta cadaadiska cadaadiska waa in si gaar ah loo isticmaalo si gaar ah oo ka dhan ah natiijooyinka (tusaale ka dib ogaanshaha ultrasound iyo sawirka MRI). Nasiib darro, dad badan ayaa isticmaala daawaynta mawjada cadaadis aad u badan iyaga oo aan ogeyn waxa ay u egtahay cagtaada - sidaas darteed waxaa jirta fursad sare oo ah in aysan ku dhufan doonin meelaha saxda ah iyo inaad lacag ka tuurto daaqada. Naprapath ma lahan lacag celin Marka la barbardhigo, daaweynta lafopractors ama daaweeyayaasha gacanta ayaa qayb ahaan dib loo bixiyaa. Waxa kale oo laga yaabaa inay mudan tahay in la hubiyo haddii aad leedahay caymis caafimaad oo daboolaya daawayntan.
- AKHRI WAX DHEERAAD AH: https://www.vondt.net/trykkbolgebehandling-av-fotsmerter-grunnet-plantar-fascitt/
Dhakhaatiirta GP-yada, lafopractors ama daaweeyayaasha gacanta ayaa dhamaantood tixraaci kara baaritaannada sawir-qaadista ee noocan oo kale ah - labada dambe waxay sidoo kale leeyihiin tababar ballaaran oo ku saabsan daaweynta cudurrada aan soo sheegnay, taas oo markaa horseedi karta baaritaan degdeg ah iyo daaweyn waxtar leh.
Waxaan haynaa talo ku saabsan taageerada ciribta fascia plantar:
- AKHRI WAX DHEERAAD AH: https://www.vondt.net/behandling-plantar-fascitt-plantar-fascitt-haelstotte/
Ma isku dayday taageeradan cidhibta ah ama wax la mid ah?
Kari-Anne Strøm Tvetmarken wuxuu leeyahay,
Hello. Waxaan la dhibtoonayay xanuunka guud ahaan jirkayga tan iyo 2010. Qoorta ayaa ugu xun, waxay ahayd xanuun tan iyo 2005. Laakiin arrintu waxay tahay in markaan ku tababarto mishiinka elliptical ama aan socdo, waxaan ku xanuunsadaa cirridyada hoostooda. cagaha oo waxay "ku dhegtaa" gacmahayga iyo gacmahayga . Inaad tagtay dhakhtarka oo aan midkoodna laga baarin. Waxa kale oo uu ku jiray MRI qoorta, oo uu ku taliyay naprapath. Qoortu ma soo dhicin, kaliya xidho. Maxaan u sheegi karaa dhakhtarkayga, sababtoo ah hadda waxaan ku daalay jimicsiga oo aan caawinaynin xanuunka i haya.
Ma jiraan wax gaar ah oo dhacay ka hor 2005 ama 2010? Dhaawac ama shil ama wax la mid ah? Mise xanuunku si tartiib tartiib ah ayuu u yimid?
'Tingling' waxaa sababi kara dhowr waxyaalood, laakiin badanaa waxay la xiriiri kartaa shaqada neerfaha ama halbowlaha. Miyaad leedahay taariikh qoys oo ku saabsan dhacdooyinka wadnaha iyo baarista?
Fikradda ka dambeysa MRI ee qoortu waxay ahayd mid wanaagsan, laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo aan ahayn soo dhicis kuwaas oo sidoo kale keeni kara calaamado la mid ah.
Sideed uga jawaabtay daawaynta? daaweeyahaagu ma isku dayay dhawr hab oo kala duwan?
Sida fudud oo is-cabbiridda ah, waxaan kugula talineynaa inaad ku bilowdo jimicsiga abaabulka ee rullaluistemadka xumbo, maadaama ay kuwani hagaajin karaan shaqada halbowlaha (kiliinikada la xaqiijiyay).
Waxaan rajeyneynaa inaan mar kale ku maqalno, iyo inaan ku sii caawinno.
Monica Pedersen wuxuu leeyahay,
Ogosto 2012; MR tiirka laf dhabarta; Iftiin ilaa dhexdhexaad ah saxan dillaacsan C5/C6. Waxoogaa is beddela Th6/ Th7 laakiin haddii kale wax hadal ah lagama arki karo tiirka thoracic. Ma jiro wax isbeddel ah oo calaamad ah oo lagu arko Medulla. MR LS -Column: Saddexda saxan ee hoose waa fuuqbaxay laakiin qiimaha magaca Inge ayaa aad hoos ugu dhacay. Saxan yar ayaa ku bararsan saddexdan heerar iyo sidoo kale calaamadaha dillaaca anulus fibrosus ee labada hoose. Heerka L5 / S1, saxanku wuxuu taabtaa xididka bidix ee S1 laakiin wax saameyn ah kuma laha. Heerarka kale ma jiraan wax calaamado ah oo saameynaya dhismayaasha neurogenic. Maxaad ku talin lahayd in aan tan ku sameeyo, xanuun badan ayaa i haya markaan fadhiyo iyo markaan socdo, waxaa la ii dhiibay kursi curyaan. Samee fasalka jimicsiga usbuuc kasta oo ku celceli yoga naftayda, laakiin waxaa murugo leh xanuun badan oo iga dhigaya inaan awoodin inaan aado wax ka badan dhowr tillaabo. Waxa ay iga fogaysaa xanuun-baabiyeyaasha ilaa inta suurtogalka ah ee ma kicinayso tan. Laakin aad baan u caajisay oo ku weydii ra'yi gacan labaad ah. Waad ku mahadsan tahay Monica
Waan isku dayi doonaa inaan kaa caawino taas, laakiin markaa waxaan u baahanahay macluumaad yar oo faahfaahsan maadaama aanan adiga shakhsi ahaan kuu baari karin.
- Horta, aaway xanuunka iyo intee in le'eg ayaad haysaa? Miyay si degdeg ah u dhaceen (tusaale shil ama dhaawac ka dib?) Mise si tartiib ah ayay u yimaadeen?
- Waxaad sheegtaa in saxanku taabto xididka S1 - tani waxay caadi ahaan ka dhigan tahay inaad hesho kalgacal xidid. Ma ku haysaa koronto, xanuun aad u daran ilaa lugta iyo cagta dhanka bidix? Ma leedahay daciifnimo muruqa lugtaada bidix?
- Waxa la sheegay in aanad dhawr tillaabo ka dheerayn ka hor inta aanad dhaawacin. Ma dareemeysaa lugahaaga inay fashilmeen ama wax la mid ah, markaa waa inaad u fariisataa nasasho? Dhabarkaaga hoose iyo lugahaagu miyay ku xanuunayaan markaad hore u foorarsato?
- Waxaad qortaa 'MR thoracal column', tani caadi ahaan kuma jiri doonto qoorta, laakiin waxaad weli wax ka qortaa heerarka C5 / C6 - taasi macnaheedu ma waxaad sidoo kale qaadatay sawirka MRI ee qoorta?
- Yoga waa wanaagsan tahay, tababar badan, marka way fiicantahay inaad tan sameyso. Haddii kale, dhaqdhaqaaqa guud waa la dhiirigeliyaa, oo doorbidaya socodka iftiinka ee dhul qallafsan.
- Waxaad aadaa physio 1x wiiggii. Sideed uga jawaabtay daawaynta? daaweeyahaagu ma isku dayay dhawr hab oo kala duwan?
- Daawaynta qabow, tusaale; Biofreeze (wax badan ka akhri / halkan ka iibso: http://nakkeprolaps.no/produkt/biofreeze-spray-118-ml/) waxay kaa nafisaa xanuunka murqaha, kalagoysyada iyo neerfaha.
SG wuxuu leeyahay,
DHAQAALAHA ISCHIOFEMORAL; Hi, waxaan la halgamayay xanuunka joogtada ah ee kursiga iyo hoos dhabarka bowdada dhowr sano. Waxay dhibco u tahay sida cirbadaha cagta hoosteeda. Waxaan u tagay daaweeye kasta oo la malayn karo. Dhaawaca Labrum waxa la ogaaday 2012. Waxa la igu daweeyay dhaawaca labrum arthroscopically. Waxay ogaadeen intii lagu jiray arthroscopy-ga in aan qabo osteoarthritis ee wadajirka sinta. Waxa aan rajaynayay in xanuunka cagahaygu iga tagi doono, laakiin markaa. 2014, raajada iyo MRI labadaba waxay muujiyeen meel yar oo loogu talagalay femoris quadratus, taas oo u dhiganta ischiofemoral impingement. Wali ma helin wax caawimo ah tan. Ka hel macluumaad yar oo arrintan ku saabsan gudaha Norway, kaliya goobaha shisheeye. Sannad ka hor, ugu dambayntii waxa ii qoray GP-gayga neurontin. Intaa ka hor waxaan seexday ugu badnaan 2 saacadood maalintii xanuunka dartiis. Tani waxay wax u dhimaysaa tayada noloshayda, noloshu waa la hayaa. Su'aashaydu waxay tahay; Ma jiraan wax caawimo ah oo loogu talagalay ischiofemoral impingment ee Norway?
Dhab ahaantii waanu kaa caawin doonaa arrintan. Waxaan hadda u dirnay su'aalo goob khubaro ah si aan kuugu helno kaalmada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Waxaan dib uga faalloon doonaa halkan dhowr maalmood gudahood.
Maalin wanaagsan weli!
aad baad u mahadsantahay, waxay u egtahay mid aad u wanaagsan !!
Salaan mar labaad, SG,
Annagu kuma aannu iloobin, laakiin waxay qaadatay wakhti aad u dheer in jawaab laga helo khubarada. Waxaan hadda ka shaqaynaynaa in aan xogta ka helno kooxo kale, oo uu ku jiro khabiir ku sugan England. Waxaan dhahnaa markaan wax maqalno.
Adigoo sugaya jawaabtaada haa!
Anaguna sidoo kale. Waxaan kuu balan qaadeynaa inaan ku ogeysiin doono markaan wax maqalno. 🙂 Haddii kale, waxaan si dabiici ah u soo jeedineynaa waxyaabo aad u badan tahay inaad maqashay boqol jeer ka hor - kala bixinta muruqa piriformis iyo barida, maalin kasta, 3 × 30 ilbiriqsi. Waxa kale oo ay noqon kartaa mid waxtar leh in la isticmaalo rullaluistemadka xumbo ka dhanka ah bannaanka bowdada si cadaadiska looga saaro ischium iyo glutes. Haddii aad u maleyneyso in daawaynta qabow ay si deggan u shaqeyso, markaa waxaan maqalnay waxyaabo badan oo wanaagsan oo ku saabsan Biyo qabe dadka qaba dhibaatooyinka kursiga iyo sciatica / sciatica.
Dagamar T. wuxuu leeyahay,
La halgamaya Polyoneuropathy (fiber khafiif ah). Dhakhtarkaygu waxa uu leeyahay ma jiraan wax laga qabto. Leeyahay xanuun badan/ku socda dhagaxyo ku yaal baarka dhulka. Waxa uu leeyahay xanuun ilaa gumaarka oo barara. Waxay noqon kartaa ilaa 4 cm farqi ah. I caawi. Dagamar T.
Uma eka inaad si gaar ah u roon tahay. Si aan u awoodno inaan ku caawino, waxaan u baahanahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan xanuunkaaga, sida sababaha suurtogalka ah, bilawga, xanuunka xanuunka iyo sawiradii hore. Aad bay u fiican tahay haddii aad wax yar ka qori lahayd xanuunkaaga.
Ma helaysaa? Waxaan rajeyneynaa inaan ku sii caawinno.
PS - Waxaad qortaa "farqiga 4 cm". Maxaad uga jeeddaa? Ma intaas baa dhererka lugta aad sheegaysaa? Xaaladdaas, waxaan runtii rajaynaynaa inaad heshay hagaajinta keli ah ee takhasusle (!)
Patrick J. wuxuu leeyahay,
Waxaan qabaa hal su'aal oo kaliya: Waxaan ku xanuunayaa dhinaca midig ee dhabarka hoose ee xagga sare ee badhida midig. Tani waxay dhacday hal usbuuc oo tababar ah ka dib, waxaan la yaabay inay noqon karto guntin muruq ah, maadaama aysan ahayn qalfoofka xanuunka aan qabo, laakiin meel ku xigta. Waan ordi karaa oo si fiican ayaan u socon karaa, laakiin waa marka aan dhabarka leexiyo ama aan ku tiirsado lugahayga midig ka ay i xanuunayso. Waxaan isticmaalay rullaluistemadka xumbo si aan isugu dayo inaan "jilciyo", laakiin weli way xanuunaysaa. Markaa waxaan la yaabanahay maxaan sameeyaa?
Waxaa laga yaabaa in uu jiro quful ka mid ah laf-dhabartaada iliosacral oo leh guntimaha murqaha / myalgias ee ku jira quadratus lumborum iyo muruqyada gluteal. Suurtagal ma tahay in aad heshay culays qalloocan markii aad tababartay? Tusaale ahaan, marka dhulka la qaadayo? Ma jiraan meelo gaar ah oo aad rabtay inaad xoojiso waqtigan?
Waxaa muhiim ah in la xasuusto in muruqyada ay ku xiran yihiin kala-goysyada - iyo kala-goysyadu waxay dib ugu noqdaan murqaha. Markaa, dhibaatadu waligeed ma aha 'jidhka muruqa oo kaliya'. Sidaa darteed, waa muhiim in la helo daawaynta kala-goysyada iyo murqaha - iyo sidoo kale inaad ku bilawdo is-xakamaynta (sida aad samaysay) iyo jimicsiyo gaar ah.
Wax yar ma nooga sheegi kartaa nooca jimicsiga aad ku sameyso tababarka? Ka dib waxaan mari karnaa jimicsiyada aan kuu fiicnayn - ama laga yaabo inay ku siiyaan cadaadis aad u yar dhabarka hoose.
Layligani waxay faa'iido kuu yeelan karaan inaad kordhiso xasilloonida lumbosacral:
Sidee loo sameeyaa qalliinka sinus tarsi? Waa maxay dammaanad qaadka in lagu guulaysanayo?
Maqaalkan waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan daaweynta muxaafidka ah iyo kuwa qallafsan (qaliinka) ee sinus tarsi syndrome:
Maqaalkan - dhawaan - (waad ku mahadsan tahay inaad na xusuusisay inaan ka maqnaa macluumaadka xaaladdan boggayaga) waxaad ka heli doontaa macluumaadka ku saabsan qaliinka furan iyo arthroscopy labadaba.
Noo sheeg haddii ay ka jawaabi weydo su'aashaada si lagu qanci karo.
Waxaan sidoo kale laga heli karaa Facebook-ga: https://www.facebook.com/vondtnet
Lise Kristin Johre wuxuu leeyahay,
Hi. Waxaan qabaa cps, oo waxaan la yaabanahay sababta aadan waxba uga haysan xaaladdan? Wax badan kaligaa ma ogaatay, laakiin waxaad u baahan tahay talooyin dheeraad ah.
Aad baad ugu mahadsantahay ra'yi-celinta. Dabcan waxaan wax ka qori doonaa Isku-dhafka Xanuunka Xanuunka Goboleed (CRPS) - sidoo kale waxaan si qoto dheer u dhex geli doonnaa kaydadka cilmi-baarista si aan u aragno haddii ay jirto cilmi-baaris dhowaan lagu sameeyay daaweynta, nafaqada ama wixii la mid ah oo aad ka faa'iideysan karto.
Mar labaad, aad baad ugu mahadsan tahay hadalkaaga.
Waxaan kuu rajeyneynaa maalin cajiib ah!
PS - Ma rabtaa talo guud iyo mid la taaban karo labadaba? Mise waxaad rabtaa daawaynta ifbm dheeraad ah?
Waxa i soo gaadhay jab daal ah oo aan si lama filaan ah kor ugu kacay tababarka uurka ka dib oo aan raacay 2-3 bilood. Waxaa jira jabniin laba meel ah oo isku lug ah waxayna dhakhaatiirtu sheegeen inay ahayd meel aan caadi ahayn oo ka mid ah jabka. Wali waxa ay dareema qallafsanaan iyo raaxo la'aan aagga jabka laakiin ma dhaawacayso. Hadda waxaan ku dhacay Plantar Fascitis waxaanan la yaabanahay waxa aan hadda u baahanahay inaan sameeyo! Ma hubo sida uu jabku u eg yahay waxaana la yaabanahay haddii aan si uun cagahayga ugu xidhnaa? sidoo kale waxaan gartay in aan bartay hab qaldan oo aan hal lug ku socdo. Yaan la xidhiidhaa caawimada ugu fiican ee suurtogalka ah? ma laha awood ama rabitaan aad ku dumiso lacag badan oo ku saabsan nooca saxda ah ee daaweynta si dabiici ah oo ku filan. Waad ku mahadsan tahay jawaabta 🙂
Plantar fasciitis waa walxo caajis ah - marka hore waa inaad bilowdaa 4-taan jimicsi (xoog fidin iyo iftiin labadaba). Is-xakamaynta iyo is-daawaynta kuma baxayso hal dinaar. Nasiib darro, sidoo kale waa kiiska in aad u baahan doonto dhowr wareeg (2-4x) oo leh daaweynta cadaadiska cadaadiska - tani waa sababtoo ah ciribta iyo hore ee ciribta ee ku wajahan fascia plantar waxay u baahan yihiin caawimo vascularization (wareejinta) si kor loogu qaado bogsashada .
Haa, qufulka wadajirka ah ayaa inta badan ku dhaca cagta sababtoo ah culeys aan sax ahayn. Lafopractor ama daaweeyaha gacanta waa inuu awoodaa inuu ku caawiyo labada daawaynta cadaadiska cadaadiska, oo ay weheliso daaweynta wadajirka ah ee cagta - markaa uma baahnid inaad u tagto 2 daaweeyayaal kala duwan tan.
Ma waxaad talo ka rabtaa daaweeyaha?
Gina wuxuu leeyahay,
Hi, Isla markii Easter-ka ka dib waxaan soo toosay habeenkii aniga oo xanuun daran ka haya hal lug, gudaha gudaha dabada hoosteeda. Waxa aad dareentay in aad qiyaasi karto in mindi lagu dhuftay. Xanuunku wuxuu socday dhowr ilbiriqsi, ka dibna way baxeen. Waxay yimaadeen oo tageen qiyaastii 7-8 jeer. Markaas wax kale ma jirin ilaa habeenka ku dhow toddobaad ka dib. Dabadeed waxaa dhowr jeer igu soo toosay isla xanuunkii xoogga badnaa. Maalintii shalay, si joogto ah ayay u iman jireen, laakiin sidii ay habeen hore u xoog badnaayeen maaha. Xalay si fiican ayay u socotay, laakiin waxaan dareemayaa nooc ka mid ah cagahayga. Maanta waxaan aaday si aan u arko GP-ga waxna ma aysan ogeyn. Waxay igu talisay inaan ku subko ibux.
Ma haysaa wax fikrad ah waxa ay tani noqon karto maxaadse igula talinaysaa inaan sameeyo?
Sida aad u sharaxdo, waxaa jiri kara sababo badan. Sidoo kale ma kugu xanuuntay lugo ama dhabar xanuun? Waxay u egtahay xanaaq maxalli ah ama mid fog - waxaanan kugula talineynaa inaad isticmaasho rullaluistemadka duugista cagta, fidi qaansada cagta (fiiri jimicsiga maqaalkeena '4 layliyo ka dhan ah fasciitis plantar') oo samee jimicsi firfircoon / xoog iftiin leh cagaha Haddii sidoo kale uu shucaac ku xanuunayo lugta, waxay noqon kartaa xanaaqa neerfaha dhabarka hoose kaas oo ku siinaya xanuunka / calaamadaha cagta ee la soo gudbiyay, ka dibna L5 ama S1 xididka dareemayaasha. Haddii aad rabto in aad isticmaasho dawooyinka xanuunka dabiciga ah ee dabiiciga ah, waxaanu kugula talin karnaa daawaynta qabow ee Biofreeze.
Ma haysaa xog qoto dheer oo ku saabsan waxyaalo kale oo aad taqaan? Maanta ma ka roon tahay?
Waxaan u qorayaa magaca aabbahay oo la halgamay madax-xanuun, ilig-xanuun iyo cadaadis daran oo dhegta bidix ah, macbadka iyo dhabannada.
Waxa uu u tagay dhakhaatiir afka ah, dhakhaatiirta, dhakhaatiirta sare, dhakhaatiirta ilkaha, neerfaha iwm. Waxa uu qaatay MRI, CT iyada oo aan wax natiijo ah laga helin. ma sameeyo. Dhakhaatiirta ilkuhu waxba ma helaan marka ay si fiican u hubiyaan inta lagu jiro la-tashiga iyo raajada labadaba. Waxa uu ku qasbanaaday in uu mar kale soo jiido ilig maalmo ka hor, kaas oo uu ka dareemay xanuun aad u xun. Sidoo kale waa la rujiyay. Wax fikrad ah ma ka qabtaa waxa ay tani noqon karto? Ama ku saabsan wax talooyin ah oo ku saabsan waxa uu samayn karo? Aad ayuu u xannibaa tan. Waxa uu u socdaa si uu u codsado dheefaha naafada ka dib dhawr sano oo AAP ah.
Waxa uu isku dayay dawooyin badan oo kala duwan oo loogu talagalay xanuunka daba-dheeraada, waxa uu isku dayay dawooyinka qaar ee dhanjafka iyo dawooyinka kale. Waa inuu haysto Pinex Major maalin kasta (taas oo ah xanuun baabi'iye aad u xooggan). Waxa uu u tagay fiisiyoterabi, naprapath, lafopractor iyada oo aan wax caawimo ah helin. Way dhibaysaa inuu arko aabbihii oo u halgamaya sida uu u dhaqmayo. Ma garanayo inay wax xidhiidh ah yeelan karto, laakiin markii uu yaraa ayuu dhabarka ka jabay, waxa kale oo uu dhabarka ka jabay dhawr sannadood ka hor markii uu shaqaynayey. Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in jabku aanu wax xidhiidh ah la lahayn cudurradan uu hadda qabo, laakiin mar walba waxaan ku dhejiyaa laakiin halkaas.
Tixgeli inanta quusta.
Tani uma muuqan mid lagu farxo, waxaanan fahamsanahay inay tahay inay niyad-jab ku tahay inuu arko aabihiis oo xaalad noocaas ah ku jira. Haddii aabbahaa uu ka weyn yahay 50 sano markaa fikradayda isla markiiba way ka soo horjeedaa neuralgia trigeminal - taas oo keeni karta xanuun daran meelaha aad sheegtay. Cudurkan ma lagu sheegay baaritaanka?
-Daawaynta neuralgia trigeminal
Daaweynta waxaa loo qaybin karaa daaweynta daweynta, neurosurgery iyo daaweynta muxaafidka. of daaweynta daroogada Waxaan helnaa dawooyin aan dhakhtar qorin, laakiin sidoo kale dawooyin dhakhtar qoray, oo ay ku jiraan dawooyinka suuxdinta (tegretol aka carbamazepine, neurontin aka gabapentin). ee dile Clonazepam waxaa badanaa la isticmaalaa (-pam waxay la mid tahay diazepam, Valium, ie kaniiniga ka hortagga niyad-jabka iyo walaaca) kaas oo la sheegay inuu awood u leeyahay inuu bixiyo xanuunka marka lagu daro daawooyinka kale. Daawooyinka niyad-jabka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa daawaynta xanuunka neerfaha. Xaaladaha aadka u daran, hababka neerfaha ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto, laakiin markaa aad bay muhiim u tahay - sababtoo ah khatarta sare ee dhaawacyada iyo wixii la mid ah - inaad tijaabisay wax kasta oo kale oo daaweyn muxaafid ah iyo wixii la mid ah marka hore. Qalliinka awgeed, daawaynta xannibaadda waxay sidoo kale noqon kartaa ikhtiyaar.
Av Hababka daaweynta muxaafidka markaa sheeg sumcad Machadka Qaran ee Cudurrada Dareemaha iyo Istaroogga hababka soo socda; irbad qallalan, daawayn jireed, hagaajinta wadajirka xanuunka loo yaqaan 'chiropractic joint sixion' iyo hypnosis / meditation. Daawayntani waxay ka caawin kartaa qofka ay saamaysay xiisadda muruqa iyo / ama xannibaadaha wadajirka ah ee daanka, qoorta, dhabarka sare iyo garbaha - kuwaas oo bixin kara nafis calaamadaha iyo hagaajinta shaqada. Waa inuu sidoo kale ka helaa daawaynta myalgias la xidhiidha daanka iyo qoorta oo ay u badan tahay inay sidoo kale dhaceen.
PS - Heerkee ayay ka dhaceen dhabarka jabku? Qoorta sidoo kale?
Dhakhaatiirta lafdhabarta, MNKF
Aabbahay waxa uu ka weyn yahay 50 sano. Waxa uu leeyahay jab cadaadis ah oo ku yaal L1. Waxa laga baaray neuralgia trigeminal mana aha waxa uu qabo. Waxa uu tijaabiyey dhowr dawooyin liddi ku ah niyad-jabka iyo ka-hortagga walaaca iyada oo aan wax horumar ah laga helin. Waxa uu aadayaa daawaynta halkaas oo uu "ka jabay" oo laga duugay qoorta / dhabarka iyo meelaha daanka. Halkaa sidoo kale iyada oo aan wax horumar ah la helin. Waxa kaliya ee uu sheegay in aanu isku dayin waa daawaynta myalgias la xidhiidha daanka iyo qoorta.
Hi mar kale, Ida Christine,
Hagaag, kiiskiisa - oo leh xanuuno muddada dheer ah - waa inuu u badan yahay inuu u diyaargaroobo xaqiiqda ah in ay qaadan karto 8-10 daaweyn oo loogu talagalay daanka ka hor inta uusan ogaanin in myoses iyo murqaha muruqyada ay tagaan - daaweyntu waa inay sidoo kale ka kooban tahay. daawaynta ka soo horjeeda dhibcaha kiciya intraoral (oo leh pterygoideus iyo pterygoideus caajis ah) - haa, tani waxay ku lug leedahay galoofyada cinjirka ah iyo daawaynta guntinnada guntimaha muruqa ee afka (waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh). Daawaynta wadajirka ah waxay u egtahay mid macquul ah ilaa inta ay socoto - haddii kale waxay ku degdegi lahayd inuu sii adkeeyo, taas oo u horseedi lahayd xanuun badan dhamaadka.
- Ma la isku dayay in irbad qalalan/muruqa lagu daaweeyo daanka? Tani dhab ahaantii waxay haysaa caddayn wanaagsan.
- Ma daweyn xannibaad ah ayaa loo adeegsaday kala-goysyada daanka, ma tidhi? Mise waxay ahayd kaliya xanuun baabiiye?
Iris Waage wuxuu leeyahay,
waxaan leeyahay daanka qalloocan. Hal mar ayaa lagu baaray, waxaana lagu qalay hal mar si tan loo saxo. Kuma faraxsani natiijada. Hadda waxaan la halgamayaa murqaha cidhiidhiga ah ee daanka, qoorta, qoorta iyo dhabarka. Madax xanuun ayaa i haya sida ugu fiican maalintii hal mar. Marka ugu daran, waxaan qabaa madax xanuunka dhanjafka. Dhawr sano ka hor ayaa laygu sheegay fibromyalgia. Ma jirtaa rajo lagu badbaadinayo daanka sidayda oo kale ah, Mise waa inaan mar kale u tago warshadda oo dhan oo aan ku sameeyo baaritaan iyo qaliin daanka? Vet Waan ogahay inay adag tahay in wax la sheego adoon i arag, laakiin ma laga yaabaa in laga jawaabo si guud? Daacadnimo, Iris
Sida aad ogtahay hogaamiyayaasha fibromyalgia inta badan dareenka korodhka murqaha iyo neerfaha. Waa la arkay taas LDN (guji halkan si aad wax badan uga akhrido qiyaasta yar ee naltroxen) waxay noqon kartaa daaweyn waxtar leh si loo yareeyo dareenkan - kaas oo sidoo kale si toos ah ula xiriiri kara daankaada kacsan iyo dhibaatooyinka muruqyada. Weligaa ma isku dayday daawayntan? Haddaysan ahayn halkan ayaa kuu taal badeecad cusub adiga!
Maadaama aad soo martay warshadan inteeda badan, waxaanu ku dooranaynaa inaanu ku waydiino kala bixi laabta iyo laf dhabarta thoracic, sidoo kale garbaha xoojiya - tani waxay culayska ka qaadaysaa qoorta iyo daanka. Way ku caawin kartaa inaad booqato khabiir wadajir ah (chiropractor ama daaweeyaha gacanta) haddii aad aad u adag tahay xagga sare ee qoorta. Dhab ahaantii xubintani waxay si toos ah ula xiriirtaa daanka iyo shaqadiisa. Haddii kale, safar maalinle ah oo dhul qallafsan ayaa sidoo kale lagula talinayaa.
Waxaan isticmaalayay LDN maalin kasta ku dhawaad ​​saddex sano. Waxayna i caawisay si aan dhamaanayn. Xanuun badan ayaa la dhimay, waxaana dib u helay tamartaydii. Xanuunka daanka ayaa yimid waqti dheer ka hor fibromyalgia, sidaa darteed culimadu waxay isku khilaafaan in dhammaan xanuunka jidhku uu ka yimid dhibaatada daanka iyo in kale. 😉
Waxaan si joogto ah u aadi jiray lafopractor, sidoo kale waxaa jiray xoogaa caawimaad ah taas, laakiin aad ayey qaali u tahay mustaqbalka fog. Laakiin waxaan isku dayi doonaa in aan is kala bixiyo oo aan eego haddii ay i caawinayso. Aad baad ugu mahadsantahay talada wanaagsan, sidoo kale aad bay u fiicneyd inaad maqasho culimo aad maqasheen LDN 😉
Waxaan hadda ku arkay su'aashaada ku saabsan daanka. Ma ka heshay MRI/CT daankaada? (Ma wax baa ka qaldan xubintaada daanka?)
Sababta aan wax u qorayo waxa weeye aniga laftaydu waxa aan maray qaliin daanka 3aad! =)
Uff! Daanka xanuunka waa mid aad u xun! 10 sano oo xanuun aad u daran ayaa ila jiray, hadda xanuun baan ahay! Malaha waxaan ahay "horumar" yar oo Norway ah .. Waxay ka qaadeen muruqa madaxayga oo waxay geliyeen lafaha daanka si ay ugu noqdaan xalkii ugu dambeeyay ka hor inta aan la tixgalin sanaaci daanka! Aad ayaan u faraxsanahay! Waxaan haystaa, wax ala la mid ah fibro ku dhawaad ​​.. Waxaad leedahay naxariistayda oo waxaan kuu rajaynayaa nasiib wacan iyo in jidkaagu noqdo mid dhalaalaya! Salaan badhtamihii labaatanaad oo inta badan dareemaya sidii gabadh 80 jir ah! : p
Waxaad u egtahay qof naxariis badan oo naxariis badan, Ida Christine - oo runtii danaynaysa dadka kale. Waxaan runtii rajeyneynaa inaan ku aragno wax badan oo idinka mid ah annaga Facebook Page sii dheer! Aad baad ugu mahadsantahay qoraalkaaga, waxaana u rajaynaa aabahaa caafimaad wanaagsan.
Su'aal aad u wanaagsan sidaan sidoo kale rabnay inaan ku weydiino, Iris - iyo haddii ay sidaas tahay, maxay natiijadu tiri?
PS - Wacan in lala hadlo laba dhakhtar oo kale oo daanka ah, jidka - ma aha maalin kasta. Waxaan saameyn aad u wanaagsan ku yeeshay daaweynta wadajirka ah ee ka soo horjeeda qoorta sare ee qoorta iyo kala-guurka u dhexeeya laf-dhabarka / qoorta, iyo sidoo kale daaweynta dhibcaha degaanka ee daanka, iyo sidoo kale muruqyada qoorta.
Waxaan leeyahay daan qalloocan. Ama cross-bit waxay sidoo kale ugu yeereen 🙂 Huff .. 3 hawlgal? Waxaan qabaa inaan bilaabo wareega labaad. Hadda waxaa laga joogaa 20 sano markii qalliinkaygii ugu dambeeyay, arrimuhuna asal ahaan ma soo roonayn.
Hagaag, iyo intee ayay ahayd tan iyo markii aad qaadatay sawirka cudurka? Ma aha 20 sano ka hor, waxaan rajeynayaa! 🙂 Markaas, waa in laguu gudbiyo baaritaan cusub.
Soo dhawoow Xanuunka Hagaag, run ahaantii waa in ka badan 20 sano tan iyo markii qof ii baadhi lahaa arrintan, markaa wareega labaad way dheeraan karaan. Laakiin waxaan rajaynayaa in qof ii soo gudbiyo si dhakhso ah. 🙂
Aad u fiican Ida Christine 🙂 Nacalad wanaagsan inaad heshay caawimo. 🙂 Isla markiiba waxaan ahay 40 waxaana dareemay sidii 80 jir tan iyo markii aan ahaa 16 😉
jiidh wuxuu leeyahay,
Hi Ida Christine, ma ku waydiin karaa meesha lagaa qalay? Gabadhaydu waxa ay qalliin daanka ku samayn doontaa St. Olavs, wayna ku faraxsan tahay in ay aqoon fiican u leeyihiin waxa ay samayn doonaan.
Monica wuxuu leeyahay,
Waxaan ahay gabadh 29 jir ah oo la dhibtoonaysa qoorta / dhabarka oo xanuunaya, madax-xanuun ( madax-xanuun), calool xanuun, iyo xanuun murqaha / kala goysyada. Waxa kale oo aan leeyahay daan aan iskaashi lahayn (waxa aan dareemayaa in ay tani ka baxayso kala-goysyada daqiiqad kasta). dhibco duulaya ee dhegaha oo aan baabi'i doonin, iyo sidoo kale raaxo la'aanta sinuska.
Waxaan si aan la rumaysan karin u daalanahay / daalan jidhka dhexdiisa, la halgamaya feejignaanta iyo luminta xusuusta.
Aad buu u barafoobay, wuxuu ku dhex socon karaa suudh marka dadka kale xidhaan funaanad.
Qaylada iyo xaaladaha walaaca leh ayaa i garaaca, waxaanan ku qaataa waqti dheer soo kabasho.
Shaqada gurigu waxay u socotaa hal tallaabo oo hore iyo 4 dib u dhac ah, iyadoo labada dhawaaq ee ka imanaya vacuum cleaner iyo heerka tamarta ay guuldarraystaan: p
Waa seexan karaa oo seexan karaa, laakiin ma dareemi karaan nasasho.
Urk, aad buu u caajisay 🙁
Hi Monica. Waxaan ahay "isticmaal" joogtada ah ee goobtan cajiibka ah. Markaa waxaan wax yar ka faalloodaa waxa xiisaha ii qaba, wax aan rajaynayo waa ok! Ih hihi .. Waxaan ahay qof jecel inuu caawiyo dadka kale.
Calaamadaha noocaan ah ee aad sifaynayso waxay ku dhow yihiin inay la mid yihiin kuwa aan qabo Ma samaysay wax tijaabo ah oo dhiig ah, mr, ct? Waxa kale oo aan leeyahay daal jidhka ah, feejignaan la'aan iyo xusuusta oo lumis. (ME waa ogaanshaha ay samayn karaan ka dib marka dhammaan cudurrada kale marka hore meesha laga saaro)
Marka ay timaado daankaada (waxaan lahaa dhibaato daanka muddo 10 sano ah. Waxaan lahaa 3 qalliin) Waxaan sidoo kale lahaa dhibaatooyin la sinuses, dareenka ah in ay u socotay this out of kala goysyada iwm iwm). Miyuu daanka kaa eegay tusaale ahaan dhakhtarka afka? Muddo 4 sano ah ayaan u socday xanuunka daanka (Aniga dartiis) taas oo ay garan waayeen ilaa ay aad u daahday oo xubinta daanka iga jabtay. Kaliya su'aalo aad qabtid 😀 wax badan ayaan akhriyay si kasta oo suurtagal ah marka ay timaado daanka
Su'aalo fiican, Ida Christine! Aad baad ugu mahadsan tahay joogitaankaaga boggayaga - waxaad ka dhigaysaa runtii mid nool dhammaan fikradahaaga cajiibka ah iyo kuwa wanaagsan. Waxaan si aad ah u sugeynaa jawaabta Monica ka hor inta aanan la imaan fikradeena.
Way fiicantahay inaad faallo ka bixisay 🙂
Waxa aan sameeyay baadhitaano badan oo dhiig ah, iyo baadhitaano lagu sameeyay kaaga iyo kayga - waxa ay si fudud u lumiyeen xakamaynta waxa aan tijaabiyay oo aanan tijaabin: / marka aad ayaan u xanaaqsanahay
oo runtii ma garanayo waxa aan kaga jawaabo su'aashaada: /
Dhanka daanka, waxaan u sheegay dhakhtarka ilkaha oo keliya, ka dibna kabka qaniinyada ayaan helay.
Laakiin ma isticmaalo marka ay xanuunsato, oo waan ka caga jiidayaa inaan waco dhakhtarka ilkaha si uu ii sheego (sidoo kale la halgamaya niyad-jabka iyo walaaca bulshada).
Laakiin waxaa laga yaabaa inaan kaliya u baahanahay inaan qaniino tufaaxa dhanaan oo aan waco dhakhtarka ilkaha berrito?! 🙂
Haa, waan ogahay dareenkaas ah inaad lumiso xukunka waxaad qaadatay oo aadan qaadan! Waxaa laga yaabaa inaad u tagto dhakhtarka, soo ogow shaybaarada aad samaysay oo laga yaabo inaad sameyso baadhitaano kale oo jawaabo u noqon kara xanuunkaaga. Waxaa jira muunado badan oo aad qaadi karto si ay u noqoto tallaabada ugu horreysa ee jihada saxda ah? 😀
Ma dareentay inaad ka soo raynayso kabyada qaniinyada? Aniga qudhaydu waxaan u haystaa sida daanka bidix uu "ka hooseeya" midigta, qaniinyadaydana ay xoogaa qalloocan tahay. Waxa fiican inaad kab qaniinyo leedahay maadaama ay taasi tahay waxa ugu horreeya ee ay 'isku dayaan'. Markaa waxaan kugula talinayaa inaad qaniinto tufaaxa dhanaan oo wac dhakhtarka ilkaha si aad u hesho baadhis daanka iyo / ama suurtogal ah in loo gudbiyo dhakhtarka afka. Waan fahmay cabsida aad ka qabto in aad wacdo iwm Waxaan hubaa inaad xamili karto! <3 Dhammaanteen waxaan leenahay bini'aadamka 'xoogga gudaha' kaasoo naga dhigi kara inaan sameyno waxaan rabno / waa inaan yeelno. Ogow inaan si buuxda u fahmay dareenkaaga.
Ma ku haysaa dhawaqa garaaca daanka markaad taabato? Intee sare ayaad hamaansan kartaa? Adigoo isticmaalaya laba farood, ma ku heli kartaa laba farood oo isku kor saaran afkaaga adigoon ku dhaawacmin?
Waan ka xumahay, 100% ayaan hubay in aan kaaga jawaabay. yaab leh.
Haa wax badan ayay riixdaa, dhib badana way ku xanuunaysaa. Ma samayn karo layliga aad sheegtay isaga oo aan waxba yeelin 🙁
Waxay igu tijaabisay kabitaanka qaniinyada xalay, ka dib markii aan isticmaalin tan iyo markii aan helay, sababtoo ah waxay ahayd mid xanuun badan oo aan raaxo lahayn. Laakiin caawa waxaan mooday inay fiican tahay xidhashada. Waxaan dareemay in daanka loo oggolaaday inuu yara nasto.
Hehe. Dhib malahan, Monica! Si degdeg ah ayuu ii leexan karaa anigana! 🙂
Sheekadayda daanka ah oo dhan waxay ku bilaabantay garaacista daanka Aad buu u xanuunsaday. Ma dareentaa qaniinyadaada? Ilkahaagu ma "toosan yihiin" markaad mar labaad wax qaniinto, mise waxaad mooddaa inay yara qalloocan yihiin? Haddaad fahantay waxaan ula jeedo! Aniga ahaan, qaniinyadaydu gabi ahaanba way khaldanayd. Kaliya labada ilig ee dambe ee dhanka bidix ayaa ku jiray qaniinyada saxda ah, halka ilkihii kalena ay gebi ahaanba khaldan yihiin! Way fiicantahay inaad maqasho inaad leedahay kab qaniinyo ah oo aad isticmaali karto. Wax yar ayay dhaawici kartaa marka hore, laakiin sida caadiga ah way fiicnaan doontaa oo aad bay ugu fiican tahay murqaha inaad isticmaasho kabka qaniinyada, xor u noqo inaad sii wadato marka aad awooddo.
Waxa aan ku dhawaadaa in aan yara werwero marka aan akhriyo sida aad dareemayso sababtoo ah waxa aan ogahay in ay aad u dhaawacayso in ay dhibaato ka haysato daanka! Ingen Qofna dan kama qabo sidaa darteed waxaan si adag kuugula talinayaa inaad u tagto GP-gaaga ama dhakhtarkaaga ilkaha oo laguu gudbiyo dhakhtarka lafaha. Haddii aad rabto, waxaan si farxad leh la imaan karaa qaar ka mid ah beddelka dhakhaatiirta qalliinka maxillofacial / takhaatiirta afka ee aad raadin karto / la tixraaci karo - waxay sidoo kale kuxirantahay meesha aad ku nooshahay!
Carmen Veronica Kofoed wuxuu leeyahay,
Oo la noolaanshaha xanuunka ninna ma ogaanayo waxa shay...
Hi, waxaan ahay gabadh da'yar oo 30 jir ah oo sanado badan la noolayd xanuun dabadheeraad ah. Tijaabooyin ayaa loo qaaday jiho kasta, laakiin qofna ma ogaanayo wax, aniga qudhaydu waa layga tagay, sababtoo ah dhakhaatiirtu ma i rumaystaan!
Waan ka cabsadaa inaan waco marka ay aad u xanuunsato oo aanan socon karin, sababtoo ah waxaan dareemayaa dareen ah inay u maleynayaan inaan ahay hypochondric!
Taasi, anigu ma ihi.
Waxaan naftayda ku dhibaa maalmo adag oo aan aad u riixo nafteyda, badanaa waxay ku dhammaataa inaan sariirta jiifo dhowr maalmood, kaliya fikirka ah in aan aado dukaanka waa gebi ahaanba naxariis darro, sidaas darteed waxaan helaa taksiyo badan!
Marka ugu xun, waxaan ku istaagi karaa sariirta dhammaan 4 oo aan barooran karo, sababtoo ah ma garanayo meel aan aado, daawadu ma shaqeyso oo waxay helaysaa xanuunka ugu yar .. Maxaa la waayay qof i maqli kara
Marka ay aad u xun tahay sidoo kale, way culus tahay oo waxay haysaa fargeeto, taas oo run ahaantii in aan istaago oo aan sameeyo suxuunta waa fikir kaliya, waa inaan hooyaday wacaa oo aan weydiistaa inay i caawiso, laakiin sidoo kale waxay la halgameysaa xanuunka.
Waxaan qabaa fibromyalgia, laakiin sannadihii la soo dhaafay kaliya xanuunka iyo daalka ayaa ka sii daray oo ka sii daray, waan isku riixaa mar kasta welina qofna ima maqlo ..
Qaar badan ayaa yidhaahda, way dhaaftaa.. MAYA, ma gudubto, weligeed ma gudbi doonto..
Way dhibaysaa inaad fadhiisato, seexato, istaagto oo aad socoto.. Maxaan sameeyaa markaa? Sideen ugu gudbinayaa adduunka oo dhan in qof la arko oo la maqlo?
Waxaan ka qaybqaataa cilmi-baarista xanuunka daba-dheeraada, laakiin ma caawinayso sida ay aniga ila tahay maanta. Ma heli karo shaqo, mana dhamayn karo dugsiga, sababtoo ah ma aqaan sida loo helo tamar.
Si xun ayaan u seexdaa, marka ugu horraysa ee aan seexdo oo aan tooso, waan daalanahay sidii markii aan seexday oo kale, marka ay ugu xumaato waxa aan seexan karaa 15 saacadood, laakiin markaa gabi ahaanba waa la i garaaci doonaa, ma shaqeeyo. .
Waxa ay dareema in la i garaacay mararka qaarkood, in aan gabi ahaanba curyaan ahay, maxayse dhakhaatiirtu sameeyaan?
Haba yaraatee, waa ay fadhiyaan adiga oo ku eegaya sida doqonnimadaada, iyaga oo sugaya in fasalkaagu dhammaanayo. Haddi aan awoodi lahaa in aan ka qaato cortisone jirkayga oo dhan, waxa aan ku dhawaadi lahaa dhoola cadeyn.
Maxay ku qaadataa inuu qof i arko, xanuunka i haya, xanuunka i haya, nolol maalmeedkayga oo aan inta badan fadhiisan karo oo aan ooyi karo sababtoo ah waxba ma helo, sababtoo ah waxaan dareemayaa inaanan waxba ku filnayn, marka qof i weydiisto caawimaad. waana inaan dhahaa maya sababtoo ah xanuun badan ayaa i haya.
Anigu ma tababbari karo sababtoo ah waxay mar kale iga dhigaysaa inaan si buuxda u dhintay, qaar badan ayaa sheegaya in ay noqon doonto daawo mucjiso ah, laakiin ma aha sidaas oo kale qof kasta. Waxa aan qaatay PT, haa xaaladdayda way soo roonaatay, laakiin xanuunkaygu igama tegin...?
Mararka qaarkood aad baan u cadhoodaa oo xanuun badan baa i haya, wayna dhaaftaa kuwa aan jeclahay, laakiin waa sababta oo ah ma dareemayo in la ii arkay ama la fahmay, sidoo kale hooyo ma noqon karo.
Marka aan helo meel aan seexdo, waa in aan dhistaa barkimo badan oo sariirta ah, lugaha dhexdooda, dhabarka hoostooda, dhinacayga, gacmahayga hoostooda si aan ugu dhawaado qol barkin ah… Xanuun iyo daal joogto ah waa Ma aha wax aad ku kaftamayso, oo dhakhaatiirtu waxay taas u sameeyaan si kaftan ah, waxaa jira aqoon aad u yar oo tan ah.
Mid ka mid ah haddii ay jiraan dhowr waxyaalood oo ka sii daran, sidoo kale ma u adkeysan karaan in si fiican la ii hubiyo, mid haddii ay ka sii xumaato oo aan ugu dambeyntii waligay tagi karin?
Aad ayaan u quustay
Dhakhaatiir badan iyo takhasusleyaal badan ayay ku adagtahay in ay la xiriiraan fibromyalgia iyo ME maadaama xanuunadani ay sababi karaan calaamado kala duwan - oo ay adagtahay in wax la taaban karo laga sheego.
Si aad u sheegto wax la taaban karo: Ma isku dayday LDN (dose hoose naltrexone) daawaynta? Waxaa lagu andacoonayaa in LDN (Dose Low Naltrexone) ay kordhin karto heerarka endorphin sidaas darteedna ay ku bixiso gargaar dhowr cudur oo dabadheeraad ah. Waxyaabaha kale, fibromyalgia, ME / CFS iyo daal daba-dheeraada. Wax badan oo ku saabsan ayaad ka akhrisan kartaa iyada.
Sidee u shaqeeyaa LDN?
- Naltrexone waa antagonist ku xidha daaweeyayaasha opioid ee unugyada. Aragti ahaan, LDN waxay si ku meel gaar ah u xannibtaa qaadashada endorphin ee maskaxda. Endorphins waa xanuun baabi'iyaha jirka oo ay soo saarto maskaxda lafteeda. Tani waxay keeni kartaa in maskaxdu ay magdhowdo iyadoo kordhinaysa wax soo saarka endorphin. Natiijadu waa korodhka heerarka endorphin kaas oo yarayn kara xanuunka oo bixin kara dareenka fayoobaanta oo kordhay. Kordhinta wax soo saarka endorphins waxay markaa kaa caawin kartaa xanuunka, bararka, daalka, soo noqoshada iyo calaamadaha kale, laakiin habka ficilka iyo natiijada kama dambaysta ah ayaa weli ah oo la arkaa.
Tani wax ma kuu noqon kartaa, Carmen Veronica?
LDN waxaa la isku dayay haa dhowr sano ka hor - Waxay ahayd inaad kacdo subaxda iyo 1 fiidkii, ma aysan caawin sidii aan filayay 🙂 mar kale ayaan qiimeeyay
LDN waxay u shaqayn kartaa si kala duwan iyadoo ku xiran da'da iyo heerka uu ku jiro fibromyalgia / ME. Waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso mar kale. 🙂
In kasta oo aan adiga iyo sheekadaadaba aqaannay, si kastaba waan doortay oo faallo yar ka bixiyaa!
Mar haddii goobtani tahay goob ay dadka kale wax ku qori karaan oo akhriyi karaan faallooyin kale marka "waa qasab" inaan ku qaato Bokmål .. Hihi.
Waxaan rabaa inaad ogaato inaan si buuxda u fahmay sida aad dareemayso iyo waxa aad ku sugan tahay.
Wixii aan horay uga soo hadalnay, waxaan kugula taliyay oo ma is-baartay aniga oo aan isku hayno calaamado isku mid ah oo aad isku aragto calaamado laga yaabo inay ila mid yihiin sida aan anigu leeyahay. Haddii GP-gaagu aanu 'rabin' inuu ku baaro ama u maleeyo in mar hore lagu baaray, waxaad codsan kartaa in laguu gudbiyo daawada jireed iyo baxnaaninta isbitaalka, halkaasoo ay ku baari karaan go'aanna ku gaari karaan. Waxa kale oo aad dhakhtarkaaga GP-ga weydiisan kartaa inuu kaa qaado shaybaaro badan oo dhiig ah si ay bilow u noqoto baadhista suurtogalka ah ee IGA.kadibna waa in laga qaadaa sambalyo badan oo dhiig ah, sida macaanka, HIV/AIDS-ka, dheef-shiid kiimikaadka, fiitamiinnada iyo macdanta iyo cudurrada kale ee suurtogalka ah ee keeni kara keeni calaamado la mid ah kuwa ME Waxaad, tusaale ahaan, raadin kartaa liis la yiraahdo "Canada standards" oo dadka intooda badan ay raacaan marka ay go'aan ka gaarayaan ogaanshaha cudurka. Waxa kale oo laguu gudbin karaa dhakhtarka cilmi-nafsiga maadaama ay sidoo kale qayb ka tahay qiimaynta ME.
Xitaa haddii aan lagugu ogaan ME, waxaad tusaale ahaan, isku dayi kartaa oo aad qaadi kartaa tillaabooyin yar yar nolol maalmeedka oo ka sii wanaagsan. Talooyinkaygu waxay ka hooseeyaan maqaalka aad akhriday! 😀 Waxay ka dhigi kartaa wax yar fudud ..
Haddii kale runtii waxaan rabaa inaan sheego inaan fahmay sida aad dareemeyso oo aad ogtahay meesha aan joogo haddii aad rabto inaad la hadasho ..
Waa salaaman tahay 🙂
Xitaa ma aniga iga fikirtay, oo malaha dhul aad iyo aad u badan in ay tahay waxa aan haysto, hadda waxaan u guurayaa Rogaland, waxaana rajeynayaa inaan helo warbixin sax ah markaan guuro ka dib, sababtoo ah waqooyiga waxay u badan tahay inayna dhab ahaantii samayn. wax ku saabsan 🙁
Waxa aad u xun marka aad sariirta ka soo degi weydo, meel aad u jeedsatona aad garan waydo oo aad dareento in qof mindi kugu mudi doono, aad ayay u xanuunaysaa.
Maalmaha oo dhan waxaan rabaa inaan firfircoonaado lkn daalka ayaa si buuxda ii joojinaya, sida hadda oo kale, waxay ahayd inaan dukaanka joogo laakiin si dhib ah cagahayga uguma istaagi karo 🙁
Marka aan daawado nolosha iyo dhimashada TV-ga, oo aan arko sida Iswiidhan tahay, badanaa waxaan jeclaan lahaa in aan halkaas daweyn ka helo 🙂
Waxaan rajeynayaa inaan ku arko ka hor inta aanan ka tagin Ida, isku duub!
rønnaug wuxuu leeyahay,
Tani waxay u muuqataa inay tahay shabakad shabakadeed oo cajiib ah iyo bog Facebook oo leh adeeg shakhsiyeed. Waxay u egtahay mid gaar ah.
In aan su'aal la imaado.
Muddo 26 sano ah ayaan si joogto ah u xanuunsanayay. Hadda waa 46 jir, wuxuuna leeyahay cudur unug hidde-side ah, Ehlers-Danlos syndrome, wuxuuna la socdaa dhibaatooyin caafimaad oo aad u tiro badan. Qof aan gacanta ku hayo, tusaale. xanuunada wadnaha ee aan daawaday, madax xanuunka dhanjafka oo la xakameynayo, xanuun baabiiyaha kala goysyada iyo murqaha. Xubin kasta oo jidhka ka mid ah wax baa ka khaldan. Oo waxaan tagay inta badan waadhadhka cusbitaalka ee ku wareegsan qaybaha kala duwan ee jidhka, marka ay dumaan. Wax waa la xaqiijiyay, laakiin wax caawimo ah looma hayo. Tusaale ahaan. la ogaaday POTS, postural orthostatic tacycardia syndrome. Waxaa UNN laga soo gudbiyay Rikshospitalet oo i baaray, iyo sidoo kale wiilkayga oo hadda 19 jir ah, sidoo kale EDS iyo POTS. Laakiin Riksen ayaa sheegay, in aanay jirin wax daawayn ah oo loo hayo, waxa kale oo ay UNN tahay in ay ila socoto, maadaama aan ka tirsanahay Helse Nord. Sidaa awgeed ma caawin Waxa la ii gudbiyay qaybta sync ee cisbitaalka Østfold oo leh hawl qaran waxana aan u sheegay dhakhtarkayga in uu ii gudbiyo oo kaliya si aan ula socdo, daawaynta, POTS. Helay diiday inuu halkaas gaaro. Wiilkayga oo leh POTS wax dabagal ah uma hayo taas. Ka dib markii uu baadhitaan EDS ku sameeyay khabiir ku takhasusay London, waxa lagula taliyay in uu u tago takhtar ku takhasusay cilladda iskeed u shaqaynta, oo leh khabiir sumcad leh. Halkaas ayaan labadeennaba caawimo ka heli karnaa. Waxaan ka dalbaday woqooyi caafimaad si aan ugu dabiibo dibadda. Sida aan idhi, halkan kuma haysto wax kaalmo ah. Laakiin caafimaadka waqooyi waa diiday, sababtoo ah waxaan Norway ku leenahay daweyn buuxda oo POTS ah.
Haa, waa sida ay ku socon karto. Markaa ma lihin dhakhtar, dhakhaatiir, isbitaal, oo kiiskeena wax ka gooya. Aad bay u yar tahay cudur, aad ayaana u bukoona. oo uu qayb ahaan sariirta jiifay sannado badan. Waa dhif iyo naadir in aan taleefoonka waco si aan talo u helo, wax uu ku darsadona ma jirin. Waligiis ma maqal POTS, mana uusan ogaanin inuu jiro qof Norway jooga oo caawin kara. Isla sidii aan ogaaday.
talo wanaagsan ma haysaa? Talada daawaynta ee aan helay naftayda, via websites, iyo iyada oo la xidhiidha kooxaha POTS American, sidaas darteed wax badan oo ku saabsan daaweynta ogahay, laakiin waxaan dareemayaa sida "Anna ee Wilderness", kuwaas oo ku hadhay cidlo oo dhan cudur halis ah, ka tagay inuu dhinto.
Waxa kale oo uu leeyahay dareere dareere cerebrospinal ah oo ka soo baxaya sanka. Waxay cadaadisaa madaxa, xanuunka koraya ee dhabarka madaxa, indhaha gadaashiisa iyo sanka gadaashiisa, oo aad iyo aad u badan ayuu sanka gadaashiisa ugu qulqulaa. Tani waa khatar waxayna u horseedi kartaa bararka maskaxda. Laakiin dhakhtarkaygu fasax buu haystaa, wax caawimo ahna ma jiro. Horey ayaa laygu qalay buro maskaxda waxaana igu soo hadhay buro. Haddaba waxaa laga yaabaa in ay sabab u tahay qalliinkii 2012-kii oo ka dhigay jilicsanaan sababa in ay soo daadato unugyada isku xira ee maskaxda muddo ka dib, si ay hadda sanka uga soo baxaan maalin kasta.
Waxa kale oo aan leeyahay gastroparesis, oo leh casiraad joogto ah derbiga caloosha, aad buuna u xanuunsadaa. Mindhicirradayda ma shaqeeyaan sababtoo ah EDS, iyo sababtoo ah sixirka lafdhabarta bifida, iyo cilladaha kale ee dhabarka, sidoo kale waxaa suurtogal ah in aan qabo cillad chiari ah, nooc hernia ah oo qoorta ah.
Waxaan qabaa xanuun aad u weyn jirkayga oo dhan, waxaan qabaa aniga, daal badan iyo xanuun, laga soo bilaabo sannadkii 2000. Waxaan dareemayaa inaan sii dhammaanayo, oo labada wiilba waxay qabaan EDS waxayna u baahan yihiin dabagal oo aan si dhib ah u karinayo naftayda. Ninka ugu da'da yar ee qaba EDS, POTS ayaa sidoo kale I leh, wuxuuna ka soo kabsaday dhowr sano isagoo qayb ahaan jiifay, gabi ahaanba guriga ku xiran, ma joogo dugsiga, waxba, wuxuu seegay afar sano oo dugsi ah, laakiin hadda cagaha ayuu ku socdaa maalmaha ugu badan, laakiin wuxuu leeyahay hurdo. baahiyaha aad u daran. Waxa uu seexan karaa 17 saacadood maalintii muddo bilooyin ah… ku dhawaad ​​wakhti kasta runtii. Laakin waxa uu heli karaa saacado fiican marka uu soo kabsado. Wax fikrad ah uma hayo dhawaan waxaan samaynayo.
Waxaa ila socda rug xanuun oo Oslo ku taal, waxaana ballan leeyahay usbuuca soo socda. Laakiin halkaas kaliya waxaan ka helaa caawimo si aan xanuunka u xakameeyo. Jidhku aad iyo aad buu u dhow yahay inuu burburo, waana cabsi marka labada maskaxda, habdhiska neerfayaasha, kala goysyada, murqaha, caloosha iyo mindhicirrada labadaba shaqayn waayaan..wadnaha ayaa la halgamaya… Ma garanayo inay sabab u tahay mustaqbalka MS, (taas oo inta badan ku timaada EDS), ama haddii ay tahay firfircoonida adenoma pituitary, taas oo laga yaabo inay wax ku yeelato nidaamka kaadida, ama haddii ay sabab u tahay laf-dhabarka. Bifida, taas oo samaysay ka hor inta aan mindhicirku "naafoobin", oo laga yaabo inay hadda ka dhigtay habka kaadida "habboon".
Mar dhow ma awoodi doono inaan sameeyo baaritaanno kale. Daawaynta U safrida isbitaalka. Halkan iyo halkaas. Oo waxba ma shaqeeyaan. Kaliya waxaan rabaa inaan sariirtayda ku seexdo. Laakin ma seexan karo iyadoo maskaxda ay ka soo daadato, iyo calool xanuun waalan, iwm.… Ma haysaa talooyin ku saabsan daawaynta gastroparesis Norway.? Ogow in Haukeland ay ka masuul tahay Norway. UNN-na way ila socotaa marka la eego mindhicirkaygii dhintay.. laakiin waa inaan ka baxay nidaamka… waxaan u baahanahay isku-duwaha…
Waxaa lagu sameeyay qaliin dhowr burooyin ah, ilmo galeenka laga saaray, labada ugxan-yari ee burooyinka darteed, ayaa hematoma dhabarka kaga yaal, waxay ku leedahay afar buro oo yaryar qanjidhada thyroid hadda… waxay ku dhalatay buro unug isku xiran oo jilibka ah taas oo la qalay anigoo 5 jir ah. bilo jir ah, hadda waxay leedahay buro hadhaa ah oo ku taal qanjirka pituitary, waxayna leedahay laba burooyin oo dufan ah oo ku yaal lafaha lafaha. Way adag tahay marka jirku leeyahay cillado badan.
Oy, waa, Rønnaug! Tani uma muuqan mid wanaagsan. Waxaan fahamsanahay in tani ay si weyn u adkeyneyso nolol maalmeedka. emoticon aan la hubin Waa sida aad tiraahdo cudur aad dhif u ah inuu ku saameeyo - xitaa inta badan khabiirada norwiijiga ah ayaa aad ugu yar khibradooda.
- Sidoo kale daawaynta gastroparesis waxa lagu qabtaa rugta bukaan socodka caloosha ee Ullevål, haddii ay mawduuc adiga kuu tahay? Mise tani way adkaan doontaa maadaama aad Helse Nord ka tirsan tahay?
- Haddii kale waxaan ognahay in waxa shaqeeya ay tahay in la riixo oo la yiraahdo. Waa wax laga xumaado in ay sidaas noqoto, laakiin dhab ahaantii waa lagu illoobay haddii aadan weydiin "xagee warbixintaydu noqon doontaa?" ama "daawayn noocee ah ayaan qaataa, goormase la I siinayaa?" - gaar ahaan marka ay tahay mowduuc ay ku adkaato in lala xiriiriyo.
- Sidee waxaas oo dhami u saameeyaan heerka dhaqdhaqaaqaaga? Wax yar ma socon kartaa oo dhaqaaqi kartaa, mise waa xanuun aad u badan?
Ka warran talada cuntada? Miyaad ka heshay talo gaar ah oo ku saabsan waxa aad cuni lahayd/cabbi lahayd si aad uga fogaato 'qaraca' iyo wixii la mid ah?
Cici wuxuu leeyahay,
Waxaan qabaa xanuunka psoriatic arthritis-ka waxaana aad ula halgama laf dhabarta afka ilmagaleenka sare.
Tani waxay socotay dhowr sano. Raajooyin aan tiro lahayn, ul, physio ayaa la isku dayay. Qofna ma ogaan karo waxa khaldan. Aad baan ula halgamayaa madax-xanuun taas awgeed.
Xataa waxaan filayaa in kala-goysyadan ay adkaadeen oo ay mar walba ka sii darayaan.
Aad baan u bararay oo waxaad mooddaa inaan qoortu iga ruxayo.
Waxaan sidoo kale u maleynayaa in qallafsanaanta iyo kacsanaanta ay u horseedaan wareegga maskaxda oo xumaada taasna aad ayay ii welwelisaa.
Ma i caawin kartaa,
Alexander v / Vondt.net wuxuu leeyahay,
Ugu horreyn, waxaan kugula talineynaa inaad firfircoonaato oo aad u tababarto kartidaada - xor u noqo inaad tijaabiso qaar ka mid ah leyliga aan ku taxnay boggan. Waxa kale oo aad sheegaysaa in raajada iyo ultrasound ee ogaanshaha labadaba la qaaday, laakiin iyada oo aan wax natiijo ah laga helin. Sawir MRI ma la sameeyay?
Qallafsanaanta qaybta sare ee qoorta iyo qaybta hoose ee qoorta waxay ku siin kartaa saldhig waxa loo yaqaan madax-xannuunnada ilmo-galeenka. Haddii ay tahay xanuunka wadajirka ah ee dhibaatada ugu weyn, markaa waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo lafopractor dhamaystiran ama daaweeyaha buug-gacmeedka kaas oo diiradda saari doona labada kala-goysyada qoorta iyo murqaha halkaas ku xiran.
Ma qeexi kartaa madax xanuunkaaga? Ma sida cadaadis xagga dambe ee madaxa, mararka qaarkood macbudka iyo xataa sida cadaadis isha mararka qaarkood?
Margrethe wuxuu leeyahay,
Waxay leedahay barar ku dhaca seedaha Achilles. Horey u lahaan jirtay oo wax yar ka caawisay daawaynta hirarka cadaadiska. Waxay lahayd ciribta ciribta mararka qaarkood ka dibna daawaynta hirarka cadaadiska ayaa si fiican u caawisay. Ma ogi inay wax xidhiidh ah yeelan karto. Waxay u isticmaashaa kabaha kabaha si xad dhaaf ah.
Waxaan u tagay dhakhtarka lafaha si uu u maqlo haddii ay caawin karto qalliinka. Waa qabow weyn oo ku yaal dhabarka ciribta, laakiin ma jirin wax caawinaad ah oo aan ka helo marka laga reebo jimicsiyada aan marar badan isticmaalay. Hadda waxay u muuqataa inay "degtay". Wax caawiya ma jiro. Waxaan lahaa ugu dhakhsaha badan 2 sano hadda. Waxaan lahaa 5 daawaynta mawjadaha cadaadiska sannadkii hore, fidinta iyo tababarka murqaha kubka. Isku dayay daawada Naproxen, laakiin wali si la mid ah xanuunka.
Ku xanuunso inaad aado socod, laakiin qaado Voltarol kaas oo ku caawinaya in muddo ah. Curyaan markaan socdo taasoo mar kale keenta culeys aan sax ahayn jilibka, sinta iyo dhabarka. Doqon sababtoo ah waxaan aad u jecelahay inaan ku dhex socdo kaynta iyo beeraha.
Dhanka kale, waxaa i xanuunaya murqaha iyo kala goysyada, gaar ahaan subaxdii iyo markaan si deggan u fadhiyo muddo dheer.
Wax talo ah oo ku saabsan maxaa dheeraad ah oo aan samayn karaa?
Tendonitis ee Achilles iyo cilladaha kale ee cagaha iyo anqawga badanaa waxay leeyihiin xiriir. Waxyaabaha kale, waxaa la arkay in qallafsanaanta Haglund (kubbada lafaha ciribta) iyo ciribta ciribta ay leeyihiin fursad sare oo ah inay ku dhacdo haddii qofku uu leeyahay cillado anqawga iyo cagaha (sida kor u kaca ama cagaha fidsan) - tani waxaa sabab u ah culeyska kordhay sababtoo ah cagahu ma dhimaan culeyska naxdinta leh. Tani waxay sidoo kale u horseedi kartaa fascia aad u cidhiidhi ah oo ku taal dhinaca hoose ee ciribta cagta ee hore ee ciribta, tan waxaa loo yaqaan 'plantar fasciitis', waxaana badanaa loo tixgeliyaa sababta ciribta ciribta. Fasciyada dhirta ayaa jiidaya isku-xidhka lafaha ilaa uu jidhku isku arko inuu ku qasban yahay inuu dejiyo aagga isagoo ku shubaya kalsiyum halkaas, taas oo noqonaysa dabeecadda ciribta ee aan ku arki karno raajada.
Kubadda weyn ee ciribtaada waxaa sidoo kale loo yaqaan 'deformity Haglund'' waxayna si toos ah ugu xiran tahay dhacdooyinka sare ee tendonitis ee Achilles (!) Waxaad wax badan ka akhrisan kartaa maqaalkeena ku saabsan cilladaha Haglund - halkan waxaad sidoo kale ka heli doontaa talooyin iyo tallaabooyin gaar ah.
Uff, waxay u egtahay inaad ku dhamaatay wareeg xun (!) Daaweynta mawjada cadaadiska ayaa ku caawin doonta - laakiin nasiib darro waa qaali.
Miyaa laguu soo gudbiyay takhtar, lafopractor ama daaweeyaha gacanta? U gudbinta dadweynaha, waxaad dabooli kartaa qaybo badan oo loogu yeero kabo gaar ah ama sariiraha cagaha - wax u eg inaad u baahan tahay. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhaqdhaqaaq badan sameyso oo aad noqoto qof firfircoon.
Haddii kale waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso qaar ka mid ah jimicsiyada kala duwan ee aan ku hayno mareegahayaga (fiiri xiriirka boggayaga FB haddii aad u baahan tahay) iyo laga yaabee in yoga caafimaadka ay adigana kuu fiican tahay?
Miyaad isticmaashaa wax cabbiro / jimicsi joogto ah oo ka dhan ah cudurrada cagahaaga, jidka?
Turte wuxuu leeyahay,
Hi iyo mahadsanid soo jeedinta weyn! Waxaan ahay 47 sano jir waxaana naafo ah xanuun iga haya gacmaha iyo garbaha. Caajis habeenkii gaar ahaan gacmaha oo si xun u seexda sababtaas awgeed. Dhawr shil ayaa igu dhacay dhabarka/qoorta (isku dhac iyo dhicis) waxaana igu dhacay qoor aan "shaqayn" markaan madaxayga dib u foorarsado. Kadibna waxaa jira muruq yar oo aad u yar, madaxuna way fududahay in uu "dhaco" halkii laga xakamayn lahaa. Tani waa marka lafopractor uu sameeyo baaritaankan. Waxaan isku dayay tababarka dharbaaxada natiijo badan la'aan.
Markii hore waxaan ahaa mid aad u firfircoon inta badan tababarka / ciyaaraha, laakiin maanta waxaan kaliya socon karaa. Wax kasta oo aan ku sameeyo dhaqdhaqaaqa gacmahayga ayaa i adkeeya oo aad u xanuunsada maalinta xigta. Kadibna aad ayaan u caajisaa habeenkii haddii aan gacmahayga ku firfircoonaaday maalin ka hor.
MRI qoorta ayaa laga qaaday iyada oo aan wax natiijo ah laga helin. Horey ayaa loogu qalay soo-dhacyo u dhexeeya saxanadaha 2 iyo 3 ee dhabarka hoose. Kadib waxaa igu dhacay shucaac lugta midig waxaana iga lumay shaqada kaadida. U janjeerta in cagaha hoos loo dhigo qalliinka ka dib, laakiin hadda waa ok. Waxaa lagu dhibay garbaha cilladaysan, marka hore midig, ka dibna bidix.
Waxaan isku dayay lafopractor, physio, manual therapist, acupuncture, jimicsi iyo waxba i caawiya oo qofna ma ogaado xanuunadayda. Waxa kaliya ee i siin kara xoogaa horumar ah waa lafopractor, laakiin way xaddidan tahay waxa ay caawiso. Ku samee qaar ka mid ah yoga guriga oo ku fidi xabadka / garbaha, gacmaha iyo dhabarka maalin kasta, laakiin weli waxba ma samayn karo ilaa habeenka iyo maalinta xigta ay burburaan.
Waxay u egtahay in aad qabto xanuuno ka dib shilalka jilibka/qoorta ee qoorta. Shilalka noocan oo kale ah waxay sababi karaan waxyeello badan oo "aan la arki karin" oo ku dhaca seedaha, murqaha murqaha iyo fascia - xanuunku mar walba ma joogo isla markiiba, laakiin wuxuu u muuqan karaa meel kasta toddobaadka soo socda ilaa dhowr sano ka dib shilka laftiisa.
Tijaabada uu sameeyay lafopractor waxaa lagu magacaabaa Jull's test - tani waa tijaabo lagu hubinayo xoogga qallafsanaanta qoorta qoto dheer (muruqa qoorta DNF), kuwaas waxaa mar kale lagu tababari karaa jimicsiyo gaar ah oo qoorta ah - ma isku dayday mid ka mid ah kuwan? Haddaysan ahayn, waxaa aad loogu taliyaa murgacashada qoorta. Tababarka dharbaaxadu wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kaa caawiyo garbaha iyo laabta xanuunka, laakiin waxaan u badan tahay inaan marka hore kugula talin lahaa inaad isticmaasho barnaamijka tolida iftiinka sida kabka maalin kasta si aad u dhaqaajiso dhammaan muruqyada garabka iyo garabka garabka - kuwani waxay markaa rajeynayaan inay shaqeeyaan. Gacmahaaga - waxay u badan tahay markaas waxaa jira cillad xagga hoose ee qoorta iyo daabka garabka oo ku siinaya xanuun badan oo ku wajahan garbaha sidoo kale.
Way fiicantahay in la maqlo in aad ka heli karto xoogaa horumar ah lafopractor, laakiin nasiib daro waa kiiska sababtoo ah lacag celin la'aan, waxaa jiri doona lacag badan oo laga jari karo, gaar ahaan haddii aad naafo tahay. Laakiin waxaan kugula talineynaa inaad u tagto lafopractor marka aad u baahan tahay. Haddii kale aad ayay u fiican tahay in aad kala baxdo oo aad firfircoonaato intii aad awoodid - tani waxay ka hortagtaa xumaan.
Ma isticmaashaa wax is-cabbida oo kale ama wax la mid ah - sida tusaale; rullaluistemadka xumbo? Miyaa lagaa baadhay si aad u aragto haddii aad leedahay heerar hoose oo fitamiin D ah, fiitamiin B6 ama wax kale oo ku saabsan baaritaanka dhiigga?
Hi aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay jawaabta! Waxaan waydiin doonaa lafopractor barnaamijka tolida khafiifka ah ee dhaawaca qoorta, hore uma isku dayin taas. Waxaan sameeyaa laba jimicsi si aan u dhaqaajiyo qaybta sare ee dhabarka gudaha, laakiin hubaal waxaan samayn karaa wax badan oo si toos ah loogu talagalay garaaca.
Haa, waa qaali lafopractor, nasiib daro. Haddi ay kaliya fahmeen adeega caafimaadka waxa ay qabtaan shaqo aad u wanaagsan...
Ma haysto rullaluistemadka xumbo, laakiin waxaan sameeyay duub duub oo tuubo ah (maro lagu daboolay) kaas oo aan ku rogo oo aan kala bixiyo dhabarka sare, iyo sidoo kale fidin kasta "la-goysyada" ee laf-dhabarka si aad u fiicnaato.
Haddii kale, baadhista dhiigga ee aad sheegtay layguma hubin, laakiin waxaan dhakhtar waydiin doonaa inuu eego.
Way fiican tahay, waxay u egtahay in jimicsiyadaas ay kugu fiican yihiin - waxaan kugula talineynaa inaad kuwan si joogto ah u sameyso. Way fiicantahay inaad adigu sidoo kale samaysay rullaluistemadka xumbo kuu gaar ah, si fiican loo sameeyay! Ma xiisayn lahayd haddii aan ku qorno maqaal ku saabsan sida loo xoojiyo muruqyada qoorta qoto dheer iyo murqaha kuwaas oo khuseeya murgacashada qoorta? Waa inaan ka gudubnaa faraheena in ay jiri doonto lacag celin wanaagsan oo lafopractors sanadaha soo socda - tani waxay ka dhigi kartaa adeegyadooda kuwo la heli karo kuwa u baahan. Waxaad mooddaa dhiirigelin iyo guul-waxa aanu ku xasuusinaynaa in aanu halkan kuugu iman doono haddii aad wax su'aalo ah qabtid. Sidoo kale xasuuso inaad nagu raacdo Facebook, Turte, haddii aad halkaas ka diiwaan gashan tahay. Habeen wanaagsan!
Xaqiiqdii waxaan xiisayn doonaa maqaal ku saabsan xoojinta murqaha ka dib dhaawaca jilibka. Waan baadhay oo akhriyay internetka, laakiin way adag tahay in la kala saaro "dharka iyo sarreenka" dhammaan daadka macluumaadka aad hesho. Suulka kor u qaad oo aad baad u mahadsantahay!
Kadib waxaan bilaabaynaa inaan maqaal ka qorno arrintan, Turte. 🙂 Dib u eeg xilliga fiidkii oo waxaad arki doontaa in maqaalka la daabacay.
Cusbooneysii: Hadda jimicsigu waa diyaar, Turte - waad heli doontaa HER. Nasiib wacan!
Si aad u weyn oo cajiib ah in maqaalku si dhakhso ah loo sameeyay! Aad baad u mahadsantahay, waan jeclahay kan. 🙂
Ps, degelka halkan ayaa cusbooneysiiya oo waayi doona waxa aad qortay haddii aad qorto haddii aadan degdeg ugu filneyn 🙂
Anna Møller-Hansen wuxuu leeyahay,
Hello. Su'aal qabo waxaan jeclaan lahaa in laga jawaabo.
Waxaan maqlaa "dilaac" markaan dhaqaaqo madaxa ama qoorta. Maxaa sabab u noqon kara arrintan. Yaan caawimaad ka heli karaa? Waxaa laga yaabaa inaad dareento inay murqaha / seedaha dhagan yihiin. Haddii kale qaab fiican ma leeyahay.
Dildilaaca qoorta, garbaha iyo dhabarka ayaa muujin kara cillad xagga muruqyada iyo/ama kala-goysyada u dhow. Badanaa waa kala-goysyada dhow oo noqda dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa oo sidaas darteed cavitates ("jeexjeexa") dhaqdhaqaaq ka jawaabaya dhaqdhaqaaq la'aanta xubnaha u dhow iyo murqaha cidhiidhiga ah. Waxa laga yaabaa inay caadi tahay in digniinta yar si dhab ah loo qaato ka hor intaanay noqon dhibaato weyn hadhow. Lafopractor dhamaystiran ama daaweeyaha gacanta (midka daaweeya labada murqaha iyo kala-goysyada - maaha kaliya kala-goysyada) ayaa awoodi doona inuu kaa caawiyo qiimeynta shaqeynta oo kale oo uu sheego waxa aad sameyneyso marka xigta. Waxaan kugula talineynaa tababarka murqaha qoorta qoto dheer iyo wareegga wareegga iyo fidinta qoorta iyo laf dhabarta thoracic.
Tussa wuxuu leeyahay,
Hello. Waxaan qabaa fibromyalgia iyo Artosis. Si joogto ah u samee jimicsi jimicsi fiisiyoterabi, si fiican ayey u socotaa. Waxaan isticmaalay LDN muddo laba sano ah, laakiin way lumisay saameynteedii, sidaas darteed waxaan joojiyay dayrtii hore. Way socotaa…. Dhibka iigu weyn waa murqo xanuun gaar ahaan bowdada iyo ilaa gumaarka mararka qaarkood. Aad bay ii xanuunaysaa in aan qayliyo, ninkeyga wuxuu soo qaadaa Natron aan cabbo, waxay shaqeysaa qiyaastii 1 min ka dib… wax badan ha qaadan, dabadeed caloosha ayaa ku dhacda. Ma jiraa qof talo leh?
Calool-xannaanshaha lugaha waxaa sabab u ah wareegga dhiigga oo liita, fuuq-bax ama nafaqo-xumo. Qaar ka mid ah cilladaha ugu caansan waa thiamine (vitamin B1), fitamiin B5, fitamiin B6, fitamiin B12, fitamiin D, yaraanta birta, magnesium, calcium ama potassium.
Ma jiraan kuwo kuwan ka mid ah oo aad suurtogal u tahay inaad kab ahaan u qaadan karto - malaha isku day multivitamin? Ma isku dayday in aad iska baarto dhiiga si aad u aragto cilladaha kugu jira?
Heidi wuxuu leeyahay,
Hi, waxaan ku dhibtooday dhabarka sanado badan, waxay ku saabsan tahay adkaynta labada kala goysyada hoose, ma jiraan wax aan samayn karo si aan taas uga takhaluso?
Marka la eego in xanuunkaagu uu aad u weyn yahay, waxaan aaminsanahay in tababar iyo daaweyn ballaaran loo baahan doono si looga fogaado qalliinka dhabarka. Khatarta badan awgeed, qalliinka waa in loo isticmaalo oo kaliya sidii xalkii ugu dambeeyay. Takhtarkaaga guud ma kuu soo gudbiyay daweynta jimicsiga jirka?
Sarah wuxuu leeyahay,
Waxaan qabaa ankylosing spondylitis iyo fibromyalgia. Ku dhibtoonaya in badan oo muruqyadu hoos ugu dhacaan dhabarka dhinaca bidix oo ay sameynayaan in ka badan hal sano. Waxaad mooddaa inay bararsan yihiin ama ay fidsan yihiin oo haddii qof isku dayo inuu taabto waan jabaa. Hurdo celcelis ahaan 3-4 maalmood oo ku fadhiya sariirta sababtoo ah ma jiifsan karo sariirta maadaama ay dareemayso inaanan neefsan karin. Halganka iyo jeexjeexa muruqyada dhabarka hoose ee ku wareegsan kala-goysyada barafka. Tani ma wax la xalin karo baa?
Tani waxay u egtahay dhibaato u baahan daaweyn ballaaran iyo tababar la qabsi ah - tani waxay u baahan doontaa dadaal badan oo shakhsi ah iyo tamar, taas oo ay adkaan karto inaad naftaada ku dhiirigeliso. Ma laguu gudbiyay dhakhtarka jimicsiga jirka ee guud ee xanuunkaaga? Ruumatismka la yaqaan, waxaad heli doontaa inta badan daawayntan oo kale. Xanuunka arthritis-ku, kala-goysyada IS waxay noqon karaan kuwo aad u xanaaqsan oo saameeya, markaa waxay u badan tahay inay tahay kala-goysyada aad ku garanayso halkaas.
Hi, haa waxaan bilaabay inaan aado dhakhtarka jimicsiga jirka, laakiin ilaa hadda waxba igama caawinin dhibaatooyinka dhabarka. Waxa ay in muddo ah ka caawisay xanuunnada ku jira kala-goysyada barafka, laakiin hadda waxa aan ku jiray xilli xun muddo aad u yar. Ma jirtaa daawayn kale oo kaa caawin karta marka lagu daro daawaynta jimicsiga?
Fiisiyoterabigu waa inuu isticmaalo habab badan oo daaweyn ah haddii farsamooyinka muruqa ee uu isticmaalo aanay shaqaynayn. Waa maxay noocyada daawaynta ee la isku dayay ilaa hadda? Maxay yihiin hababka daawaynta ee aad u malaynaysay inay saameyn ku yeesheen dhibaatooyinka dhabarkaaga?
Waxaa jira siyaabo kale oo lagu beddelan karo, laakiin markaa waxay leeyihiin lacag badan oo laga jari karo - sida, tusaale ahaan, lafopractor guud kaas oo daaweeya murqaha iyo kala-goysyada labadaba. Waxa kale oo suurtogal ah in daawaynta irbaddu ay kuu noqoto hab daawayn fiican. Waa inaan maskaxda ku haynaa in ankylosing spondylitis (oo hore loogu yiqiin ankylosing spondylitis) uu yahay ogaanshaha sii socda. Sidaa darteed waa muhiim inaad runtii naftaada geliso tababarka oo aad sameyso wixii aad awoodid si aad u joojiso horumarka.
Goorma ayaa la qaaday sawirka muujinaya inaad haysatid AS/Bekterevs? Ma wakhti hore baa? Hadday sidaas tahay, sawir dabagal ah ma la qaaday?
soonuush wuxuu leeyahay,
Waxa aan dareemay xanuun tan iyo Oct.15, waxa aan bilaabay in aan mindida ka qaado cudud/gacan iyo garbaha. Saamaynta wanaagsan ee paracetamol iyo ibux, laakiin si tartiib tartiib ah saameyntu way yaraatay. Waxay ku bilaabatay Tramadol bishii Disembar, saameyn wanaagsan leh, laakiin Janaayo saameynteedu sidoo kale hoos ayey u dhacday. Intaa waxaa dheer, xanuunku wuxuu bedelay dabeecadda. Waxaa ku dhacay xanuun aad u daran gacanta oo dhan (laga bilaabo Janaayo). Dhaqtarku wuxuu u gudbiyay MRI ee curcurka, taas oo muujisay isbeddello xun oo ku wareegsan suulka, iyo barar weyn oo ku wareegsan faraha iyo suulka, iyo xididka suulka. Waxa kale oo uu joogay dhakhtarka Daawada Jirka oo aan waxba helin, kaliya loo gudbiyay MRI togan ee xanuunka rheumatic.
Sababtoo ah xanuunka weyn, dhakhtarku wuxuu rabay inuu isku dayo daaweynta prednisolone, isla mar ahaantaana wuxuu u gudbiyay bukaan-socodka bukaan-socodka rheumatology. Daawada Prednisolone waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan, qiyaastii hal toddobaadna ma helin wax xanuun ah hal mar. Sida prednisolone hoos u dhacday, xanuunku si tartiib tartiib ah ayuu u kordhay.
Waxa aan ballan ka helay rugta bukaan-socodka ee rheumatology 4-5 maalmood ka dib markii la dhammeeyey daawaynta prednisolone, iyo hubinta ultrasound ee iyada ayaa muujisay wax caabuq ah. Dhakhtarku wuxuu u gudbiyay bukaan-socodka bukaan-socodka neerfaha waxayna ku hubiyeen "hadda" neerfaha ama wax kasta oo ay yihiin. Dhakhtarka neerfayaasha ayaa baadhay labada gacmood, wuxuuna sheegay in calaamaduhu ay ku dhex jiraan inta caadiga ah ee labada gacmood, laakiin xoogaa daciif ah cududda ba'an.
Waxa uu la yaabay in ay tahay wax rheumatic ah maadaama xanuunku uu u badan yahay kala goysyada (garabka, curcurka, faraha, lugaha). Waxa uu dareemaa sida kubbad tuurista nidaamka.
Dhammaan shaybaadhka dhiigga ilaa hadda waa taban (rheumatic).
Ka socota dhakhtarka FMR - Wax rheumatic ah
Laga soo bilaabo Rheumatologist - Wax neerfaha ah
Laga soo bilaabo dhakhtarka neerfaha - Wax rheumatic ah
Dhanka kale - Waxa aad ku jirtay fasax jireed inta badan 4-5 bilood hadda, gr. mararka qaarkood xanuun aad u daran.
Maxay noqon kartaa???
Sidee xanuunku ku bilaabmay? Ma waxay yimaaddeen dhaawac, kuf ama wax la mid ah? Mise si tartiib tartiib ah ayey u kaceen? Xanuun-jabiyeyaasha waxay u dhaqmaan xoogaa sida cajalad-daboolan (ma hagaajinayso dhibaatada, laakiin way qarinaysaa) saameyntooduna way yaraan doontaa wakhti ka dib, maaddaama beerka iyo enzymes ay noqdaan kuwo waxtar leh si ay u jajabiyaan.
Sidoo kale ma ku haysaa xanuun kala-guurka u dhexeeya qoorta iyo laf-dhabarta thoracic / ka soo baxa garabka? Burburinta iyo mindida gacanta ee xanuunka ayaa laga yaabaa inay muujiyaan inaad qabtid soo-jiidashada ama cudurka saxanka ee qoorta. Dhakhtarku waa inuu tixraacaa MRI ee laf-dhabarka ilmo-galeenka si uu u eego haddii ay jirto xanaaq ka dhan ah xididka dareemayaasha aaggan. Tijaabada korantada korantada ayaa sidoo kale ah mid togan oo ku taal gacanta su'aasha, markaa way caddahay in wax ay ku cadaadinayaan neerfaha. Waxaan rabnaa inaad u tagto GP-ga oo aad ka codsatid MRI qoorta si aad u hubiso cudurka soo noqnoqda / saxanka halkaas. Tani waa, ka dib oo dhan, imtixaanka "heerka dahabka" ee cudurradan oo kale.
Waxaan kuu soo jeedineynaa in xanuunkaagu uu sabab u yahay soo-dhaca ilmo-galeenka oo cadaadis saaray xididdada neerfaha C6 ama C7 - iyo in nidaamka caafimaadka ee lagugu tuuray hareeraha uu illoobay inuu baadho meesha sababta keentay taas beddelkeedana wuxuu diiradda saaray meelaha calaamaduhu ka muuqdaan. .
Sonyush wuxuu leeyahay,
Waxaan qaatay MRI qoorta bishii abriil. Ma laha soo dhac. MRI ee curcurka iyo gacanta ee la qaaday Febraayo waxay muujinaysaa isbeddellada hoos u dhaca (osteoarthritis la mid ah).
Laba jeer oo hore ayaa qoorta iga soo dhacay, iyo inta u dhaxaysa C6 iyo C7. Xanuunadani waa kuwo xoogan laakiin way kala duwan yihiin. Wac prolapse sep-14
Xanuunku wuxuu bilaabmay Oktoobar wuxuu ahaa kaliya curcurka iyo aagga gacanta iyo garabka (lagoyska). Dabadeedna ay isla halkaa ku qaniineen. Waxba kuma qaadi karo gacantaas, sababtoo ah markaas waxay jeclayd in mindi gacanta laga geliyo. meesha ku wareegsan curcurka ayaa noqotay wax yar barar iyo midab buluug ah.
Shucaaca garabka ilaa faraha ayaa yimid Janaayo. Dabadeed waxa ay bilowday in ay gacanta oo dhan ka gasho qaraxyo kale. Ka dib waxaan bilaabay isticmaalka oxynorm, maadaama paracetamol, ibux, tramadol aysan shaqeynin. MRI gacanta ee feb
Isticmaalka Prednisolone bisha Febraayo, rugta bukaan-socodka laabotooyinka ee Maarso. Markaa waxba inkastoo MRI-ga togan. Prednisolone oo saameyn wanaagsan ku leh xanuunka. Daawo Mucjiso
Xanuunkii ayaa mar kale beddelay dabeecadda. Waxa aan bilaabay in aan xanuun ka dareemo jidhkayga oo dhan. Maqaarka xasaasiga ah.
La dalbado MRI laf-dhabarta ilmo-galeenka, ma jiraan soo-dhac cusub, laakiin nabarradii hore ee qalliinka kadib. Saacad lala socdo dhakhtarka neerfaha, oo lagu hubiyay kharashka korontada, jawaabaha caadiga ah, laakiin calaamadaha daciifka ah. Wax uu u maleeyay inay sababtay cududda laga hadlayo ayaa xoogaa bararay. Haddii kale wax walba waa ok. Baaritaanka neerfayaasha - taban, baaritaanka spurlings - diidmo.
MRI-ga cusub, garabka markan, oo la qaaday usbuucii hore, weli ma garanayo jawaabta.
Shakhsi ahaan, waxaan haystaa badhan dhibaatada laabotooyinka. Sababtoo ah: prednisolone si fiican ayey u shaqeysaa (waxay muujineysaa in xanuunka uu sabab u yahay bararka indhahayga), waxaan haystay saacad 3-4 maalmood ka dib isticmaalka prednisolone, bararka laga yaabo in uu jiro ayaa la baaray. Oo ha iloobin jawaabaha MRI ee togan.
Laba ama saddex maalmood ka hor, waxaan gacantayda ku qariyey guntida khaanadda ee jikada. Ilbiriqsiyo gudahood ayaa xanuun iyo barar iyo casaan igu dhacay. Waxyaalo badan oo noloshayda ah ayaan qariyey, anigoon ilbidhiqsiyo gudahood ku yeelan qabow sidan oo kale ah. Waxay i tusinaysaa inuu jiro caabuq ka socda xagga hoose.
Shucaaca xanuunka gacanta iyo xanuunka jidhka ma keeno dhaawac, indhaheyga waxay joogaan kaliya sababtoo ah 8 bilood gudahood ma helin daaweyn dhibaatada ugu weyn, kaliya xanuunka.
Hello. Ma haysaa wax dheeraad ah / fikrado kale. Wali xanuun
Waxa kaliya ee cusub ayaa ah inaan ku bilaabay Chiropractor wuxuuna ka shaqeeyaa xanuunka jirka. Jir xanuun yar. Dareenka maqaarka oo yaraada.
Laakiin arrinta la yaabka leh ayaa ah in cududda iyo garabka xanuunku ay aad u caan yihiin. Aad u daran.
Hi Sonush, halkan waxaa laga yaabaa inaad u samirto. Mar walba ma aha in ay jirto "xag deg deg ah" dhibaatada - wax aysan u muuqan in lagu sameeyo kiiskaaga.
Waxaan kaliya kugula talin karnaa inaad sii waddo jimicsiga, hesho daawaynta jirka oo aad rajaynayso in dhibaatada iyo sababtu ay si tartiib tartiib ah u bogsan doonaan.
Waxaa laga yaabaa inaan aaminsanahay in dareenka maqaarkaagu uu sabab u yahay isticmaalka cortisone (Prednisolone waa daawada cortisone). Waxaad ka akhrisan kartaa wax ku saabsan dhibaatooyinka soo raaca ee Buuga Guud:
Waa i.a. 1% fursad (1 100kiiba) inaad ku aragto calaamadaha maqaarka / jirrooyinka. Wax kale oo 1% fursad u ah waa atrophy muruqa / murqaha oo luma - taas oo markaa u horseedi karta xanuunka jirka. Markaa haa, inkasta oo ay si mucjiso ah uga shaqeyso caabuqyada iyo caabuqa, ma jirto daawo mucjiso ah oo aan lahayn waxyeelooyin - xitaa ubaxyadu waxay leeyihiin qodax. Dareen xor u ah inaad akhrido iyada oo loo marayo isku xirka kore oo noo sheeg waxyeellooyinkan aad la kulantay.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa interaksjoner.no si aad u aragto haddii aad wada qaadataan wax daawo ah oo aan la isku qasin.
Merethe Furuseth Rammen wuxuu leeyahay,
haye haye. Haweeney 55 jir ah ayaa si buuxda u shaqeysa iyadoo la dhibtooneysa lugteeda bidix, min miskaheeda ilaa lugaheeda hoose. Dhowr jeer ayaa dhakhtarka u tagay, laakiin waxba ma uu helin. Xanuunku wuu yara rogmanayaa, mararka qaarkood waxaa i xanuunaya sinta iyo bannaanka bowdada, marna lugta iyo bannaanka lugta ee dhinaca bidix.mararka qaar aad ayay u xanuunaysaa socodka, adkaynta iyo ku gub lugta. Wuu yara niyad jabaa marka uu sidaa u socdo oo aanu waxba ogaan. Waad ku mahadsan tahay Merethe?
Waxaa jira dhowr sababood oo xanuunka aad qeexday, laakiin inta badan waa dhibaatooyinka isku dhafan ee muruqyada, neerfaha iyo kala-goysyada kuwaas oo bixiya sawirka guud ee xanuunka. Waxaan kugula talineynaa inaad baaritaan ka hesho lafopractor oo xirfad u leh murqaha iyo kala-goysyada labadaba - waxay sidoo kale noqon kartaa in laguu gudbiyo MRI dhabarka hoose si loo eego haddii ay jiraan cadaadis xididdada dareemayaasha aagga.
Sidoo kale waa kiiska shaqada daciifka ah ee laf-dhabarka miskaha / lafaha lumbar ee leh murqaha murqaha ee la xidhiidha sinta iyo glutes waxay bixin karaan saldhig waxa loo yaqaan. been sciatica. Tani waa xaalad murqaha iyo kala-goysyada aan shaqaynayn ay 'ka xanaajiyaan' neerfaha sciatica ee soo mara goobta fadhiga - taas oo keenta xanuunka lugaha iyo calaamado kala duwan oo neerfayaasha, inta badan dareenka in ay gubanayso ama adkeynayso aagga. Waxaan kugula talineynaa marka lagu daro raadinta lafopractor xirfad leh (waxaan ku siin karnaa talo haddii loo baahdo) isku day tallaabooyinkan iyo in aad sidoo kale aad diirada saarto fidinta dabadaada.
Grethe Skogheim wuxuu leeyahay,
Muddo 5 sano ah waxaan ku socday xanuunka faraha gacanta ee garabka garabka ee dhinaca bidix. Ma jirto caawinaad lagu helo. Way gudbi doontaa. Wuxuu lahaa qandho gout isagoo 15 jir ah. Linfigu sidoo kale aad buu u xanuunsadaa. Qabo cudurka celiac
Halkan waxa laga yaabaa inaan u baahanahay macluumaad dheeraad ah si aan awood ugu yeelano inaan ku caawino. Way fiicantahay haddii aad wax yar ka qori karto xanuunkaaga iyo xanuunkaaga.
1) Maxaad dareemeysaa in ay tahay sababta uu xanuunku u bilaabmay 5 sano ka hor?
2) Maxaa hagaajiya xaaladda maxaase ka sii daraya?
3) Ma qabtaa dhibaatooyinka lymfatic? Ma leedahay barar ka dhashay lymfa?
4) Baadhitaan sawir-baadhiseed ee xaaladahaaga ma la sameeyay? Tusaale ahaan. MRI qoorta?
5)Maxaad caawimo ka rabtaa? Talo? Tallaabooyinka? Jimicsiga?
Waxaan rajaynayaa inaan kaa sii caawiyo.
Waxaan garabkayga ku dhacay 10-12 sano ka hor. Wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa 5 sano ka hor akil2. Kadib waxaa iga xanuunay madaxa, luqunta, garabka, xusulka cududda sare, cududda, curcurka iyo 3da farood ee dibadda. Waxaan u tagay lafopractor, physiotherapist, mawjad cadaadis ah, iwm. Waxaan u maleynayaa inuu jiro caabuq dabadheeraad ah oo ku dhaca muruqa ama lugta. Wax xanuun ah ma jiro markaan seexanayo ama nasanayo. Taabashada gacanta ayaa ka sii daraysa xaalada. Hadda waa 66 jir waligeedna xanuun hore uma dareemin.
Maxaad uga jeedaa hawlgalka 'akil2'?
Mary wuxuu leeyahay,
Waxaan la joogay lafopractor dhowr maalmood ka hor waxaana la iga helay sciatica labada lugood + dhaawac ka soo gaaray muruqa bidix. Waxa kale oo aan lahaa xanuunka tendonitis ee labada gacmood ku dhawaad ​​laba sano, waxaanan ku bilaabi doonaa daawaynta laysarka tan iyo lugahayga dhawr toddobaad gudahood. Markii hore waxaan ahaa mid aad u firfircoon oo si joogto ah u tababbaray tababbarka xoogga miisaanka jidhka iyo yoga, laakiin hadda waxaan firfircoonayn 3-4 toddobaad sababtoo ah dhaawacyada lugahayga ah taasina waxay dareemaysaa xumaan jir ahaan iyo maskax ahaanba. Lafopractor-ka ayaa ii sheegay inaanan hore u leexin (fidin murqaha bowdada gadaasha) ama squats, maydadka iyo jimicsiga noocaas ah. Waxa uu sheegay in aan aadi karo socod (inkasta oo tani ay dhaawici karto), baaskiilka oo aan sameeyo tababbarka xoogga fudud. Waxaan markaa la yaabanahay: Waa maxay jimicsiyada (tababarka xoogga fudud) ee aan ku samayn karo sciatica iyo kaydinta dhaawacan, ma tababari karaa jidhka hoose oo dhan? Waxaan isku dayay inaan ogaado waxaan samayn karo, laakiin waxba kama heli karo internetka. Waxa aan tababari karayay jidhkayga sare, laakiin waxa aan cududheyga ku hayaa xanuunka loo yaqaan tendinitis mana qaadi karo wax badan sababtan awgeed. Waxaan akhriyay internetka in haddii aadan lumin xoogga / dhaqdhaqaaqa / dhererka kaydinta haddii ay dhacdo dhaawac, markaa waxaa muhiim ah in la sameeyo jimicsi gaar ah si dhakhso ah ka dib markii marxaladda ba'an ay dhaafto (tusaale ahaan Nordic hoarding). Wali xanuun ayaa i haya, waxaana laga joogaa ilaa hal bil tan iyo markii aan ka dhaawacmay muruqa - iyo sida aan sheegay, waxaan bilaabi doonaa daaweynta laysarka laba toddobaad gudahood. Miyaan ka tagaa ilaa aan ka bilaabayo daawaynta?
Mahadsanidiin horraan 🙂
Sababta uu xanuunka loo yaqaan 'chiropractor' uu ku waydiistay inaad ka fogaato jimicsiga fidinta hore ee foorarsiga ah ayaa ah in ay siiso cadaadis xoog leh oo caloosha ah oo ka dhan ah saxannada intervertebral (taas oo waxyeello u geysan karta mustaqbalka fog, tani waa mid ka mid ah sababaha loogu yeero fadhiista militariga. -ups gabi ahaanba waa ka baxsan yihiin barnaamijyada tababarka casriga ah) - tani waa dabiici ahaan aad u xun marka aad leedahay xanaaq ka dhanka ah neerfaha sciatic. Si kastaba ha ahaatee, habab kale oo lagu kala bixiyo muruqa muruqa iyada oo aan dhabarka laga helin wax badan waa in weli la sameeyaa - iyadoo ku xiran heerka dhaawaca.
Waxaad jimicsi ku samayn kartaa kubbadda daawaynta ama jimicsigan iyada - waxay horumariyaan mtp kuwa qaba sciatica / sciatica. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad isku daydo tallaabooyinkan.
Markaa haa, waad jimicsan kartaa, laakiin waa inaad ka fogaataa dabacsanaan badan oo aad iska ilaaliso jimicsiyada siiya cadaadis caloosha oo aad u sarreeya.
Waa maxay sababta aad u sugto waqti dheer ka hor inta aanad bilaabin daaweynta laysarka? Waxaa jirta fursad sare oo ah in kaydintu iskeed u bogsanayso toddobaadyadan - laser waa in la isticmaalo sida ugu dhakhsaha badan dhaawaca ka dib si loo helo waxtarka ugu fiican.
Waxay u egtahay inaan heli doono kubbad tababarka sida tan. Labacsanaanta dhabarka (dhabarka, yoga) ma tahay wax ay tahay inaan iska ilaaliyo iyadoo maskaxda lagu hayo sciatica? Waa inaan ugu yaraan ka fogaadaa ku-jileecyada, laakiin ma sameyn karaa dhaawacyadayda tusaale ahaan. Layligan loogu talagalay dabada, mise waxay ku qaadataa wax badan kaydinta?:
Kala bixitaan kaduwan oo aan lahayn dabacsanaan badan oo dhabarka ah - ma jiri karaan wax la mid ah halkan? Runtii aad ayaan u jilicsanahay, oo sida caadiga ah lugahayga meel fog ayay u soo dhaadhacaysaa wejigayga, laakiin hadda lugtu way istaagtaa marka ay toosan tahay, haddii aan intaas ka sii qaadona waxaa i xanuunaya:
Waxaan ka baqayaa inaan helo muruq gaaban iyo luminta jilicsanaanta iyo sidoo kale xoogga. Waxaan ka fogaaday fidinta iyo tababarka lugahayga gabi ahaanba sababtoo ah ma rabo inaan sii xumeeyo dhaawacyada / xanaaqa muruqa (waxaan akhriyay in kaydinta la sii wadi karo), laakiin haddii jimicsiyada kor ku xusan ay yihiin ok in la sameeyo, waa in si buuxda loo sameeyaa si aan xanuun lahayn. ? In kasta oo ay muddo ka soo wareegtay markii uu dhacay dhaawaca kaydinta, inta badan waxa i xanuuna aniga oo aan hore u kicin. Ma ku talin lahayd jimicsiga kaydinta Waqooyiga Yurub si loo xoojiyo oo looga fogaado luminta xoogga?
Daaweeyaha laysarka ma joogin markii aan halkaas joogay, wayna adagtahay oo waxay qaadataa wakhti dheer in la tago lagana soo tago goobta daaweynta si wadajir ah oo aan wax ku barto oo aan dhab ahaantii ku noolahay qayb kale oo dalka ah - dhammaan arrimahan waxay ka dhigan yihiin in fursadda ugu horreysa daawaynta waa horaanta Luulyo. Waa murugo inaan sugo waqti dheer, inkastoo ay si cajiib ah muhiim iigu tahay inaan fiicnaado oo aan awoodo inaan si caadi ah uga qaybqaato nolol maalmeedka.
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada
Hi mar kale, Marie,
Waxaan kuu shaqeynayaa maqaal leh jimicsiyo gaar ah oo hadda ku anfici doona. Waa in lagu daabacaa 2-3 maalmood gudahood. Laab laabashada dhabarka, laakiin aan xanuun lahayn, ayaa loo samayn karaa dhabarka. Waxa ugu muhiimsan waa in aad si degan ugu dhaqaaqdo dhanka horumarka iyo horumarka. Waxa ugu xun ee aad samayn karto waa joojinta gebi ahaanba - muruqyadu waxay u baahan yihiin dhaqdhaqaaq iyo dhaqdhaqaaq si ay u awoodaan inay naftooda ku bogsadaan. Sidoo kale waxay xasuusinaysaa in jidhku u baahan yahay fiitamiin C dheeraad ah si loo hagaajiyo murqaha.
Waa run in qofku aanu dareemin xanuun badan marka la samaynayo jimicsiga, sidaa awgeed waxa muhiim ah in lagu bilaabo jimicsiyada qaar oo xoojiya murqaha ku lug leh si tartiib tartiib ah, laakiin aan keenin dhaawacyo xad dhaaf ah. Haddii aad PM noogu soo dirto Facebook markaas waxaan kuu heli karnaa daaweeyaha/daaweeyaha lagugula taliyay.
Anita Larsen wuxuu leeyahay,
Hi? Ma jeclaan lahayd in aan soo diro layliyada ka dhanka ah sciatica. Jimicsi weyn oo aan ninkayga siin doono!
Markaa waxaan si naxariis leh kaaga codsanaynaa inaad like saarto boggayaga oo la wadaagto asxaabta - ka dibna waxaan u baahanahay emailkaaga si aan u soo dirno. 🙂
Elisa wuxuu leeyahay,
Hello. Dhakhtarkaygu waxa uu sheegay shalay in aan bukay buko, aad bay iigu timid, maantana waan ka yara roonahay, laakiin qoortu way igu adag tahay. Laba xuubka xuubka ayaa garabka igaga dhacay wax ka yar hal sano. Markii ugu horeysay ee aan lahaa xuubka xuubka, madax xanuunka dhanjafka ayaa bilaabmay. Oo markan waxaan helay cudurka crystal. Ma jiraa xidhiidh ka dhexeeya xuubka xabkaha, dhanjafka iyo melanoma crystal? Maxaa sabab u noqon kara? Ma jiraan wax aan samayn karo si aanan ula noolaan xanuunka iyo mararka qaarkood xanuunka weyn, iyo in xanuunada ay soo noqdaan? Waad ku mahadsan tahay Elisa.
Kuwa qaba xanuunka dhanjafka waxay leeyihiin dhacdooyin sare oo ah melanoma crystal sida cilmi baaris lagu sheegay. Waxaan kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkeena ku saabsan cudurka crystal oo uu kuu akhriyo makaanikada ka dambeysa ogaanshaha cudurka. Waxaan sidoo kale daabacnay maqaallo muujinaya talo wanaagsan iyo tallaabooyinka ka hortagga dawakhaad. Xor ayaad u tahay inaad sidoo kale tijaabiso.
Haddii kale waxaan kugula talineynaa inaad la tashato lafopractor ama daaweeyaha buug-gacmeedka si loogu daaweeyo firfircoonida cudurka crystal-maxaa yeelay tani waxay u baahan tahay kaliya 1-2 daaweyn caadi ah si loo soo kabsado dhamaystiran - caafimaad ahaan la xaqiijiyay.
Nasiib wacan; Elisa.
Markus wuxuu leeyahay,
Waxaan la dhibtoonayaa xanuunka qaybta hoose ee laftayga bidix.
Xanuunku si joogto ah uma hayo. Waxay ka muuqdaan meelo iyo dhaqdhaqaaqyo gaar ah. Xanuunku wuxuu iigu daran yahay ka dib markaan seexday in muddo ah. Waxaan u malaynayaa inay sababtu tahay anigoo kacsan oo garbaha kor u taagaya, muddo dheer. Waxay u noqotaa meel khaldan oo lafta lafaha waxayna keentaa xanuun. Waan kacaa oo garabkayga dejiyaa. Markaa way damqanaysaa. Maalinta oo dhan, xanuunku wuu yaraadaa.
Waxa kale oo aan la kulmay dhaqdhaqaaqa oo yaraada. Kor-u-qaadista iyo qaadista cududda bidix waxay keentaa xanuunka lafta-collar, iyo sidoo kale aagga garabka garabka. Waxaan isku dayay nooc cusub oo riixis ah dhowr bilood ka hor. Waxaan sameeyay riixitaan joogto ah iyadoo gacmahayga ay kala fog yihiin garabka balladhka, laakiin xusulkayga ayaan ku hayay jidhkayga. Dhawr toddobaad ka dib, xanuunka laf dhabarta ayaa bilaabmay. Waxaan filayaa in tani ay tahay sababta hadda xanuunka aan dareemayo, laakiin sida uu u daran yahay iyo halka uu xanuunku ka jiro (muruqa, laf-dhabarka laftiisa) waxaan rabaa jawaab.
Intaa waxaa dheer, laf dhabarta ayaa dhaqaaqday ka dib markii xanuunku bilaabmay. Lafahayga midig ayaa dareemaya oo u muuqda mid caadi ah. Marka la barbardhigo midigtayda, laf dhabarta bidix ayaa sida muuqata kor u kacaysa. Waxay u taagan tahay si toosan marka loo eego si toos ah sida lafaha midigtayda u taagan yahay. Tani ma dhab baa? Ma noqon kartaa mid waara?
Maxay noqon kartaa sababta xanuunka qaybta gudaha ee lafta laf dhabarta ee laabta? Waxa aan la kulmaa xanuun cadaadis ah agagaarka aaggan. Markaan ku cadaadiyo qaybta gudaha ee laf dhabarta, waxaan dareemaa nooc xanuun ah. Waa xanuun iyo jilicsanaan.
Maxaan u baahanahay inaan sameeyo si aan xanuunkan isaga saaro? Waxaan la socday raaxo la'aan ku dhawaad ​​laba bilood. Waxaan rajeynayaa inaanan sugin waqti dheer si ay u noqoto mid waara.
Qaarkood waxay yiraahdaan qaybta gudaha ee lafaha koodhka marka ay ula jeedaan dhinaca garabka iyo kuwa kale waxay ula jeedaan dhinaca saxanka xabadka - iyadoo lagu saleynayo xanuunka aad sheegayso waxay u egtahay inaad leedahay xannibaad / xanaaq wadajir ah oo AC ah, iyo sidoo kale hoos u dhaca xasilloonida wareegga wareegga iyada oo la xiriirta tababarka aad qabato. Markaa waxaynu ka hadlaynaa isku dheelitir la'aanta muruqa iyo xasilloonida. Diiradaadu waa inay ahaato tababarka xasilloonida cuff rotator + hore ee serratus, fidinta muruqyada pectoralis, iyo sidoo kale helitaanka caawinta lafopractor ama daaweeyaha gacanta si loo dabciyo xannibaadaha wadajirka ah ee u dhexeeya garbaha garbaha iyo u gudubka qoorta.
Waxaad ka heli doontaa jimicsiyo wanaagsan oo garbahaaga ah iyada.
Marit wuxuu leeyahay,
Hello. Waxaa laga helay Polyneuropathy. Wuxuu rabaa inuu ku noolaado nolol firfircoon, laakiin wuxuu la kulmaa calaamadaha sii xumaanaya inta lagu jiro jimicsiga (xanuun daran oo lugaha ah ilaa jilibka ka sarreeya iyo gacanta oo dhan ilaa curcurka). Wax talo ah oo wanaagsan?
Halkan waxaan rabnaa in yar oo tafaasiil ah iyo macluumaad ku saabsan dhibaatooyinkaaga ka hor inta aanan ku siin talo iyo tilmaamo gaar ah. Laakin jimicsiyadan ka hortagga neerfaha xanuunka lugaha kuu fiicnaan kartaa ugu yaraan.
Inez wuxuu leeyahay,
Hello. Ka dib markii la igu sameeyay epidural'ka xilliga dhalmada, qoorteyda midig aad bay ii xanuunaysaa hadda iyo ka dib. Aksom shay wuxuu ku fadhiyaa irbad ka soo horjeeda neerfaha ama muruqa… Oo waxay ka soo baxdaa garbaha ilaa madaxa hoostiisa…
Markaa aad baad ugu mahadsan tahay jawaabta, sidoo kale waxaa laguu sheegi karaa inaadan garanayn waxaad ku jawaabto. Hadda waxa uu noo yimid dhakhtarka oo waxa aanu helay caawimo…..
Waan ka xunahay jawaabta daahday - isfaham la'aanta cidda ay tahay inay u jawaabto. Waa in tan lagaa baaro GP-gaaga - halkan waxaa laga yaabaa inay tahay su'aal qaadashada MRI si loo qiimeeyo dareeraha CSF iyo haddii ay jiraan isbeddello cadaadis ah oo ku yimid xudunta laf-dhabarka ka dib epidural'ka halkaas la dhigay.
Waxay u badan tahay inay fiicnaan doonto wakhti ka dib, maadaama dareeraha laf-dhabarka si joogto ah loo beddelo, laakiin waxay u badan tahay inay sii jiri karto wakhti soo socda.
Talooyinkayadu waa inaad la xiriirto GP-gaaga. Waxaan kuu rajaynaynaa soo kabasho wanaagsan iyo nasiib wacan!
Sigrid wuxuu leeyahay,
Hi, ku dhibtay qoorta iyo garbaha oo xanuunaya. Waxay u malaynaysaa inay aad u badan tahay. Muruqyo badan oo guntin ah oo qoorta iyo garbaha garbaha ah. Ma hubtaa cidda aad u jeeddo, masseur ama lafopractor? Qoorta oo qallafsan oo gacmaha ka ifaysa marka ugu xun. Waa firfircoon yahay oo jimicsi sameeyaa, kaas oo si fiican u shaqeeya. Waxaa ka sii daran haddaan barkin isticmaalo habeenkii.
Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto lafopractor si cad loo ansixiyay oo xubin ka ah Ururka Dhakhaatiirta Noorwiijiga oo si buuxda u shaqeeya - sida murqaha iyo kala-goysyada labadaba, wax badi lafopractors casriga ah ay sameeyaan.
Haddii aad nagala soo xiriirto boggayaga Facebook fariin gaar ah, waxaan ku siin karnaa talo ku saabsan daaweeyaha kuu dhow.
Aslaug Irene Espeland wuxuu leeyahay,
Hi :-) Waxaan xiiso weyn u qabaa in aad wax ka akhrido daawaynta cusub ee lugaha nasasho la'aanta ah maadaama ay tani aad ii dhibayso :-)
Lacag aad dawooyin ah ku bixi bil walba sidaa awgeedna aad rabto in aad qiimo ku iibiso badeecadan cusub ee dhawaan la soo saaray ???
Waan kaa caawin karnaa taas, waad ogtahay.
Wax badan oo ku saabsan alaabta waxaad ka akhrisan kartaa maqaalka aan daabacnay ama mareegaha ay ku leeyihiin - google 'RESTIFFIC' (taasi waa waxa badeecada loo yaqaan). Maadaama ay caddeeyeen inay waxtar badan yihiin, nasiib darro qiimuhu aad buu u sarreeyaa (qiyaastii 3000 oo krone ayaan filayaa).
Noo sheeg haddii aad weydo alaabta.
Live wuxuu leeyahay,
Hi, tababar noocee ah ayaa lagula talinayaa CMT? inta badan laga soo weeraray lugaha. Waxaan aadaa daaweeyaha jimicsiga oo halkaas waxaan ku sameeyaa tababbarka dheelitirka, kaas oo loo baahan yahay maadaama aanan haysan wax dheelitir ah. Laakiin jimicsi noocee ah ayaa runtii lagu talinayaa marka qofku uu saameeyo cudurkan? xoog, dulqaad mise wax kale?
Waxa la og yahay in cudurka Charcot-Marie-Ilkaha uu si wanaagsan uga jawaabo dhaqdhaqaaqa iyo jimicsiga, waxaa jira xoogaa khilaaf ah oo ku saabsan nooca jimicsiga ugu fiican - laakiin waxaa la isku raacay in la sameeyo maalin kasta oo la doorbido dhowr kalfadhi (tababarka xoogga iyo dheelitirka tababar gaar ah ) maalintii oo dhan.
Jimicsi fudud dhowr jeer maalintii? Haa, okay, way igu cusbayd. Haddii ay kaliya ka shaqayn lahayd xanuunka, aad bay u fiicnaan lahayd markaa, markaa waxaan jeclaan lahaa inaan maalin walba tababaro. Ma haysaa meel ay tani leedahay? waxay noqon lahayd mid xiiso leh in wax badan laga akhriyo :)
Tababarka xoogga iyo dheelitirka ee dadka qaangaarka ah ee qaba neuropathy peripheral iyo khatarta sare ee dayrta: caddaynta hadda iyo saamaynta cilmi-baarista mustaqbalka.
Natiijooyinka ka soo baxay daraasadaha dib loo eegay waxay bixiyaan caddayn la taaban karo si ay u taageeraan isticmaalka xoogga iyo tababarka dheelitirka ee dadka waaweyn ee khatarta ugu jira dhicitaanka, iyo faahfaahinta caddaynta hore si ay u taageeraan xoogga iyo isku dheelitirnaanta tababbarka shakhsiyaadka qaba neuropathy peripheral.
Linda wuxuu leeyahay,
Hi waxaan xanuun ka qabaa miskaha galbeedka iyo kubbadda sinta oo sidoo kale mararka qaarkood hoos u dhacda bowdada. Sidoo kale waxaad dareemeysaa in markaan taabto garabka lugta qalfoofka ay i xanuunto marka jwg uu ku cadaadiyo halkaas ay i xanuunto oo ay i qabato. Iyo sidoo kale dhibaato ka jirta jilibka markaan ku socdo dkogen. Xanuunka ciribta labada cagood ee gudaha ciribta soo socota iyo tagta, dareenku waa inuu ku sii adkeeyo ciribta. mvh Linda
Haddii aad naxariis badan tahay oo aad mawduucaaga hadda aado «bawdada xanuun»Ka dibna su'aasha ku buuxi halkaas, ka dib waan ku caawin karnaa. Dulucda faallooyinka halkan ayaa si fudud u noqotay mid aad u weyn (!) 🙂
Waxaan tilmaannaa in macluumaadka badan ee aad na siiso, ay noo fududdahay inaan awoodno inaan ku caawinno.
Nina Brekke wuxuu leeyahay,
Hello. La tacaalid badan oo xanuunka muruqyada / kala goysyada. Waa 39 jir, waa dhakhtar caafimaad oo jir ahaan firfircoon. Laakin aad ula halgamaya xanuunka dartiis. Waxaa la helay fys.med at Ullevål sh., Kortisone-ka la helay, waxa uu ahaa physiotherapist, osteopath isaga oo aan aad uga roonayn. Maxaan sameeyaa? Waxa uu leeyahay qaar ka mid ah osteoarthritis, iwm, meniscus u furan hal jilib, furan hallux valgus oo leh dhibaatooyin, furo hal canqowga 3 jeer iyada oo aan horumarin (ka dibna aad u yar).
Haddii aad naxariis badan tahay oo aad mawduucaaga hadda aado ka dibna ku buuxi su'aashaada halkaas, markaa waan ku caawin karnaa. Dulucda faallooyinka halkan ayaa si fudud u noqotay mid aad u weyn (!) 🙂
Eva wuxuu leeyahay,
Bishii la soo dhaafay, waxaan si tartiib tartiib ah ugu xumaaday kubbadda suulka ee labada cagood. Xanuunku wuxuu markii hore jiray oo kaliya subaxdii iyo ka dib markii uu fadhiistay cabaar. Dabadeed waxa ay qaadatay dhawr tillaabo ka hor inta aanan awoodin in aan si caadi ah u socdo. Laakin hadda waxaan dareemayaa inta badan. Xanuunku wuxuu ku jiraa kubbadaha suulasha, taas oo aan ku habboonayn fasciitis plantar (oo ku saleysan waxa aan akhriyay). Laakin maadaama xanuunku uu ugu daran yahay subaxdii, kuma habboona sidoo kale metatarsalgia. Subaxdii waxaan sidoo kale ka dareemaa dhinaca hoose ee cagta, halka inta lagu jiro maalinta ay ku fadhiyaan oo kaliya kubadaha suulasha. Waligaa ciribta ha ku xanuunin.
Waxaan ahay cagaha fidsan, oo sidaas darteed waxaan lahaa godad dhowr sano ah. Nooc kale ayaa lagu daray wax yar ka hor xagaaga sababtoo ah dhibaatooyin badan oo sinta ah. Tan iyo markii aan guriga ku joogo fasax (ilmo 4 bilood jira), cadaadiska lugaha ayaa si aad ah uga kordhay shaqada xafiiska ee fadhida. Laakiin waligey waan firfircoonaa, oo aad ayaan uga fogahay miisaan culus, sidaas darteed waxaan u maleynayaa in dhalmada ay tahay in ay u dulqaadato tan. Ma khaldami kartaa kabaha cusub ee sidan sameeya? Oo ma noqon kartaa plantar fasciitis xitaa haddii aanan xanuun ku qabin cidhibta?
Aad baan ugu mahadcelinayaa talada wanaagsan, maadaama ay si aad ah u niyad jabsan tahay inaanan awoodin in aan raaco gaadhi-gacmeedyada inta aan rabo.
Xagee ku yaalaan kubbadaha suulasha xanuunka? Wax badan oo ku saabsan gudaha ama dibadda cagta? Ma ku xanuunaysaa inaad ku istaagto suulashaada ama cidhibtaada? Iyadoo la tixgelinayo in xanuunku uu sii xumaaday ka dib cagaha cusub, waxaa laga yaabaa inay faa'iido u leedahay in la isku dayo in muddo ah kuwan la'aanteed. Cidhifyadu inta badan maaha xal fiican oo muddo dheer ah oo loogu talagalay cagaha xanuunka, maadaama cagtu ay inta badan ku tiirsan yihiin taageerada. Waxay la mid tahay sida korset dhabarka hoose ama qoorta - ma shaqeyso mustaqbalka fog sababtoo ah luminta murqaha iyo shaqada.
Waxaa loo ogol yahay in lagu sameeyo baaritaanno dhowr ah. Waxay noqon kartaa labadaba metatarsalgia iyo fasciitis plantar. Sababo la xiriira xanuun aan caadi ahayn, xanuun joogto ah, waxaan kugula talineynaa inaad hesho tixraac MRI si aad u awooddo inaad qiyaasto habka ugu fiican ee suurtogalka ah ee adiga dheeraad ah.
Negin Heier wuxuu leeyahay,
Hi, MRI waxay ogaatay tendonitis gacanta midig iyo ulnaris (cudur gaar ah oo gaar ah: tendinopathy dhexdhexaad ah oo la mid ah carpi extensor oo leh qaar ka mid ah bararka ku wareegsan isbeddelada, extensor caadiga ah, dabacsanaan dambe iyo lafaha, carjawda saddex xagal oo qumman). Sababta: cadaadiska daba dheeraatay ee curcurka iyada oo loo marayo qorista, shaqada guriga, kor u qaadista iyo waxyaabo kale oo cadaadis saari kara curcurka. Waxaan u tagay daaweeyaha jimicsiga oo yiri waxaan ku dhejin karaa curcurka cajal aan lalastik ahayn muddo nus bilood ah anigoo rajaynaya in xanuunka daran uu "gubo" Tani miyay ku filan tahay / suurtagal ma tahay gabi ahaanba? Maxaa kale oo daawaynta ah oo aan ka codsan karaa physiotherapist in uu i siiyo ka sokow samaynta iskala iyo xoog nafteyda? Ku qabooji biyaha baraf sidoo kale.
Fikradeena shakhsi ahaaneed, tuubada noocan oo kale ah waxay u horseedi doontaa luminta murqaha / la'aanta aagga, taas oo mustaqbalka fog ka dhigi karta dhibaatada xitaa ka sii dareysa - uma maleyneyno inay si gaar ah waxtar u yeelan doonto muddada gaaban midkoodna. Waxaan kugula talineynaa daawaynta cadaadiska cadaadiska (daawaynta heerka dahabka) ee loogu talagalay dhaawaca seedaha (tendinosis), daawaynta suurtagalka ah ee Graston ee qalabka, daawaynta laser-ka-hortagga, daawaynta irbada iyo/ama TENS/daawaynta hadda.
Mid ka mid ah kuwan la tijaabiyey?
Sissel IB Eriksen wuxuu leeyahay,
Hi, waxaan qabaa cuduro badan. Laakiin waxaan rabay in aan waydiiyo waxa aan samayn karo si aan u hagaajiyo qoorta / dhabarka leh stenosis laf dhabarta. Waxay dhacday 2001-2004 ka dib shilalka gaadiidka. Ma tababari karo aniga dartiis, laakiin ka fekeraya daryeelka palliative lafopractor, osteopath ama masseur? Waxaan sameeyaa yoga caafimaad Haddii kale wax badan oo fadhiid ah sababtoo ah dhaawacyada kale ee caafimaadkayga.
Waxaan kugula talineynaa jimicsi qoorta qoto dheer leh (eeg jimicsiga HER), iyo sidoo kale daawaynta uu bixiyo daaweeye caafimaad-u oggolaaday caafimaadka dadweynaha (sida physiotherapist, lafopractor ama therapist manual). Qaar badan oo lafopractors ah ayaa isticmaala waxa loogu yeero daaweynta kursiga keydka, taas oo loo arko qaab wax ku ool ah oo daaweyn ah oo loogu talagalay stenosis laf-dhabarka ee dhabarka hoose. Way fiicantahay haddii kale inaad sameyso yoga-caafimaad, tani waa wax aan runtii kugula talineyno is-cabbir dheeri ah. Whiplash iyo osteoarthritis waxay sidoo kale faa'iido u yeelan karaan wax ka qabashada laf dhabarta ama abaabulida lafopractor ama daaweeyaha gacanta.
Waa muhiim inaad u tagto 'chiropractor casri ah' - yacni mid diiradda saaraya daaweynta murqaha iyo kala-goysyada labadaba.
Haddii kale miyaad la halgamaysaa madax-xanuun iyo madax-wareer sidoo kale?
Randi Odland wuxuu leeyahay,
Waxa uu istaroog kaga dhacay dhinaca midig ee cerebellum 5 sano ka hor.
La halgamaya xanuun badan madaxa / qoorta / garabka iyo ka baxsan cududda.
Wejiga kala bar waa kabuubyo. Taabo isha
Wax kasta oo dhanka midig ah
Kee baad ku talinaysaa?
Waxaan kugula talineynaa daawaynta aad dareemeyso in ay ku siineyso calaamad muujinaysa (tusaale duugista, daaweynta jimicsiga ama xanuunka loo yaqaan 'chiropractic) oo ay weheliso jimicsi gaar ah. Xaggee madaxa ka dareemeysaa in madax-xanuunku uu ugu daran yahay? Mise way dhaqaaqdaa?
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada! Xanuunku waxa uu salka ku hayaa kubbadda suulasha hoosteeda, way adag tahay in la sheego haddii ay u badan tahay gudaha ama dibadda cagta. Ma dhibayso inaad ku istaagto suulashaada ama cidhibtaada. Sidoo kale ma dhibayso markaan isku dayo inaan cadaadiyo cagta hoosteeda si aan isugu dayo inaan helo meel xanuunaysa. Subaxdii waxaan si fiican u arkaa markaan u soo jiido suulasha lambarka 3 (suul weyn = no. 1) xagga kubka. Dabadeed waxa ay dareemeysaa qallafsanaan waxayna aad uga fidsan tahay dhanka hoose ee cagta.
Aad ayey u fududaatay oo ma isticmaalin kabaha cagaha muddo toddobaad ah, iyo in aan sameeyay dhammaan layliyada aan ka helay internetka. Waxaan u maleynayaa inay xoogaa ka roonaatay, maadaama aysan si buuxda u qallafsanayn oo aan suurtagal ahayn in la socdo ka dib muddo gaaban oo fadhi ah. Laakin wali ma ahan horumarkii aan rajaynayay, maadaama ay wali aad ii diidayso inaan tamashlaha aado.
Waxaad qortaa in aan MRI cagahayga ku sameeyo. Suurtagal ma tahay in lagu ogaado waxa ku jira ultrasound? Way sahlan tahay in lagu sameeyo dhakhtarka jimicsiga jirka.
Hi mar kale, Eva,
Waxaan kugula talineynaa MRI in kiiskaaga - ay doorbideyso baaris caafimaad oo uu sameeyo lafopractor ama daaweeyaha gacanta ka hor; Kaas oo markaas kuu gudbin kara baaritaanka sawirka. Ma ku yeelatay xanuun shoog ama wax la mid ah? Markaad sheegtid suulasha 3aad, waxaan isla markiiba ka fekereynaa Morton's neuroma. Layli noocee ah ayaad u malaynaysaa inay si fiican kuugu shaqaynayaan? Waxay na siin kartaa macluumaad yar oo dheeraad ah oo ku saabsan waxa cagahaaga ka qaldan.
In yar oo aan hubin waxa aad ula jeedo xanuunka shoogga, laakiin waa dareen gubasho badan oo suulasha hoostooda ah. Oo waxay ku hoos dhegtaa calaaca cagtayda oo dhan markaan qaado tallaabooyinka ugu horreeya ee subaxda.
Cagahaan fidiyey, suulahayga ayaan ku tallaabsaday, suulashayda ayaan tuwaal ku qaatay oo cagahayga ku qoray alifbeetada.
Waxaan naftayda u maleynayay inay u badan tahay inaysan ahayn Neuroma Morton, maadaama aan u maleynayay inay ahayd wax aan caadi ahayn in labada cagood isku mar la wada qaado?
Waad saxan tahay - aan caadi ahayn (laakiin ma aha wax aan macquul ahayn) in la helo Morton neuroma laba geesood ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku talin lahayn in tan lagu baaro MRI sawir. Hadda ma laguu soo gudbiyay?
Jan Helge wuxuu leeyahay,
Hello. Anigoo la yaabban inaad ii jawaabto iyo inaad i caawin karto. Wuxuu ku xanuunsadaa jilbaha gadaashiisa, iyo cidhibta iyo hoos/iyo dhinaca. Si dhib leh uma socon karo. Shalay ayaa isku dayay in uu aado balse aad ayuu u dhaawacmay. Waxba ma yeelin naftayda iyo wixii la mid ah. Waxay si lama filaan ah u dhacday. Waxaan socod ku soo baxay maalmo ka hor anigoo wata kabo cusub oo aan soo iibsaday, kabo socod lug ah, waxaana ka dareemay xanuun dhanka bidix ah. Ma ogi haddii ay noqon karto kabaha ama waxa ay noqon karto. Ma jiraa qof aan naftayda samayn karo? Kala bixin iwm? Way i xanuunaysaa markaan aniguna fadhiyo. Dhaawaca markaan ku cadaadiyo aagga ciribta. Isku day cadarka voltaren shalay iyo maanta si wadajir ah cadar qabow, laakiin xanuunka weli waa jiraa. ma fahmin waxa dhacay.
Waxay u egtahay dhaawaca ciribta Achilles. Waxaan kugula talineynaa inaad ka hesho baarista ultrasound ogaanshaha daaweeyaha oo leh oggolaansho caafimaad dadweyne (chiropractor, physiotherapist, therapist manual). Dhaawaca achilles wuxuu tixraaci karaa xanuunka dhabarka jilibka ilaa iyo hoos udhaca ciribta - waxaa sidoo kale laga yaabaa in uu jiro falcelin barar ah sababtoo ah culeyska safarka / kabaha cusub. Waad dejin kartaa, nasin kartaa aagga (lugtaada sare u kac) oo isticmaal cajalad kinesio si aad u taageerto tendonka Achilles - haddii ay jiraan dhaawacyo qaarkood, shaqada murqaha, daaweynta cadaadiska cadaadiska ama daweynta cirbadaha ee rugaha caafimaadka ayaa laga yaabaa inay habboon tahay.
Ma u daran tahay markaad kacdo oo aad cagta saarto? Ma ka jiraan casaan / barar xagga dambe ee cidhibta?
Camilla wuxuu leeyahay,
Hello. Waa la ii caddeeyey jabka jilibka qiyaastii 2 sano ka hor.
Waxaan markaa u tagay 4 dhakhtar oo kala duwan oo aan waxba ka helin MRI, laakiin waxay faaruqiyeen jilibka dareeraha. Ciyaartii ugu dambeysay ee aan joogay sidoo kale waxay faarujisay jilibka dareeraha, taasi waxay ahayd heshiis wanaagsan. Waxay ku dureen cortisone sidoo kale. Taasi waa markii ay ogaadeen inuu yahay caabuq. Tan iyo markaas ma ay joogin halkaas. Laakiin wali waxaan la halgamayaa inaan dhaawaco. Waxaan fuulaa dhowr maalmood todobaadkii. Markaan dhaawacmo waxaan dareemaa inay taallo dhinaca jilibka ama patella hoostiisa. Way i xanuunaysaa markaan fuulo jaranjarada, hoos u dhaca ama haddii aan weli fadhiyo in muddo ah. Sidoo kale mararka qaarkood way bararaan, laakiin ma badna.
Kaliya la yaabanahay haddii ay jiraan wax aan dib u eego, mise haddii aysan waxba jirin? Iyagu ma ay ogaan sababta uu caabuqu u dhacay iyo halka uu caabuqu ka yimid.
Trude Bjerved wuxuu leeyahay,
La halgamay fibromyalgi sannado badan, waxay leeyihiin xanuun jidhka oo dhan ah, badanaa way lallabbo iyo lallabbo madax xanuun. Oo ha iska tamar waa daal iyo daal mar walba. Awood u lahayn in uu dufan karo xabbad rooti ah hal mar, saaxiibkii waa inuu sameeyaa wax walba. Waa in aan isticmaalo kursiga curyaanka marka aan ka maqanahay xanuunka, laakiin sidoo kale dawakhaad. Maadaama aan sidoo kale aragga naafo ka yahay oo aan qabo neefta, waxaan xaq u leeyahay daawaynta jidhka, ka dib markii aan sugay muddo dheer, waxaan boos ka helay daaweynta jimicsiga halkan Romsås gu'gan, laakiin waxay noqotay inaan joojiyo 1 bil ka dib markii uu u baxay liiska . Hadda waxa uu ku jiraa liiska sugitaanka ee Ammerud, laakiin liiska sugitaanka ayaa dheer. Hadda waxaan dhameeyay daawaynta lafopractor, maadaama aan haysto faa'iidooyinka iinta oo aanan awoodin. Aaditaanka cisbitaalka lafaha ee Lillehammer, laakiin maaha ilaa March 2017. Markaa runtii waxaan u baahanahay caawimaad.
Taasi sax uma eka. Miyayna jirin faragelin bilaash ah ama rugaha xanuunka agtaada? Kuwani badanaa waxay leeyihiin dhowr 'qolal degdeg ah' - wax u eg inaad u baahan tahay. Markaas, GP-gaagu waxay ahayd inuu halkaas kuu gudbiyo. Haddii kale ma ogtahay haddii aad leedahay daal dabadheeraad ah / ME ogaanshaha? Sidoo kale ha fahmin in daaweeyaha 'fiisiyoterabiga' lagaa saaray - waxay u muuqataa mas'uuliyad darro iyo difaac la'aan xaaladda aad ku sugan tahay. Iyadoo la tixgelinayo inaad mar hore u tagtay daawaynta halkaas, dhib maaha inaad si dhakhso ah ugu soo noqoto. daaweeyaha jimicsiga. Ma laga yaabaa inaad la xiriirto dhakhtarka jimicsiga berrito?
Trude Bjerved. wuxuu leeyahay,
Ilama daawayn, laakiin waan ka sii daray ka dib tallaalka ifilada doofaarka. Ugu yaraan saaxiibaday way dareentay, kaliya waxaan ogaaday in aan ka sii daray. Dhanka dhakhtarka jimicsiga, ma jirto wax aan samayn karo, waxaan waydiiyay haddii aan dib u soo laaban karo, ka dibna waxaan helay jawaabta in ay qaadato 6 bilood ka hor inta aan la helin boos kale. Waxaan u maleynayaa inay khiyaanayso jirka oo aadeyso Fysio 1 bil ka dibna joojiso. Waxa kale oo la ii sheegay in aad Fysio u tagto muddo oo aanad wax aad u dheerayn.
Markaa waxaanu u malaynaynaa in lagugu baaro ME iyo daal daba-dheeraada (CFS). Gaar ahaan haddii ay tani tahay wax ka sii dartay tallaalka ifilada doofaarka ka dib - sida la wada ogsoon yahay, dhowr boqol oo bukaan ME ayaa dalbaday magdhow ka dib tallaalka ifilada doofaarka. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto kooxda Facebook "ME sida dhaawac soo daahay ka dib tallaalka ifilada doofaarka" oo u sheeg calaamadahaaga iyo calaamadahaaga. Waxay u badan tahay inay ku siin karaan macluumaad wanaagsan oo khuseeya.
Waxaad u tagi kartaa takhtarka guud ee jimicsiga inta aad u baahan tahay (1 bil waa wakhti aad u gaaban oo aad u yar tahay wakhti aad wax ku qabato wakhtigaas) - waa dhakhtarka jimicsiga laftiisa kaas oo go'aansaday ' safka kaa saara' Dhab ahaantii waxay u egtahay inaad weli u baahan tahay daaweynta jimicsiga jirka si aad u shaqeyso - markaa haa, waxaa jira qaar badan oo u taga daraasiin fiisiyoterabi ah (qaar ilaa 60 jeer ah) sannadkii. Hadii loo baahdo.
Lilly S wuxuu leeyahay,
Laga soo bilaabo da'da 18 ayaa si dhab ah u dhibay nasasho la’aan lafta xanuunka. Hadda waan ka fariistay oo weli waxan sameynayaa. Waxaa la igu sheegay xanuun daran oo xanuunkaan ah, waxaana heysta daawada SIFROL oo ah kaniiniyada keydka ah oo mararka qaar wax yar ka caawiya dhibaatada, laakiin inta badan waxaan ku jiraa xilliga caadada waxba waxba ma tarto ka dibna u kaca oo seexdo habeenba habeen. . Hadda habeen baan soo jeeday muddo bil ah oo in yar baan seexday hadda iyo ka dib, laakiin aad bay u yar tahay. Dareen daal badan.
Waa inaan sidoo kale sheegaa in aan xanuun badan iga hayo lugaha iyo dhabarka ka dib dhammaan jiidashadan habeen iyo maalinba. Arkay kan cusub (xusuusinta tafatiraha: Daawaynta cusub ee xanuunka lugaha nasasho la'aanta ah) yaa cagta lagu xidhi lahaa oo la yaabay inay wax ii tari karto? Ma haysaa wax jawaab celin wanaagsan tan?
Ma jiraan kaalmooyin kale ama nooc kasta oo caawimo ah tan? Aniga oo si buuxda iigu halgamaya.
Waad ku mahadsan tahay jawaabaha.
Haa, waa la i soo gudbiyay, laakiin ma garanayo goorta uu fasalka weli jiri doono. Waxaan si tartiib tartiib ah u hubsaday in kabo cusub ay yihiin sababta dhibaatada. Waa flatfoot, oo waxa uu lahaa insoles ilaa dugsiga sare ee hoose.
Waxaan kuwan ka helay Oslo Orthopedic Technology anigoo ku tallaabsaday sanduuqa xumbo. Dhawr bilood ka hor waxa aan lahaa cibado cusub oo uu sameeyay daaweeyaha jirku. Waxa loo yaqaan "Supersole". Kuwani waxay si aad ah kor ugu qaadeen qaansadayda, waxayna si ka sii badan u toosiyeen jilbahayga (in aan xoogaa isu soo dhaco). Kabaha cusub ayaa sidoo kale aad uga adag kuwii hore, waxaana u maleynayaa inay taasi tahay sababta xanuunka suulasha. Waxaan ku soo noqday kaliya isticmaalka kabaha hore ee laba toddobaad hadda, cagahayguna waxay dareemayaan wax yar oo roon.
Isla markaana, aad ayaan u nastay, waxaanan sameeyay dhammaan laylisyadii aan kala kulmay khadka, markaa way adag tahay in si dhab ah loo sheego waxa keenay horumarka. Waxa kaliya ee waxoogaa dhanaan ah ayaa ah in aan dareemay cidhifka cusubi waxa ay iga dhigeen dhibatada misigta in yar, marka waxa ay dareemaysaa in ay tahay in aan kala doorto 2 shar ah aniga oo dooranaya kabo cusub ama duug ah... uma eka inay taageerto ku filan, halka kuwa cusubi ay magdhow badan bixiyaan oo laga sameeyay waxyaabo aad u adag.
Waxay u badan tahay inaad isku dayday laylisyadaan sidoo kale? Xoogaa laba daran mid dooro ayaad halkaas ku haysaa. Waxaan kugula talineynaa xal dhexdhexaad ah - kaas oo ah inaad ku kala duwanaato labada cagood; Tani waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa in cagahaagu ay noqdaan kuwo la qabsanaya / la qabsanaya cagaha cusub sidoo kale. Kaas oo dabiici ahaan ku habboon miskaha / jilbaha sidoo kale.
Haa, waan sameeyay dhammaan layliyadaas. Dareenka caabuqa cagaha hoostiisa ayaa soo fiicnaaday, maadaama aysan ahayn mid adag oo xanuun badan in la qaado tillaabooyinka ugu horreeya subaxdii. Laakin kubbadaha suulasha si degdeg ah ayay u xanuunayaan ka dib markii ay wax yar socdeen / istaageen. Kaliya waxaan isticmaalay tii hore, kabo jilicsan toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaanan ogaaday in sida ugu dhakhsaha badan ee aan cagahayga u galo kabaha cusub, ay cadaadis dheeraad ah saaraan kubbadaha halkaas oo aan ku xanuunayo. Markaa ma garanayo waxa la sameeyo. Miyuu aad uga baqayaa cagaha inay noqdaan dhibaato dabadheeraad ah, si la mid ah sinta miskaha ayaa ahaa sanado badan….
Sylvi Løwe wuxuu leeyahay,
RA ma qaadata dawada bayoolojiga, laakiin waxa ku dhacay tendonitis cududda sare maxaa layliyo ah oo aan samayn karaa si aan u fiicnaado? La siiyay daawaynta loo yaqaan 'presolone' oo la rajaynayo inay ku caawiso, laakiin soo kabashadu waa xanuun 14 maalmood ka dib daaweyntaas. Dhakhtarku waxa uu arkay in kaniiniyada iyo jimicsiyadu ay fiicnaan doonaan?
Dhab ahaantii ma hubtaa in uu yahay caabuq seedaha oo aanu ahayn dhaawaca seedaha ama argagaxa seedaha? Ma lagugu xaqiijiyay ultrasound, mise? Waxaan u maleyneynaa inay tahay wax lala yaabo, haddii ay dhab ahaantii tahay tendonitis, in daawaynta xoogga leh aysan caawinin. Tani waxay muujin kartaa in ay tahay dhaawaca seedaha.
Halkan waad awoodaa wax ka akhri faraqa u dhexeeya xaaladaha seedaha kala duwan.
Layliga lagu taliyey waxay ku xidhan yihiin seedda ay saamayso - iyo haddii ay tahay seed bararsan ama dhaawacan. Sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad sameyso baaritaanka ultrasound-ka ogaanshaha si loo xaqiijiyo waxa uu yahay habka dhaawaca.
Reka wuxuu leeyahay,
Waxaa igu dhacay erythema modosum labada cagood ilaa 2 sano hadda. Adeegga caafimaadku ma uusan helin sababta cudurrada, laakiin waxay ku xisaabtamayaan inay tahay sabab difaac-is-difaac ah. "Run ahaantii" ma la socdaa rheumatologist, laakiin liisaska sugitaanka ayaa aad u dheer waxaana la ii sheegay Maarso in aan ku laaban doono dabagalka daaweynta metex bisha Juun. Wali ma helin ballan cusub oo dabagalkan ah.
Hadda samirkayga gabi ahaanba waa la xoqay, waxaan rabaa in aan xanuunka ka xoroobo oo aan dib u bilaabo shaqada. Ma jiraa qof Norway jooga ama dibadda jooga oo arrintan khubaro kaga badan kuwa kale? Dareen xor u ah inaad u tagto jilayaasha gaarka ah haddii uu jiro qof i caawin kara! Miyaanay ahayn in lagu dadaalo sidii loo heli lahaa sababta tiibishada, dabadeedna loo helo daawaynta saxda ah ee ugu waxtarka badan?
Waa in laguu soo diray warqad ay ku qoran tahay taarikhda ugu danbeysa ee la tashiga dammaanad qaadka ah. Ma heshay tan? Waxay u muuqataa mid aad u la yaab leh inaad sugaysay tan iyo bishii Maarso, markii dhowr qalab oo naga mid ah ay heleen bukaanno u yimid baaritaanka rheumatologist 3 bilood. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto waaxda rheumatology oo aad dalbato xoogaa jawaabo ah markaad u gasho baaritaanka.
Ma aanan helin email kale oo aan ahayn ka aan ka helay jawaabta boggan. Qalabkee ayaa leh? Xiriir la yeeshay iyaga (mar kale) usbuucii hore, laakiin ma helin taariikh cusub. Waxay garan waayeen goorta ay ahayd markii aan wali joogay… Waxaan ka cudur daartay inay jiraan dhakhaatiir cusub shaqo joojinta ayaa sababtay inay dib u dhacaan. Sax ma tahay in takhtarka laf-dhabarka oo aanu ahayn dhakhtarka maqaarka uu yahay qofka ku habboon in uu arrintan la socdo?
Hagaag, markaa nasiib darro waxaad u badan tahay inaad sugto ilaa aad ka helayso yeedhmo, laakiin waxaa laguu oggol yahay inaad wacdo oo aad maqasho goorta aad heli doonto wakhti/la tashi.
Waxaan kuu rajeyneynaa nasiib wacan iyo soo kabasho wanaagsan.
Way wici kartaa mar labaad, laakiin nasiib darro jawaab kama filanayso.
Ma taqaanaa takhaatiir gaar ah oo tan ku samayn kara cudurka qaaxada ee Norway ama dibadda? 2 sano oo xanuun daran ayaa iga dhigay quus!
Waad ku mahadsan tahay jawaabtaada!
Waa inay ka jawaabaan su'aashaada. Waydii inay dib kuugu soo wacaan haddii aad ku dhibtoonayso inaad ka gudubto - waa inay sidoo kale aqoon fiican u leeyihiin jilayaasha gaarka ah ee goobtan.
Nasiib wacan iyo soo kabasho wacan.
Inger Rogneflåten wuxuu leeyahay,
Waxa uu leeyahay cudud xanuun. Meeshu waxay ka soo horjeedaa garabka dhanka midig.. Waxaan dib u hagaajinayay guri dabaq ah, rinjiyeeyay oo bedelay gacan-qabsi badan. Waxaan u malaynayaa inaan cududdayda si xad dhaaf ah uga shaqeeyay. Ma jiraan wax jimicsi ah oo kaa caawin kara arrintan mise waa uun nasasho?
Waa inaan awoodnaa inaan kaa caawino arrintan, laakiin waxaan u baahanahay macluumaad yar oo faahfaahsan oo ku saabsan halka xanuunku ku yaal iyo xanuunadii hore ee aagga.
Haddii aad tahay qof naxariis leh oo aad wax yar ku qorto faallooyinka goobta faallooyinka ee hoose, waanu u mahadcelin lahayn (dhab ahaantii dadku waa inay sameeyaan, laakiin dadka intooda badan waxay su'aalahooda ku weydiiyaan halkan si qalad ah):
Riix halkan:- Xanuun gacmaha
Kadib hoos u dhaadhac oo buuxi goobta faallooyinka Waxaan rajeyneynaa inaan ku caawinno.
Concert Agata wuxuu leeyahay,
Hi! Waxaan qabaa xanuunka qoorta oo ay ugu wacan tahay 3 disc deeration oo cadaadis ku haya xididdada dareemayaasha iyo xanuunka dhabarka hoose ee 2 disc. Ma jiraan wax ku caawin kara? Ma laga yaabaa inay sabab u tahay jirro?
Macluumaadka aad u yar, ma hayno fursad aan ku caawinno. Fadlan si faahfaahsan u qor dhibaatadaada (dhammaan macluumaadka waa faa'iido, in ka badan ayaa ka wanaagsan) - ka dibna ku qor goobta faallooyinka ee hoos yimaada mawduuca ku habboon:
Qoor xanuun (guji halkan ka dibna isticmaal goobta faallooyinka ee boggaas)
Say wuxuu leeyahay,
Hi! Lugta bidix ayaa xanuun iga haya kadib markii aan dhacay. Lugta midig ayaan ku siibtay oo lugta ku dhacay. (Waxaan u maleynayaa) Ma kici karin sababtoo ah wax badan ayay lugta ka dhaawacday. Markaan isku dayo inaan ku istaago suulasha way i xanuunaysaa waxayna dareema "jelly". Waxaan la yaabanahay waxa dhacay iyo sida loo hagaajin karo. Mahadsanid.
Iyadoo la tixgelinayo in uu jiro dhicis (trauma) iyo xanuunka xiga, suurtogalnimada waxay kordhisaa in ay tahay dhaawac jilicsan ama dhaawac muruqa ah. Ilaa intee ayuu xanuunku sii jirayaa? Goorma ayay tani dhacday? Hadda ma ku istaagi kartaa suulashaada? Waxay kaloo ku lug yeelan kartaa (in kasta oo ay yar tahay) sidoo kale waxay ku lug yeelan kartaa jeexid qayb ka mid ah muruqa lugta.
Mabda'a bariiska ayaa lagula talinayaa xilliga ba'an ee jirrooyinkan oo kale:
R - Naso
I - Baraf
C - cadaadis
E- Sare u qaadida
Si kale ma u aragtay inay barartay ama nabartay aagga?
Waxay dhacday saaka XNUMXdii saac ee maanta. Weli xanuun baa i haya, oo weli waxaan la halgamayaa sidii aan cagahayga ugu istaagi lahaa. Ma jiraan wax barar ah iyo wax nabar ah oo ka dhacay goobta.
Hagaag, waxaan kugula talineynaa inaad eegto subaxda oo aad isticmaasho mabda'a RICE. Haddii aysan jirin wax horumar ah, waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto takhtar si loo ogaado dhibaatada. caafimaad qab
Julie wuxuu leeyahay,
Haye, muddo toddobaad ah ayaa aan la halgamayay kabuubyo kabuubyo ah oo farta dhexe ah, ma aanan samayn wax gaar ah oo aan ka cadhaysiiyo midka kale si aan u todo. Maanta waxa ii soo baxday in ay xanuun badan tahay in aan farta taabto. Waxaad mooddaa inuu jiro neerfo meesha fadhiya oo dhibsanaya. Waxaan si weyn uga mahadceliyey jawaab celin ku saabsan waxaad u maleyneyso inaan ku sameyn karo ama waxa ay noqon karto.
Waxaa jira dhowr sababood oo suurtagal ah oo xanuunka farta dhexe, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu caansan (gaar ahaan marka la tixgeliyo inaad samaysay wax badan oo tolid ah) waa culeys xad-dhaaf ah oo ku yimaada murqaha faraha iyo murqaha curcurka, ka dibna si gaar ah muruqyada kuwaas oo sidoo kale ah. ku dheji dibadda suxulka. Ma dareentaa in aad cidhiidhi tahay oo uu cadaadis kugu hayo cududda hore, gaar ahaan dhinaca suxulka dibadda? Sababaha kale ee suurtogalka ah waa xanaaqa neerfaha ee qoorta ee xididdada dareemayaasha ee loo yaqaan C7 ama xanaaqa tunnel-ka carpal.
Banaz wuxuu leeyahay,
Hi, xanuun baa iga haya garbahayga iyo cududdayda. Qoorta iyo dhabarka ayaa iga soo dhacay.
Waa inaan si fiican ku waydiisano inaad wax ka qorto dhibaatadaada intii suurtogal ah - haddii kale way nagu adkaan doontaa inaan ku caawino.
Waxaad wax badan ka akhriyi kartaa soo-dhaca qoorta iyada.
Lena Irene Gjerstad wuxuu leeyahay,
Sebtembar 2016, waxaan ka soo dhacay joog dhan 2 mitir. Waxaa ka dillaacay feeraha iyo jabka lafaha koolejka. Tani hadda way wanaagsan tahay. Laakin hadda garabka qabow/garabka barafoobay, tani aad bay u xanuunaysaa. Maxaa ka caawin kara arrintan?
Garabka barafaysan / kapsulitis-ka-dhessiga / 'garabka qabow' ayaa badanaa dhaca ka dib dhaawacmo. Xaaladdu waxay sii jiri kartaa ilaa 1-2 sano haddii aanad helin daaweyn / tababar ku habboon. Waxaan kugula talineynaa inaad eegto layliyada soo socda iyada. Daaweynta hirarka cadaadiska ayaa sidoo kale la xaqiijiyay waxtarka bukaan-socodka ee ku dhawaad ​​​​daawaynta 4-5 (Vahdatpour et al, 2014 - oo lagu daabacay Joornaalka Caalamiga ah ee Daawada Ka Hortagga).
Sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto takhtar si guud idman (physiotherapist, chiropractor ama therapist manual) oo wata qalabka daawaynta mawjada cadaadiska. Halkan waxa aad ka heli doontaa fulin dhamaystiran oo ku saabsan ogaanshaha, tababarka iyo daawaynta kaas oo la qabsan doona meesha aad joogto marxaladda dhibaatooyinka garabka barafoobay.
June Beckstrøm wuxuu leeyahay,
Xagee ka heli karaa dharka isku-buuqa ee "Restiffic" kaas oo lagu tijaabiyay natiijooyin wanaagsan RLS?
Waxaan kula xiriirnay iyaga oo jooga USA - waxaana lagu wargeliyay in hadda kaliya lagu iibiyo Ameerika. Waxay qorsheynayaan inay ku fidiyaan Yurub iyo Scandinavianka bartamaha 2017.
Morten okkenhaug wuxuu leeyahay,
Hi, waxaan lahaa in ka badan hal sano xanuun muruqa dhabarka ee labada bowdyaha, xanuunka ugu badan marka aan fariisto oo aan baabuur wado. Mararka qaarkood waxa aad dareemeysaa in muruqa dhabarka oo ka sarreeya jilibka uu sii adkeynayo oo uu aad u xanuunayo. Wax badan u aaday lafopractor-ka kaasoo u maleeyay inay ku dhagan tahay / maquunin neerfayaasha lugaha taga, laakiin aan ka roonayn daaweyn badan ka dib.
Ku caajiso inaad maqasho inaad xanuun hayso muddo 1 sano ah.
1) Sawiro ma laga qaaday dhabarkaaga hoose si loo eego haddii ay jiraan xaalado dareeme oo cidhiidhi ah? Tusaale ahaan. Baaritaanka MRI?
2) Way fiicantahay in aad u tagtay lafopractor si loo baadho loona daweeyo, laakiin waxaan u malaynaynaa in lagu siiyay jimicsi / kala bixin si aad u sameyso marka lagu daro daaweynta? Intee in le'eg ayaad odhan lahayd waxaad ku jirtaa daawaynta guriga?
3) Miyay ka xun tahay bogga mid ka mid ah ma kula tahay? Miyay fiicnaan doontaa mise way ka sii dari doontaa haddii aad hore u foorarsato?
Rikke wuxuu leeyahay,
Waxaan shalay u soo baxay si aan u soo dukaameysto oo aan u diyaarsado waxyaabaha qaar, waxaan sidoo kale la fadhiistay meel kafateeri ah aniga iyo asxaabtiisa qaar sidoo kale markii aan kacay oo aan xoogaa soo maray waddadii guriga oo aan bilaabay in aan kor u socdo. gumaarka / miskaha labada dhinac markii aan socday. waa caadi inaan si caadi ah hoos iyo hoos ugu socdo, laakiin waxaan dareemaa sida ugu wanagsan markaan kor u socdo, sidoo kale way i xanuuntaa markaan cagta kor u qaado oo aan ku rogo miskaha. Wax yar ayey i dhibi kartaa/Iigu roonaan kartaa markaan cabbaar fadhiyo isla booskii, wax khatar ah 🙁 maxay tani u noqon kartaa shay? ma anigaa iska daayee mise waa wax kale oo sabab u ah?
Saaxiibkii ayaa ka jawaabay su'aashaada boggayaga Facebook-ga farriinta sanduuqa.
Anne Vinnes wuxuu leeyahay,
Hi, boggagani waa kuwo xog badan. Laakin waxaa maqan xog ku saabsan aragtida Ehler Danlo iyo dhaqdhaqaaqiisa?
Aad baad u mahadsantahay, Anne. Waxaan si joogto ah u shaqeyneynaa si aan u wanaajino, adiguna waad saxsan tahay - halkan waxaan haynaa shaqo aan qabanno!
Aad baad ugu mahadsantahay fikradaada Maalin wanaagsan weli!
Xusuusnow inaad nagu soo raacdo Facebook, sida aan rabno xiriir dheeraad ah / jawaab celin wax dhisaysa. 🙂
Waxa la igu duray cortisone-ka hoose ee laf dhabarta, isla markaaba xagga sare ee lafta dabadayda. Taageerada Ultrasound. Takhtarka lafaha / daaweeyaha jirku wuxuu qaadan doonaa mid kale, mar dambe ma qaadan doono. Dareemaha xanuunka, waxba ku saabsan maqaalkaaga….
Kristina Wang wuxuu leeyahay,
Salaan aad iyo aad baad ugu mahadsantahay macluumaad badan iyo tabo tababar oo ku saabsan boggooda FB.
Waxa aan hayay ilaa hal sano xanuunka jilibka bidix iyo dhanka galbeed ee sinta. Waxay dareemeysaa sida ilig xanuun dhab ah iyo xanuunka sinta waa mid joogto ah, halka jilibka uu yimaado oo tago. Sinta, xanuunku inta badan waa marka sariirta la seexdo, iyada oo aan loo eegin dhinaca aan ku jiifsado, halka jilibku yahay marka aan fadhiyo. Waxa ay dareema "Ilka xanuun" dhab ah oo xanuunku hoos ugu soo yaaco dhanka lugta hoose. Waxaan cunay Voltaren tbl 6 bilood, laakiin uma maleynayo inay si fiican u shaqeyso.
Waxaan dhakhtarka ka codsaday MRI-ga, laakiin tan ma helin. Ma haysaa wax talo/tilmaan wanaagsan?
Waad ku mahadsan tahay Kristina
Marka la eego in jirrooyinka ay yihiin kuwo aad u dheer oo waara, baaritaanka noocan oo kale ah wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto lafopractor kaasoo labadaba sameyn kara baaritaan, laakiin sidoo kale xaq u leh inuu tixraaco tusaale ahaan. MUDANE.
Nasiib wacan, Kristina!
Hi! Waxa aan si fiican ugu socday kabo-la'aan oo tiles ah muddo toddobaad ka badan, hadda 4 toddobaad ka dib, waxa aan xanuun badan ka hayaa cagteyda hore ee cagtayda bidix. Asal ahaan waan yara jajabannahay, waxaanan dhowr jeer ka dillaacay lafo yaryar cagahayga. Xanuunku waa mid aad u daran oo kaliya inaan cagahayga ku socon karo haddii aan xidho sharabaadyo iyo dacas, la'aanteed ma cadaadis saari karo cagtayda .. maxay kula tahay tani? Muruq ama qalfoofka? Salaam
Mtp calaamadaha aad sifeyso si ay tani u noqoto mid ku saabsan jabka walaaca ee cagta. Waxaan kugula talineynaa inaad la xiriirto dhakhtarkaaga ama lafopractor oo aad hesho tixraac raajada.
Waad ku mahadsantahay jawaabtaada. Markaa waan samayn doonaa.
Eirik Kaspersen wuxuu leeyahay,
Hello. Ma la yaaban tahay haddii aad hayso wax tabo ah oo ku saabsan waxa aad samayn karto si aad nolol maalmeedka uga dhigto mid fudud? Waxaan helay calaamadihii ugu horreeyay ee sciatica bishii Juun 2014, ka dib waxaan helay prolapse, kaas oo la qalay Juun 2016, ka dibna soo-dhac cusub, kaas oo la qalay Oktoobar 2016.
Waligeedba waxa uu ku lahaa xanuun lugta bidix oo dhan. Maadaama aysan si fiican u socon, waxaan qaatay mr cusub Janaayo 2017 ka dibna waxaa dhacay dib u dhac kale oo weyn. Oo waxay la mid tahay xanuunka noloshayda maalintii, weligay nabad ima siiso. Waxaan tijaabiyey xanuun baabi'iyeyaal badan oo kala duwan, laakiin ma jiraan wax caawiyay. Isku day inaad ku socoto tirar (ma socon karto la'aanteed) ku dhawaad ​​maalin kasta kaynta. Wax yarna ku tababbari dharbaaxada iyo haddii kale qaar ka mid ah jimicsiyada uu fiisiyoterabigu i siiyay. Waxa kale oo dhibaato weyn igu haysa in aan dhabarka toosin kari waayo. Aad ayuu ugu qallafsan yahay muruqyada gluteal. Wuu fiicnaa qalliinkii ugu dambeeyay ka dib, laakiin wuu ka sii daray oo ka sii daray. Sidoo kale waxaa jira xanuun badan oo lugta hoostiisa ah, dhakhtarku wuxuu u maleynayay inuu yahay fasciitis plantar, haddii aysan jirin xiriir la leh dareemaha sciatic? Tani waxay ahayd wax badan, laakiin hadda waa sida ay tahay .. Aad bay u fiican tahay in la akhriyo boggooda. Xog waxtar leh.
Marka hore, waxaan ku talin lahayn caado, jimicsi dabacsan (waxay ku habboon yihiin rheumatologists, si ay ugu habboon yihiin qof kasta) adiga. Haddii kale, sababtoo ah xanuunkaaga joogtada ah iyo dhibaatooyinka, waxaanu kugula talin doonaa fekerka, yoga iyo miyir-qabka. Dad badan oo qaba xanuunka daba-dheeraada waxay caawimaad wanaagsan ka heli karaan hababkan is-daaweynta.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad ka hesho xoogaa neefsasho cusub ah takhtarka fiisiyoterabi, lafopractor ama daaweeyaha gacanta - waxay kugu arki karaan aragti caafimaad waxaana laga yaabaa inay la yimaadaan tilmaamo iyo talo aad u wanaagsan oo adiga kugu habboon.
Waxaan kuu rajeynayaa nasiib wacan iyo soo kabasho wanaagsan, Eirik.
Ellinor Jamne Keskitalo wuxuu leeyahay,
Hi .. Waxaan qabaa labadaba polyarthrosis iyo gulliain barre. Waxaa igu dhacay xanuun dabadheeraad ah tan iyo markii aan helay gulliain barre markii aan ahaa 20 jir. Waxaa maqan murqaha dhammaan suulasha iyo anqawyada. Ma istaagi karo ciribta. Isku dheelitirnaan liidata. Suuluhu waxay galaan kabaha. Dhibaatooyinka ma xalliyo dhakhtarka lafaha. Ma roonaan. Markaa hadda gobolku wuxuu iga qaaday caawinta dadka dakhligoodu yar yahay, tusaale ahaan daaweynta jimicsiga oo aan ku helay lacag la’aan oo lama huraan ii ah. Ma haysaa talo kale oo ku saabsan waxa aan awoodo oo aan sameeyo? Mahadsanid Ellinor
Janne Pia Thirstrup wuxuu leeyahay,
Hi, CT-ga ka dib waxa la ii xaqiijiyay in aan qabo tendonitis iyo arthritis- ma caadi baa? Waxaan tagaa Prednisolone oo aan tan haystay muddo 3 sano ah hadda, laakiin ma bogsanayo. Si sax ah ma loo daawaday?
Heidi Molin wuxuu leeyahay,
Hello. Waxaan maanta la soo toosay xanuunka garabkayga midig. Waligaa hore uma dhicin. Miyaan la xidhiidhaa lafopractor maanta mise kaligiis ma iska tagi karaa? Maxay tahay sababta ugu badan? Ma dareemayn xanuun markii aan seexanayay xalay.. Salaan Heidi Elvira
Suurtagal maaha inaan qiyaasno waxa xanuunkaaga garabka garabka uu sabab u yahay iyadoo lagu salaynayo xog yar. Xanuunka garabka garabka wuxuu noqon karaa sababtoo ah shaqada murqaha ama kala-goysyada, laakiin mararka qaarkood xubnaha iyo wixii la mid ah waxay sidoo kale tixraaci karaan xanuunka garabka iyo garabka.
Haddii aadan hubin, waxaan wici lahaa lafopractor ama takhtar - tilmaami lahaa calaamadaha iyo xanuunka - ka dibna u ogolow inay go'aansadaan haddii ay tahay inaad aragto, ama haddii tani ay tahay wax u eg inay ku tagi doonto dhowr maalmood gudahood.
Dareen xoriyada aad si gaar ah noogu sheegto (inta badan, way ka sii fiican tahay) calaamadahaaga / xanuunkaaga. Markaa waxa laga yaabaa inaan wax badan u tilmaami karno cilad gaar ah.
Todobaad wanaagsan iyo soo kabasho wacan.
Britt Sagmoen wuxuu leeyahay,
Hello. Waxa la igu sheegay xanuunka polyneuropathy oo ku salaysan calaamado ay ka mid yihiin dareenka barkimada cagahayga hoostooda, dhogorta sharabaadyada lugahayga. Ma istaagi karo suulashayda mana bogsan karo. Kabuubyo ilaa bartamaha lugta. Waqtiyo aan degganayn. Ma aha xanuun, laakiin aad u aan raaxo lahayn. Jimicsiga barkad kulul oo aad u badan. Iyaga oo la yaabban haddii aad khibrad u leedahay iyo malaha talo. Salaam. Britt.
1) Miyaa la sameeyay baaritaanka sawirka ogaanshaha dhabarkaaga? Calaamadaha aad qeexday waxay badanaa ka soo baxaan laf-dhabarka ama disc herniation weyn. Tani ma wax la baadhay baa?
2) Miyaad tagtay baadhis neerfaha oo leh neurography?
Hey, Alexander. Waad ku mahadsantahay jawaabtaada. Waxa la iga qaaday MRI dhabarka iyada oo aan wax natiijo ah laga helin. Ma aan tagin dhakhtarka neerfaha. Waxaa tijaabiyay GP, mana uusan shaki ka qabin cudurka. Sidoo kale ma jiro cudur ka hooseeya oo la helay. Aniga qudhaydu waxaan ku fekerayay inay wax ku yeelan karto dheef-shiid kiimikaad hooseeya iyo isticmaalka levaxin, laakiin taasi waa uun fikir aan qabo. By habka, ku bilaabay daaweeyaha gacanta. Haddii kale, waxaan gartay in wax walba ay runtii igu tiirsan yihiin nafteyda. Jimicso, socod badan oo aan ugu yarayn: Kor u qaad niyadaada. Jid ahaan, waxaan ahay 71 jir, laakiin waxaan doorbidayaa inaan firfircoonaado sanado badan oo kale. Ma fududa in la helo qof arrintan wax ka og, markaa waxaan u arkay fursad aan wax yar kaa ogaan karo. Salaam. Britt
Liv marit håland wuxuu leeyahay,
Hi! Waxaan leeyahay ayeeyo qaba ALS. Aniga laftaydu waxaan ku bilaabay xoogaa dhib la mid ah tii ay iyadu haysatay. Gacantayda midig aad bay u kabuubyo tahay oo mararka qaarkood ma awoodo inaan xajisto waxyaabaha. Waxaan ogahay inay tahay mid la iska dhaxlo marxaladda saddexaad oo labadii iga horreysay ay imtixaan qaadeen iyo kuwa caafimaad qaba. Waxyaabo kale ayaan la halgamayaa sidoo kale… ma heli karaa?
Nasiib darro, kama jawaabi karno su'aashan halkan. Haddii aad ka welwelsan tahay, waxaan kugula talineynaa inaad kala hadasho tan GP-gaaga - kaasoo kuu gudbin kara takhasusle iyo baaritaan dheeraad ah.
Hege Amundsen wuxuu leeyahay,
Hello. Dawakhaad gaar ah ayaa igu dhacay 17 sano. Waxay bilaabatay markii aan uur yeeshay nidaamkayga anoo 40 jir ah. Ku dhowaad mar kasta oo aan tago skiing ama dibadda dabiiciga ah, waxaa igu dhaca " suuxdin", lallabo iyo matag. Waxay u egtahay inaan helin ogsijiin ku filan maskaxdayda. Tani way dhaafsiisan tahay tayada nolosha waxayna i hor istaagtaa. Waxaan maray sahanno, laakiin waa ilaa hadda. I salaan qof raba inuu kaco oo haddana soo baxo
Halkan waxaan ku weydiin doonaa xoogaa su'aalo ah oo waxaan rabnaa inaad u tiro koobto sida hoos ku qoran - HAA / MAYA ka jawaab:
1) Ma la kulantaa neefta oo kugu yaraata / oo aan laguu oggolayn inaad neefsato?
2) Ma suuxday ama ma dareentay inaad miyir doorsoon tahay?
3) Ma ku haysaa walaac?
4) Miyaad leedahay garaaca wadnaha oo degdeg ah?
5) Ma leedahay garaaca wadnaha oo isbedelay?
6) daciifnimo guud?
7) matag? (HAA)
8) Ma dareemaysaa daal?
9) Madax xanuunka? Hadday haa tahay, meeqa jeer?
10) Wadnaha garaaca wadnaha?
Waxaan rajeyneynaa inaan ku sii caawinno.
Waxaan tilmaamaynaa in marka ay dhacdo dawakhaad dabadheeraad ah, ay muhiim tahay in shaqada wadnaha uu baaro GP - ma samaysay dhawaan?
Hi, ka dib markii aan ku dul socday tiles in ka badan hal toddobaad, waxaa i xanuun ba'an ka dareemay cagahayga hore.
Waxa la iga qaaday raajo iyo MRI - maaha jab daal ama neerfaha Morton. Bararka qaarkood ayaa laga helay cagaha hore, laakiin qiyaastii 14 maalmood ka dib daaweynta Naproxen, xanuunku isma beddelo. Waxaa xanuunkaan igu dhacay tan iyo sanadka cusub, isla markiiba 3 bilood. Aad bay ii xanuunaysaa in aanan cagahayga ku socon karin oo aan isticmaali karin dhinacyada cagta iyo cidhibta markaan socdo. Maxay tani noqon kartaa? Waxaan hore u lahaa fasciitis plantar, laakiin tani la mid maaha nooca xanuunka.
Fadlan ma noo sheegi kartaa halka aad sawiradan ka qaadatay? Oo markii la qaatay haddii xanuunku dhacay? Jabka daalku wuxuu qaadan karaa waqti ka hor inta uusan ka soo muuqan raajo - caadi ahaan CT-ga aad isticmaasho si aad u hubiso in uusan ahayn.
Ma lagu baadhay lafopractor casri ah (mid aan lahayn mishiinka raajo ee rugta caafimaadka!) Mise daaweeyaha gacanta? Kooxahan shaqadu waxay samayn karaan imtixaano (ay ku jiraan tijaabooyinka gariirka) si loo hubiyo inay u badan tahay inuu jiro jab kadeed oo cagahaaga ah.
Waxaan sawirada ka qaaday Aleris 3-4 usbuuc ka hor. Waxay ahayd qiyaastii 1,5 bilood ka dib markii uu xanuunku dhacay, waxaan qaatay raajo, 2 bilood ka dib markii xanuunku yimid waxaan qaatay MRI. La iima daawayn lugta, laakiin hadda (ugu dambayntii) waxa la ii gudbiyay dhakhtarka lafaha si uu ula socdo.
Maxaad u tagi wayday daawaynta muxaafidka ah haddi aanay jirin natiijooyin bahal ah, xumaan ama dhaawac leh oo sawirada ku jira? Xanuunku wuxuu sidoo kale noqon karaa sababtoo ah cidhiidhi, muruqyo aan shaqaynayn iyo kala-goysyada cagta (iyo lugta hoose) - dhab ahaantii, tani waa sababta ugu badan ee xanuunkan oo kale. Gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo in lagugu sameeyay raajada iyo MRI labadaba, tani waa tan ugu badan. Haddii kale waxay noqon kartaa muhiim xoojiya sinta, murqaha canqowga iyo kubka, maadaama kuwani ay ku xiran yihiin shaqada cagta - gaar ahaan nuugista naxdinta iyo culeyska saxda ah.
Elisabeth Berner Tørnblad wuxuu leeyahay,
Hello. Waxaan ahay gabar 39 jir ah, waxaan helay cudurro kala duwan sannadihii ka dib markii la igu dhuftay 2000; dheef-shiid kiimikaad hooseeya, fibromyalgia, garaaca, xanuunka muruqa ee daba-dheeraada, walaaca / niyad-jabka. Waxaan filayaa in aan isku dayay badi daawaynta 17kii sano ee la soo dhaafay; acupuncture / reflexology. Tababarka. Dhakhaatiirta laf dhabarta, daaweeyaha jimicsiga, daaweeyaha gacanta marar badan, rugta caafimaadka 4 jeer, isbitaalka xeebta ee Stavern, Vikersund spa, daawo badan.
Jimicsigu wuu i xanuunsadaa - kaliya si firaaqo ah ayaa marmar u socdaa. Dabadeed waxaan dareemaa jahawareer, aad baan u daalanahay oo u daalanahay - waan seexan karaa mar walba - laakiin gabadh baan haystaa oo dhibteeda ayay qaadataa. Xanuun 24/7. Madax xanuunka saacad walba. MRI, raajada ect ma muujinayo dhaawacyo ama wax la mid ah. Ma laha tamar haba yaraatee. Wax caawiya ma jiro. Acupuncture iyo reflexology waa xanuun yareeya laakiin waxba ha ka qaban sababta. Waxaas oo dhan dartood waxaan noqday mid aad u cayilan, waxaa lagu sameeyay qalliin caato ah 2015, waxaan lumiyay 30 kg - laakiin ka feker dhaqdhaqaaq la'aanta iyo daawada ayaa iga hortagaya natiijada Max. Waxa aan dareemaya in aan wax yar ka tanaasulay oo ay dhakhaatiirtu iska daayaan, laakiin waxa ay rabaan in ay ka fiicnaadaan oo ay ka sii shaqeeyaan nolol maalmeedka iyada oo aan dhammaan xanuunka / tamar yar. talo ma ii haysaa?
Hi ☺ In ka badan 1 bil ayaa cagteyda midig iga haleelay suul qariib/xanuun ah. Midka ku xiga Lilletåen. Dusha sare. Xagga ciddida ama isku-dhafka 1aad. Waxa ay dareema xanuun/dareen si uun. Gaar ahaan xulashada kabaha "qaldan", tusaale ahaan kabaha kabaha. Laakiin waxa ugu xun markaan xidho / iska bixiyo sharabaadada. Mise salaaxid? Waxaan qabaa Lupus, Fibromyalgia iyo Hypermobility si aan u magacaabo dhowr. Waa maxay? Maxaase la samayn karaa?
Tani waxay u ekaan kartaa Morton's Nevrom.
Neuroma Morton wuxuu inta badan ku dhacaa inta u dhaxaysa metatarsals labaad iyo saddexaad ama inta u dhaxaysa metatarsals saddexaad iyo afraad. Xanuunku wuxuu noqon karaa marmar fiiqan, shoog oo kale ah waxaana sidoo kale jiri kara kabuubyo ama hoos u dhac dareenka aagga ay dhibaatadu saameysey. Magaca kale ee cilad-sheegiddu waa Morton's syndrome.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan daaweynta iyo tallaabooyinka suurtagalka ah ee xiriirka sare.
Jannicke wuxuu leeyahay,
Hi ? gabar 31 jir ah.
Waxaan la dhibtoonayay cudurro muddo 7 sano ah waxaana la ii sheegay in uu jiro xanuunka tendonitis ka dib qallafsanaanta miskaha iwm ilaa dhowr jeer. 2 sano ka dib waxaan u tagay dhakhtar takhasus ah oo kaliya oo i siiyay cortisone, iyo baarista hypothyroidism (2010) iyo endometriosis (2010).
Waxay caawisay dhowr bilood ka dibna mar kale ayay ahayd. Qiyaastii 2 sano ka hor ayaa la i luntay dareere iyo xanuunka jilibka, waxaa la ii sheegay in aan bukay oo la ii sheegay in aan nasto, laakiin waxba ima tarin. Marar aan la tirin karin oo MRI iyo raajada lagu arkay iyada oo aan jawaab laga helin GP-ga.
Kadib waxaan ballan la yeeshay martina Hansen (Maarso 2017) waana la kulmay waana la rumaysnaa. Wuxuu qaatay MRI wuxuuna helay 3 cudur oo kale! Morton's syndrome, fibromyalgia, hla-b27 togan. Hal warqad oo keliya ayaan ka helay dhakhtarkayga iyada oo aan wax sharraxaad ah laga helin, kaliya waxa la ogaaday. Waxa la ii soo gudbiyay qalliinka Morton's syndrome dayrtan inta soo hadhayna aniga qudhayda ayaan google-ka galiyay. Oo igu akhri boggan! Markaa mahadsanid.
Maxaan sameeyaa hadda? Waxaan maalin walba ku xanuunsadaa xanuunka gacanta midig, cagaha, jilbaha, miskaha, qoorta iyo dhabarka. Looma dulqaadan karo in aad shaqada aado haddeer iyo ka dib, laakiin waan u sameeyaa. Makhribkii iyo habeenkiina lacag baan ka qaataa.
Waxaan rabaa inaan jimicsi sameeyo, laakiin xanuunka hadda waxaan qayb ka qaataa yoga, inkastoo aanan si buuxda u qaadan karin jimicsiga sababtoo ah dhaqdhaqaaqa. Waxaan aadi karaa socod, laakiin xoogaa xanuun ah oo cagahayga hoostiisa ah. Waxaan la halgamayaa kor iyo hoosba.
Ma ihi gabadh iska fadhida ama nolol degan haysata, laakiin tayada nolosha ku wayday taas awgeed.
Waxaa la i siiyay ballan cusub oo takhasus leh Julaay 3, 2017 si aan shaybaar cusub u qaado, laakiin waxaan u maleynayaa inay aad u dheer tahay in aan sugo xanuunkan.
Maxaan sameeyaa? Daawooyin, jimicsi?
Waad ku mahadsan tahay weydiintaada iyo sharraxaada buuxda.
Wax badan bay hal mar ahayd, runtiina waxaan fahamsanahay in tani ay tahay in ay la kulmaan niyad-jab cajiib ah.
1) xanuunka myofascial ee joogtada ah: Waxay u muuqataa in aad qabtid xanuunka myofascial oo ballaaran. Ma raadsatay nooc kasta oo daawayn ah? Waagii hore, waxay leedahay, waxyaabo kale Waxaa la xaqiijiyay in acupuncture ay yareyn karto fibromyalgia. Waxaan kugula talineynaa inaad ku darto daaweynta xanuunka iyo jimicsiga tartiib tartiib ah - daaweyntani waxay kuu fududeyn kartaa inaad ka gudubto bilaha ugu horreeya ee jimicsiga.
2) Jawaab celin togan: Waxaan runtii aad ugu mahadcelineynaa inaad u aragto mareegahayaga mid xog badan leh. Xusuusnow inaad sidoo kale codsan karto mawduucyada naga maqan boggayaga oo aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan.
3) Tababar iyo jimicsi: Yoga, pilates, miyir-qabka iyo ka-fiirsashada dhamaantood waa qiyaaso wanaagsan. Safarrada dhul qallafsan (doorbidayaa kaymaha iyo beeraha) sidoo kale waa tababar heersare ah, waxayna u shaqeysaa yaabab 'maskax daalan'. Waxaan runtii u maleyneynaa inaad jimicsi sameysid - wax yar maalin kasta - laakiin xusuusnow in inta jeer ee xanuunada ah ee aad qabtid, ay jirto fursad ah in tani ay si ku meel gaar ah (dhowr bilood) u kiciso xanuun badan ka hor intaysan soo roonaan. Ha quusan - si tartiib ah u dhis laakiin hubaal mar kale.
4) Khabiir: Waa maxay nooca khabiir ee aad ballan la yeelatay?
Way fiicantahay haddii aad jawaabta u tiriso sida kor ku cad - tani waa wada hadalka ugu cad cad ee suurtogalka ah. Waxaan kuu rajeyneynaa soo kabasho aad u wanaagsan waxaana rajeyneynaa inaan ku sii caawinno.
Kari Gro Tronstad Togstad wuxuu leeyahay,
Waxaan ahay 74 sano jir waxaana ka xanuunaya lugta midig ee gumaarka. Lugta kuma talaabsan karo aroortii laakiin ka dib way dhaaftaa. Markaa waa uun gumaarka. Maxay tani noqon kartaa?
Waxaa jiri kara dhowr waxyaalood. Laakiin ma waxaad leedahay xanuun la'aan iyo asymptomatic inta ka hartay maalinta? Si ay u xanuunsato kaliya markaad lugtaada ku talaabsato subaxdii?
Xanuunka aad la kulanto lugta hoostiisa waxay u badan tahay inay sabab u tahay xanaaqa neerfaha sciatic - laakiin gumaarka xanuunka laftiisa waxaa sabab u ah tiro baaritaanno ah, oo ay ku jiraan iliopsoas (jilicsanaanta sinta) myalgia ama dhibaatooyinka sinta (waxa laga yaabaa inay xanuunka u keento gumaarka).
Waxa kale oo ay sabab u noqon kartaa xaaladaha neerfaha ee dhabarka oo cidhiidhi ah. Waxaan ku talin lahaa in uu baaro dhakhtar leh ogolaansho dadweyne (chiropractor ama daaweeyaha gacanta), maxaa yeelay kuwan sidoo kale waxay xaq u leeyihiin inay tixraacaan haddii uu jiro shakiga laf dhabarta stenosis ama wixii la mid ah ee dhabarka.
Eva Vasseng wuxuu leeyahay,
Hello. Sidee buu goutku u saameeyaa sambabada? Wuxuu tagay Klitreklinikken oo hadda ku soo laabtay guriga. Leh ogaanshaha neefta aan la cayimin. Gout ha yeelato iyada oo aan lagu helin baaritaan dhiig oo sidoo kale qaaday raajadii caadiga ahayd. Waa la dhibay ilaa da'da 12-13, waa 56 jir. Waxaa ku dhacay qallafsanaan dhabarka ah iyo xanuun ku dhaca dhammaan kala goysyada mararka qaarkood. Paracetamol-ka caadiga ah waxba ma tarto. Inta badan waxaan dareemaa daal iyo daal. Hooyaday sidoo kale waxay leedahay gout, markaa qoyska ayay ku dhex jirtaa haddii ay muhiim tahay.
1) Sidee lagu helay ogaanshaha gout haddii ay jiraan baaritaanno dhiig oo xun? Oo haddii ay sidaas tahay, waa noocee ah gout? Waxaa jira dhowr boqol oo nooc oo kala duwan. Waxaan u baahanahay inaan ogaano tan si aan u awoodno inaan ogaano inay wax xiriir ah la leedahay neeftaada.
2) Waa maxay nooca gout ee hooyadaa qabtaa?
Hooyaday waxay qabtaa xanuunka lafaha iyo lafo-xanuunka. Sida aan sheegay, ma garanayo sida saxda ah nooca gout ee aan qabo. Laakin wuxuu leeyahay qallafsanaan iyo xanuun dhabarka iyo haddii kale xanuun jilibka, xusulka, iyo sidoo kale kalagoysyada kale. Waqtiyadii ugu dambeeyay, rasaasta bilawga ah ayaa ka soo muuqatay kala-goysyada faraha
Ma garanayo sida loo dhigay markii tan la sameeyay markaan ahaa 12-13 sano jir. 1-2 sano ka hor waxaan ka qaaday raajada dhabarka maadaama aan xoogaa xanuun iyo qalafsanaan halkaas ku hayay. Laakiin waxaa la ii sheegay in jeexjeexa iyo jeexjeexa uu ahaa sidii la filayey da'daydii (56), wax intaas ka badan lama qaban. Laakin markaas waxaan ku xanuunaa dhowr laabatooyin sida jilbaha, xusulada, qoorta iyo waqtiyadii ugu dambeeyay koofiyada ayaa ka soo muuqday rasaas yar yar oo ku taal kala goysyada faraha iyo. Mararka qaarkood waxaan ku xanuunsadaa dhammaan jirkayga, badanaa marka cimiladu isbedesho. Laakiin sidoo kale si kale. Mararka qaarkood waxaa i qaadi kara dhaxan, anigoon jiran. paracetamol-ka caadiga ah kama caawinayo xanuunka, laakiin ma jirto wax kale oo la qaato. Tani way adagtahay maadaama aan u shaqeeyo kalkaaliye ahaan, mararka qaarkood waan daalanahay oo waxaan daalanahay dhowr maalmood.
Hooyaday waxa ay qabtaa lafo-xanuun iyo lafo-xanuun
Laakin sidee buu gout u saameyn karaa sambabada?
Sissel wuxuu leeyahay,
Hello. Xanuun badan baa cagahayga hoostiisa ku haya. Gaar ahaan lugta midig. ciribta hoosteeda, agagaarka ciribta. Oo markaan socod bilaabo, waxaan ku xanuunaa qaansada hoosteeda inta u dhexeysa suul yar iyo ciribta. Oo wax ka xumaaday wadajirka hallux valgus. Iyo xanuunka gubanaya lugaha. Waxay leedahay fibromyalgia iyo dheef-shiid kiimikaad hooseeya. Wax shaqo ah ma ku leedahay?
Evy Aune wuxuu leeyahay,
Waxaan ahay gabadh 27 jir ah oo dareemaysa in aan waayay wax badan oo nolosha ah oo aan bilaabay inaan caajiso. Ma garanayaan meel aan mar dambe sameeyo, kuwa igu xeeran ma dareemaan sida aan dareemo mana dareemaan dhakhtarku si dhab ah ayuu ii qaadanayaa. Waxaan rabaa in noloshaydii caadiga ahayd ay soo noqoto.
La halgama dawakhaad, dareemo in ay adagtahay in la neefsado, dareemo in wax dhuunta ku dhegan yihiin (wax la mid ah sida laga dareemo dhuunta marka la ooynayo), madax xanuun, dareemo daciifnimo (dareema in aan dumiyo), mararka qaarkood waxaan dareemaa sida aan dareemayo. hoos u dhig cadaadiska dhiigga oo dhegta madaxa ka yeel. Sidoo kale la halgamaya xanuun badan sinta / dhabarka / qoorta.
Tani waxay socotay muddo 1 sano ah dhawaan.
Psych wuxuu aaminsan yahay in tani ay tahay walaac iyo niyad-jab. Anigu tan si buuxda kuma raacsani, Haa, waan cabsadaa marka jidhku sidan u dhaqmo. Markaa waxaan aad ugu raacsanahay in welwelku yahay wax ka yimid xaaladdayda.
Waxaa laga qaaday madaxa iyo qoorta, kani dhakhtarku wuxuu sheegay in ay u muuqatay mid wanaagsan.
Wadnaha waxa la eegaa laba jeer 2 saac gudahood. Wax walba waa sax. Wadnuhu waa garaaci jiray hal mar, laakiin tani waxay ahayd mid caadi u ah dadka da'da yar.
Baadhitaannada dhiigga sidoo kale way fiican yihiin, ma garanayo waxa la hubiyay. Laakiin waxaa jiray dhowr wareeg oo muunad ah.
Hal mar ayaa isbitaal la dhigay. ka dib aad baan u dawakhsanaa oo waan miyir beelay, waxaa la igu hubiyay qolka gargaarka degdega ah waxaana hoos u dhacay sonkorta dhiiga (waxaan u malaynayaa inay ahayd). Tan waxaa la hubiyay dhowr jeer intii lagu jiray dhammaadka wiigga ee aan ku jiray. Laakiin waxay ahayd qolka gargaarka degdegga ah oo keliya inay ka heleen jawaab "xun" baaritaanka. Waxay u maleeyeen inay jirto sabab nafsi ah oo mid ka mid ah imtixaanada u noqday "xun". Waxaa laga saaray fariinta ah in ay jirto sabab maskaxi iyo muruq ah oo aan sidaas u dareemayo.
Waxa kale oo la igu sameeyay raajada raajada dhawaan, maadaama aan xanuun badan halkaas ka dareemayo oo aan dareemay rasaas oo aan arkay isbeddello ku yimid ibta naaska. Fiix ayaa la helay. Cusbitaalka ayaa sidaas la ii sheegay, laakiin dhakhtarku ma sheegin cyst. Waxay yiraahdeen dhib malaha.
Waxaa la iga qaaday raajada dhabarka hoose/miskaha hadda waxaana la ii sheegay inaan xiranahay sinta iyo inta u dhexeysa sinta iyo dhabarka hoose. Wax yar oo aad u culus ayaan ahay, markaa waxaa la ii sheegay in waxa kaliya ee aan samayn karo ay tahay in aan miisaanka dhinto.
Waxa aad isku dayaysay in aad dhimato miisaanka ilaa 5 sano hadda, iyada oo aan wax natiijo ah laga helin. Hadda waxaan qaataa xanuun baabi'iyaha xanuunka si kastaba ha ahaatee. Isku day inaad lugayso / jimicsi sameyso laakiin kaliya waxay helaysaa xanuun badan iyo dawakhaad. Markaa waa mid aad u adag oo xanuun badan.
Waxa kale oo aan odhan karaa waxaan ku dhashay dysplasia sinta (ku jiifso barkin ilaa aan ka gaadhay 9 bilood) waxaanan leeyahay jab jab ah oo ku yaal L1.
-Waxa aan la yaabanahay waa haddii aan yeelan karo calaamadahan oo kale sababtoo ah xirashada iyo jeexjeexa?
Maxaan samayn karaa si aan u fiicnaado?
Mats Andrén wuxuu leeyahay,
Hi, waxaan helay dhaawac shaqo 12 bilood ka hor. Xiro aad u xanuun badan oo u dhexeeya garbaha garbaha, murqaha iyo lafdhabarta. Ma roonaan. Horay u tababaray xoog badan. Sannadkii ugu dambeeyay, way sii yaraanaysay si ay u sahlanaato jimicsiga. Jimicsi badan ayaa sidoo kale layga jaray gabi ahaanba. Rajaynaynaa in aad la kulantay wax la mid ah si aad u ogaato waxa ay tani noqon karto?
Liistada ogaanshaha suurtagalka ah ayaa dheer oo leh macluumaad xaddidan - laakiin tan ugu caansan waa isku-darka cillad la'aanta murqaha iyo shaqada wadajirka ah. Daawaynta dhamaystiran ee murqaha iyo kala-goysyada marka lagu daro tababaro gaar ah waa inay xal kuu noqotaa.
Gabar 20 jir ah wuxuu leeyahay,
Waa gabadh 20 jir ah oo laga helay daal daal ka dambeeya (G.93.3)
Waxa uu qabay xanuunka dhabarka/qoor ilaa dhalinyaradii.
Waxaa i baaray rugta dhabarka iyo qoorta, halkaas oo aan ku daciifay qoorta / muruqyada qoorta, murqaha caloosha, xanuunka dhabarka oo ka weyn kan caadiga ah. Waxyaalaha intooda badani waxay ahaayeen kuwo aan caadi ahayn, marka laga reebo inaan aad u jilicsanahay, laakiin aan ahayn hypermobile ee jirka. Sida aan sheegay, waxaan qabaa xoogaa xanuun ah iyo waxa i dhibaya nolol maalmeedka waa xanuunka madaxa, iyo hoos u dhaca dhinaca midigta oo dhan, ilaa cagta.
Markii aan u tagay dhakhtarka cilmi-nafsiga ee cilmi-nafsiga waxay fiirin kartaa jirka meesha ay joogaan murqaha kacsan, iyo muruqyada ay yihiin / aad u daciifsan yihiin oo aan ku mashquulin meeshii loogu talagalay, si murqaha kale ay u shaqeeyaan si dheeraad ah, taasina waxay keentaa xanuun iyo dheelitir la'aan. taas oo aan fahmay.
Ka dibna waxa ay dhab ahaantii ahayd dhinaca bidix ee ugu xasilloon, inkasta oo aan la kulmay in ay ku jirto dhinaca midig ee xanuunka. (ka dibna waxaan sameeyay jimicsi la takhtarka fiisiyoterabi ee dharbaaxo leh laastikada agagaarka miskaha iyo lugaha, markii hore waxay lahaayeen laastiigyo badan, laakiin ugu dambeyntii waxaan ku guuleystey in aan isticmaalo dharbaaxada si loo dejiyo murqaha) Waxaan si adag uga shakisanahay in kuwani ay yihiin isla arrimaha aan anigu kor lagu tilmaamay.
Laakiin sidee baan u aadi karaa dhakhtarka hadda jira / daaweeyaha jimicsiga si aan u helo daawaynta saxda ah / u helo sababaha tan sameeya? Maxaan samayn karaa naftayda? inta badan aad bay ii xanuunsataa kubbadaha duugista oo aan dawakhmo. Jidhkaygu uma dulqaadan karo jimicsiga badan, haddii kale dabcan waxaan ku tababaran lahaa oo aan aad ugu socon lahaa dhul qallafsan sidii aan samayn jiray ka hor intaanan xanuunsan.
Waxaan dareemayaa xanuunku inuu sii kordho maalin kasta, iskuna day inaad isticmaasho kubbadaha duugista si aad u fududeyso, laakiin waxaan u maleynayaa inay aad u ballaaran tahay hadda oo aniga naftayda aan xallin karin.
talo ma haysaa?
Matilda wuxuu leeyahay,
Waxaan ahay gabar 16 jir ah waxaana soo gaaray dhaawac jilibka ah oo aan u maleyneyno inuu yahay jilibka boodboodka. Aad ayaan u hubaa haddii ay taasi jirto, laakiin maadaama aan xanuun dareemo marka la igu cadaadiyo meel ka hooseysa jilbaha, ma jiraan dhaawacyo badan oo beddelka ah. Sidoo kale waxaa i xanuuna marka lugtu laabato oo cadaadis la saaro oo la riixo. Jimicsigu ma ka sii daraa? Waxa ay damqaysaa oo kaliya jimicsiga ka dib, laakiin marnaba inta lagu jiro jimicsiga marka laga reebo dabacsanaan. Waxaan tababaraa xoog badan oo lugta ah, kaas oo lagu taliyay jilibka jumpers, laakiin ma ogaanayo wax saameyn ah. Wax talo ah?
Kristin wuxuu leeyahay,
Waxa laygu qalay suulka midig ee suulasha birta ee cisbitaalka rheumatism ee Haugesund dayrtii 2014 oo hadda sannadkii hore arrimuhu way ka sii dareen. Mararka qaarkood, waxa aad dareemeysaa in ay jiraan malaayiin cirbadood oo ku dheggan jilibka suulasha - dareenka iyo in jilibku sii weynaatay. Tani suurtogal ma tahay wax lagu samayn karo, mise waa inaan xanuunkaas la noolaadaa?
Waxaan la halgamayay jilbaha boodboodka muddo ka badan nus sano hadda, iyada oo aan wax horumar ah la helin inkasta oo aan la tirin karin jimicsiyo, daawaynta hirarka cadaadiska iyo hawlo adag oo aan lahayn. Ugu dambeyntii wuxuu helay MRI, natiijaduna waa tan:
Menisci aan fiicneyn, seedaha cruciate iyo seedaha lateral. Dhumuc yar ee xuubka patellar wuxuu u dhow yahay, calaamad xoogaa sare u kacday. Natiijadu waxay ku habboon tahay xanuunka loo yaqaan 'tendinosis' marka lagu dhejiyo seedaha patellar. Bararka khafiifka ah ee ku xiga ayaa isbeddel ku yimaada qooynta. Waxay ku siinaysaa wadajirka femorotibial waa carjawda articular oo qumman. Waxaa jira cillad lafo-osteochondral ah oo ku taal patella xagga dambe, malaha waxa loogu yeero cillad lafaha, cillad korriin ah. Halkan waxaa jira jeexjeexyo ku yaal carjawda articular iyo cillad ku jirta saxanka subchondral, bararka dhuuxa lafta ku xiga. In tani ay leedahay muhiimad caafimaad lama hubo.
R: Tendinosis ee jilibka patellar ee ku xiran cirifka hoose ee patella. Cilad lafaha kor u kaca ee patella sida kor lagu sharaxay.
Waxaan u maleynayaa inay tahay wax la yaab leh in tendinosis uusan si fiican u helin inkasta oo la raacayo dhammaan talooyinka, sidaas darteed waxay u maleynayaan cilladda osteochondral waxay yeelan kartaa muhiimad. Taasi waa midda abuurta xanaaqa taas oo macnaheedu yahay in tendonitis uusan waligiis ka roonayn. Tani macno ma samaynaysaa? Iyada oo ku saleysan sharraxaadda, tendonitis iyo cilladda lafaha lafaha ma ku yaalliin aagagga ku xiga?
Ka dib goosgoosyo kala duwan, sidoo kale ma fahmin in cilladda osteochondral ee noocan oo kale ah ay iskeed u fiicnaan karto. Wax ma ka qori kartaa taas?
Waxaan sidoo kale leeyahay jilibka boodboodka laakiin waxaa la ii sheegay in aysan waxba ka jirin laakiin waa inaad la qabsato markaad ogaato waxaad u dulqaadan karto iyo haddii kale.
Su'aalaha ku saabsan MS wuxuu leeyahay,
MS, mid ka dib ma yeelan karaa calaamado soconaya hal daqiiqo ilaa ugu badnaan 5 daqiiqo? Suuxdin gaaban oo aan si toos ah u socon karin, arag ceeryaamo / daruuro leh iyo curyaan sinta ah. Suuxdintu waxay u dhowdahay balbalada laakiin sidoo kale waxay soo jeedi kartaa muddo bil ah.
Gubashada daran oo ka hooseysa cidla cagta oo dhan. Ilaa xadka baaldi xabad baraf ah meesha yaalay. Ma jiro farqi u dhexeeya culeyska ama maaha, laakiin "daal" marka lagu daro culeyska dheeraadka ah. Gout ayaa la xaqiijiyay sanado badan ka hor, laakiin aragtida jilibka tani gabi ahaanba waa la jaan qaada. Sidoo kale waxa uu leeyahay xanuun aad u daran cududda/gacanta iyo anqawyada, haddii ay wax xidhiidh ah yeelan karto, laakiin waxa uu ilaa hadda si sax ah ula xidhiidha gout. Muxuu noqon karaa gubashada? Waxay haysatay ku dhawaad ​​11/2 sano.
Fadlan su'aashaada hoos geli mawduuca khuseeya - tusaale. Cag xanuun. Mahadsanidiin horraan.
PS - Sidoo kale xor u noqo inaad qorto wax ka badan intaad ku qortay su'aashaada sare. Macluumaadka badan ayaa ka sii fiicnaan doona, maadaama jawaabtu ay ku jiri karto faahfaahinta ugu yar.
Nina Minatsis wuxuu leeyahay,
Hello. Muddo 5 bilood ah waxaan la halgamayay madax-xanuun kacsanaan ah. Muddo 1,5 sano ah waxaan la halgamayay tinnitus daran. Waxay u muuqataa sida haddii ay jiraan xiisado muruqa in ay degeen dhinaca bidix iyo hadda waxaan la tag garabka bidix sare, waxa ay si sax ah u degeen markii aan u duugo aad u adag oo kaliya in ka badan sanadka cusub. Waxay u egtahay inaan maqlo tinnitus in ay jirto xiisad garabka iyo agagaarka madaxa. Muruqyada waxa aan ka dareemayaa gunuunac, haddii aan miisaan ku qaadona, muruqyadu garabka ayay gariiraan. Waxaan ka baqayaa in aan daweeyo garabka tan iyo markii aan duugay ay u dambaysay dhibco kiciya dhegta gadaasheeda, in ka badan dhegta iyo wejiga noqday mid aad u firfircoon, helay welwel iyo hurdo liidata, laakiin in yar ka roon hadda. Laakin waa in aan tan meel dhigaa, oo aan awoodin in aan shaqeeyo ilaa garabka uu joojiyo firfircoonida sida hadda. Waxaan u kala bixiyaa oo aan sameeyaa jimicsiyo kale qoorta muddo nus saac ah maalin kasta. Waxaan aadaa dhakhtarka jimicsiga maskaxda, markaa waxaan hadda baranayaa sida loola tacaalo walbahaarka, laakiin waxaan seegay dabagalka murqaha oo waxaan ka baqayaa inaan lacag badan ku bixiyo daaweynta aan shaqaynayn. Intee in le'eg ayaan ku samayn karaa muruqa garabka ee firfircoon, xiisaddu miyay dagi doontaa wakhti ka dib mise waa in la daaweeyaa? Waa maxay nooca jimicsiga saxda ah iyo kuwa khaldan, ma kicin doonaan tan si aysan u shaqeyn. Waad ku mahadsan tahay Nina
Hello. Ma hubo meesha aan ku qori karo si aan u weydiiyo, laakiin waad ii soo gudbin kartaa haddii ay tani tahay meel khaldan. Akhri meel in antacids-ku ay keeni karaan dhaawac kelyaha mustaqbalka fog. Waxaa la igu dhejiyay Esomeprazole 40 mg, laakiin waxaan doortay 20 mg naftayda maadaama ay ka soo horjeedo ujeeddadeeda 40 mg. Kani ma diyaar garow ay tahay inaad ka digtoonaato ee la xiriirta dhaawacyada soo daahay? Waxaan isku dayay inaan joojiyo, laakiin ma shaqaynayso, markaa xitaa ma istaagi karo biyaha.
Sveinung wuxuu leeyahay,
Hi, waxaan qabaa curyaan maskaxeed Dhibaatadu waxay tahay in aan helo casiraad yar. Waxaan helaa daawaynta korontada ee dhabarka iyo jilibka, iyo in yar oo dhabarka sidoo kale - sababtoo ah miskaha qalloocan. Waxaan dareemaa in daawaynta hadda jirta ay u socoto ilaa maskaxda mararka qaarkood ka dibna waxaan dareemaa in aan taxaddaro markaan daawaynta hadda ka helo dhabarkayga.
Waxa la iga helay scoliosis, laakiin ha dareemin in tan si dhab ah loo qaatay ama in si fiican la ii baadho.
Tusaale ahaan, waxaan qaatay kaliya raajooyinka aragga sare iyo MRI ee dhabarka hoose.
Markii ugu horeysay ee laga helay dhabarka sare, ma aysan eegin inta kale ee dhabarka, kaliya ka dib markii aan wax badan igu tuujineynin xanuunka weyn ee dhabarka hoose ayaa la ii diray MRI oo sidoo kale la igu arkay. dhabarka hoose. Dhaqtarku aad uma caawinayo oo wuxuu leeyahay waxaan arki karaa lafopractor.
Laakiin waxaan ka baqayaa inaanan haysan dulmar ku filan oo ku filan iyo sawirada dhabarka oo dhan. Oo wuxuu ka baqayaa inuu sameeyo qalad. Ma garanayo inta shahaado ama wax aan ahay. Waxaana kaliya oo aan helayaa paracetamol si loo yareeyo xanuunka. Dhabarka sare had iyo jeer ma xanuuno, kaliya marka aan helo caabuqa xuubka xuubka fibromyalgia, halka dhabarka hoose uu si joogto ah u xanuunsado iyada oo aan loo eegin waxa aan sameeyo. Tani waxay ka baxsan tahay hurdada habeenkii. Waxayna si joogto ah halkaas uga dilaacday markaan soo jeesto tani aad bay u xanuunaysaa.
Ma hayo wax dabagal ah oo ku saabsan dhibaatooyinka dhabarka.
Waxaan markaa la yaabanahay sida aan u sii wado tan, si aan u helo dulmar wanaagsan oo ku saabsan scoliosis.
Maxaan samayn karaa si aan u helo nolol wanaagsan oo la xiriirta ogaanshaha, oo aan ahayn xanuun joogto ah.
Maxaan ka codsan karaa dhakhtarka inuu iga caawiyo?
Isku day daaweynta jimicsiga guul la'aan. Sidoo kale waxaan aadayaa socod badan. isku dayay yoga. Daaweynta kulaylka.
Waxaan u maleynayaa in tani ay tahay mid rajo la'aan ah. Oo anigu taladayda liita ma garanayo. Rajo inaad hesho caawimaad ama macluumaad halkan.
Dhanka kale, xanuunka loo yaqaan 'chiropractic' ma ii fiican yahay scoliosis? Ma caawin doontaa gabi ahaanba?
Waa ku daalay xanuunka joogtada ah, iyo hurdo xumo taas awgeed. Ma caadi baa in aan waxba laga qaban?
Waxay u yaqaanaan scoliosis dadka waaweyn. Marka hore waxan ogaaday 2 sano ka hor. Waxaan noqonayaa 33 jir sanadkan.
Lise wuxuu leeyahay,
Hello. Ninkeygu (73 jir) waa ordayaa, gumaarka ayaa dareemaya (oo laga yaabo in uusan fiiro gaar ah siinin dabadeed), hadda wax badan buu sameeyaa oo wuxuu u maleynayaa inay tahay fikrad wanaagsan. Laakiin ma hubo… waa maxay taladoodu?
Hi Lise, marka aad laadayso mishiinka doonyaha, waxa lagugu raran yahay qallafsanayaasha sinta-iyo fidiyeyaasha miskaha, iyo sidoo kale afduubayaasha iyo kuwa xidhidhiyaha. Ilaa iyo inta uu dhaqdhaqaaqa ku sameynayo xawli deggan oo kontorool ah, waa inaysan aad ugu adkeyn gumaarka. Noocyada kale ee lagu taliyay ee tababarka waxaa ka mid ah layliyo tababar oo gaar ah (sida ku cad kanaalkayaga youtube). iyada), baaskiil wadida iyo dabaasha.
Mashiinka wadista ma aha in uu u noqdo mid taban qofka xanuunka gumaarka qaba, laakiin sidoo kale waad saxsan tahay in ay fududaan karto in aad wax badan qaadato oo aad naftaada culeys saarto.
Tracey wuxuu leeyahay,
Hello. Waxa aan xanuun ka haleelaa dhabarka iyo badhtamaha lugahayga inta lagu jiro tabobar adag oo ku saabsan skis-ka iyo ku ordaynta jiirada dhaadheer. Ma garanaysaa waxa ay tani noqon karto iyo waxa aan samayn karo si aan u fiicnaado? Tani waa wax aad looga caroodo, marka aan tago tartamada oo aan dareemo in lugahaygu ay dumayaan.